နတ်သမီးပေးတဲ့ … ချစ်လက်ဆောင် – Grab Love Story
နတ်သမီးပေးတဲ့ … ချစ်လက်ဆောင်
၀ါသနာဆိုတာမျိုးကလေ … တယောက်မှာ တမျိုးဆီတော့ ရှိကြတာပဲ … တံဆိပ်ခေါင်းစုတာ ၀ါသနာပါတဲ့လူ … ရှေးဟောင်း ပစ္စည်း စုတာ ၀ါသနာပါတဲ့လူ … ကျွန်တော်လည်း … စာအုပ်အဟောင်းတွေ စုတာ ၀ါသနာပါတယ် … ထားပါတော့ဗျာ … ဘကြီးခန့်ဆိုတဲ့ … ကျွန်တော့် ဦးလေးက … လူ့ဂွစာဗျ … သူ့ဝါသနာက အဆန်း … ပုလင်းသေးသေးလေးတွေကို စုဆောင်းရတာ အရမ်းဝါသနာပါတယ် … သူက လူပျိုကြီး .. အင်းယားမြိုင်က ခြံထဲမှာ နေတာ … ကျွန်တော့်ရဲ့ မွေးစားအဖေ ကျေးဇူးရှင်လို့လည်း ပြောလို့ ရပါတယ် … ကျွန်တော်တို့က ပြည် ပေါင်းတည် ဇာတိ … ကျွန်တော် ဆယ်တန်းအောင်တဲ့နှစ်မှာ … ကျွန်တော့် မိဘတွေက ဆုံးသွားတော့ … အမေ့ရဲ့ အစ်ကိုကြီး … ဘကြီးခန့်က ကျွန်တော့်ကို … မွေးစားလိုက်တာ … ဆွေမျိုးဆိုလို့လဲ ဒီတူအရီးနှစ်ယောက်ပဲ ရှိတာ … ဘကြီးခန့်က … စိတ်ရင်းတော့ အရမ်းကောင်းတယ် … လူဖြောင့်လို့ ပြောရင်ရတယ် … ဘယ်လောက် ဖြောင့်သလဲဆိုရင် … ပေတံတောင် သူ့လောက်မဖြောင့်ဘူး … ရိုးရိုးသားသားနေတယ် … မနက်စောစောထ … ဘုရားရှိခိုး … လမ်းလျှောက် … ပြန်လာရင် … ကော်ဖီနဲ့ မုန့်စား … ပြီးရင် … သူ့အခန်းဘေးက … ပုလင်းတွေသိမ်းထားတဲ့ … မြေအောက်ခန်းကို ဖွင့် … ရှိသမျှပုလင်းတွေကို … အဝတ်သန့်သန့်လေးနဲ့ ထိုင်သုတ်တော့တာပဲ … ဘကြီးခန့်က အလုပ်မလုပ်ဘူးဗျ … အဘိုးလက်ထက်က အမွေတွေက … တော်တော်များတယ် … ဘဏ်ထဲမှာ အပ်ထားတယ် … နောက်ပြီး အင်းယားလမ်းထဲမှာ ခြံတခြံအမွေရတယ် … အဲဒီခြံကို နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတခုကို … ဒေါ်လာနဲ့ ငှားစားထားတာ … တလ သိန်း သုံးဆယ်လောက် ရပါတယ် … ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တူအရီးနှစ်ယောက် လောက်ငှပါတယ် … ပိုတောင်ပိုသေးတယ် … ဟော့ဟော့ရမ်းရမ်း သုံးကြတာမှ မဟုတ်တာ … ကျွန်တော့်ကိုလည်း တော်တော်ဂရုစိုက်ပါတယ် … အဖေအမေ ဆုံးထားတော့ … ကျွန်တော် စိတ်ညစ်နေမှာစိုးလို့ … သုံးချင်တာသုံးဖို့ … တလ သုံးသိန်း သုံးခွင့်ပေးထားပါတယ် … ကျွန်တော်က သိပ်မဝယ်တတ်ပါဘူး … စာအုပ်တွေ ဖတ်ရတာတော့ ကြိုက်တယ် … ဘကြီးခန့်က … ပန်းဆိုးတန်းမှာ … စာအုပ်တွေ လိုက်ဝယ်ပေးပါတယ် …ဘကြီးခန့်က … ကျွန်တော့်အပေါ်ကောင်းရှာပါတယ် …
ကျွန်တော်တို့တဲ့ နေတဲ့ … အိမ်လေးက … တထပ်တိုက် … ခပ်မှိုင်းမှိုင်း မီးခိုးရောင် သုတ်ထားပါတယ် … ဝင်ဝင်ချင်းက ဧည့်ခန်း … ဘယ်ဘက်ခြေရင်းက … ကျွန်တော့်အခန်း … ကျွန်တော့်ဘေးမှာ တခန်းလွတ်တယ် … ဧည့်သည်လာရင်တည်းဖို့ … တခါမှလည်း ဧည့်သည်မလာပါဘူး … ညာဘက်ခေါင်းရင်းက … ဘုရားခန်း … ဘုရားခန်းဘေးက … ဘကြီးခန့် … နေတယ် … အခန်းတိုင်းမှာ … ရေချိုးခန်း အိမ်သာ ပါပြီးသား … နောက်မှာတော့ ထမင်းစားခန်းနဲ့ … မီးဖိုခန်းရှိတယ် … တထပ်တိုက်ပေမယ့် … အောက်မှာ မြေအောက်ခန်းရှိတယ် … ဘကြီးခန့် အခန်းထဲကနေ ဝင်ရတာ … သူ့ပုလင်းတွေ ထားတဲ့ အခန်းပေါ့ … အိမ်ဘေးမှာတော့ … ရေကူးကန်လေး ရှိပါတယ် … ဘကြီးခန့် ပြောတာတော့ … ရေမကူး ဖြစ်တာ ကြာပြီတဲ့ … ဒါပေမယ့် … ရေကူးကန်က … သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ရှိပါတယ် … ဘကြီးခန့်က … တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါတယ် … ကျွန်တော်ရောက်လာတော့ … ကျွန်တော်ပဲ သန့်ရှင်းရေး လုပ်တယ် … ဘကြီးခန့်က … အဆုတ်သိပ်မကောင်းဘူး … နည်းနည်းအေးတာနဲ့ … ချောင်းဆိုးချင်တယ် … ချောင်းဆိုးရင် … မြန်မာဆေးပဲ သောက်တယ် … အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေကို … မယုံဘူးတဲ့ … တခါတလေ … ဘကြီးခန့်က … ဂွ … တကယ့်ဂွ …
ဘကြီးခန့်က တခြားကိစ္စတွေဆို တော်တော်အလိုလိုက်ပါတယ် … ဘာစားချင်သလဲ … ဘာဝတ်ချင်သလဲ … သွားဝယ်ချေ … သွားစားချေ … ဒါပေမယ့် … အဲဒီအခန်းထဲကိုတော့ ဝင်တာ လုံးဝ လုံးဝ မကြိုက်ဘူး … မှတ်မှတ်ရရ … တခါပဲ ရောက်ဖူးပါတယ် … ဘကြီးခန့် စိတ်လိုလက်ရ … ပြတာ … ပေ ၃၀ ပတ်လည်လောက်ရှိတဲ့ မြေအောက်ခန်းထဲမှာ … ပုလင်းတွေဗျာ … နည်းတာ မဟုတ်ဘူး … ဗီဒိုထဲမှာ စီထားတာမှ အစီအရီပဲ … သူ့ပုလင်းတွေက … အကြီးကြီးတွေတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ … ရေမွှေးပုလင်းလို … သေးသေးလေးတွေ အများကြီးပဲ … ပုလင်းတွေဘေးမှာ စာရွက်လေးတွေ ကပ်ထားတယ် … စာရွက်ပေါ်မှာ … ဘယ်နှခုနှစ်က ဘယ်ကရတယ် … ဘယ်သူ့ပစ္စည်း စတာတွေ ရေးထားတယ် … ဘကြီးခန့် ပြောတာတော့ … ပုလင်းတလုံးချင်းဆီမှာ ရာဇဝင်တွေ ရှိတယ်တဲ့ … ပုလင်းလေးတွေက တော်တော်လှပါတယ် … ကနုတ်ပန်းလေးတွေနဲ့ ပုလင်းလေးတွေရဲ့ပုံစံက … တော်တော်ထူးခြားပါတယ် … ပုလင်းတလုံးဆို … ဂရိဘက်ကလာတာတဲ့ … မြေအောက်ခန်းထဲမှာ … မီးခံသေတ္တာ တလုံးလဲ ရှိပါတယ် … အဲဒီထဲမှာတော့ … အရမ်းတန်ဖိုးကြီးတဲ့ ရှေးဟောင်းပုလင်းတွေ ထည့်ထားတယ်တဲ့ … ကျွန်တော်က စိတ်မဝင်စားတာနဲ့ … သူပြောသမျှ နားထဲမရောက်ပါဘူး … သူကလည်း … ကျွန်တော် စိတ်မဝင်စားတာ ရိပ်မိတော့ … နောက်ပိုင်း မပြောတော့ပါဘူး …
ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ … တခြားလူ မရှိဘူး … ဘကြီးခန့်ရယ် … ကျွန်တော်ရယ် … နှစ်ယောက်ထဲ … နေတယ် … အိမ်ကို သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေ အလည်မခေါ်ရဘူး … လမ်းကြုံလို့ဝင်လာရင်လည်း … လက်မခံရဘူး … တမျိုးပဲဗျ … ပေါင်းရသင်းရခက်သလားဆိုတော့လည်း … မဟုတ်ပြန်ဘူး … မနက်အိပ်ရာထရင်လည်း … နိုးပြီလား … သား ဘာစားချင်သလဲ … ဘာညာနဲ့ ဂရုစိုက်ပါတယ် … ကျွန်တော် မသိတဲ့ အကြောင်းတွေဆို … စိတ်လိုလက်ရ ရှင်းပြတတ်တယ် … သူ ပြောတာတော့ … အိမ်ကို ဧည့်သည်လာတာ မကြိုက်ဘူး … လုံးဝမကြိုက်ဘူး … အိမ်ကို ဧည့်သည် လာတာ မကြိုက်တာ … ဘကြီးခန့်က … လကုန်ရက်မျိုး … အထူးသဖြင့် … လကွယ်ရက်မျိုးမှာ … အပြင်သွားလေ့ရှိတယ်ဗျ … သုံးလေးရက်လောက် ပြန်မလာဘူး … ဘယ်သွားလဲ မေးတော့လည်း … မသိချင်ပါနဲ့ကွာတဲ့ … နောက်မမေးနဲ့ … အိမ်မှာသာ ကောင်းကောင်း စောင့်နေတယ်တဲ့ … အစပိုင်းတော့ နေရတာ နည်းနည်း ပျင်းပေမယ့် … တက္ကသိုလ်ကျာင်းတွေ ဖွင့်တော့ … ကျောင်းတက် … ပြန်လာ … စာဖတ်နဲ့ … နေသားကျသွားတယ် …
သန်လျင်နည်းပညာကောလိပ် (GTC) တဲ့ … ကျောင်းစဖွင့်တာ နှစ်ရက်ရှိပြီ … ကျွန်တော် မတက်ချင်ပါဘူး … ကားကို အကြာကြီး မောင်းမှ ရာက်တဲ့ ကျောင်း … ကျောင်းရှေ့ရောက်တော့လည်း အခန်းရောက်ဖို့ အတော်ကို လမ်းလျှောက်ရသည် … ကျောင်းတက်ရတာ စိတ်မပါ … ကျောင်းစဖွင့်တော့ … အခန်းထဲက … ကောင်တွေက သိပ်မမိုက်ဘူးဗျ … ပြောချင်သလိုလို မပြောချင်သလိုလို … မိန်းကလေးတွေလည်း … ဒီအတိုင်းပဲ … ကိုယ်က ခင်ချင်လို့ မိတ်ဆက်တာတောင် … ဖော်ဖော်ရွေရွေမရှိဘူး … ခေါ်ချင်သလိုလို မခေါ်ချင်သလိုလို … နေပေါ့ကွာ … အထာတွေ လာမကိုင်နဲ့ … အဲဒီလို လူမျိုးတွေနဲ့ သူငယ်ချင်း မဖြစ်ချင်ပါဘူး … သူတို့က ခပ်တည်တည်ဆိုတော့ ကိုယ်လည်း ခပ်တည်တည်ပဲ နေရတော့မှာပေါ့ … အတင်းလိုက်ရောရင် ငပေါဖြစ်သွားမယ်လေ … ရန်ကုန်ကလူတွေက တမျိုးဗျ … သိပ်ဖော်ဖော်ရွေရွေမရှိဘူးဗျ … ခပ်တည်တည်နဲ့ တမျိုးပဲ … ကျောင်းနဲ့ အိမ်က တော်တော် ဝေးပါတယ် … ဘကြီးခန့်က … ကျောင်းသွားရင် စီးဖို့ … အမည်းရောင် ဘောက်စဂွန်ကားလေး တစီးဝယ်ပေးပါတယ် … ညနေဘက် … ကားမောင်းသင်ရင်း … နောက်ပိုင်းမောင်းတတ်တော့ … မနက်ဆို … ကိုယ့်ကားကို မောင်းသွား … ပြန်လာ … အဆင်ပြေပါတယ် … ကျောင်းစတက်တဲ့နေ့က … နည်းနည်းတော့ ရွာလည်ပါတယ် … ရန်ကုန်ကလမ်းတွေက နည်းနည်းရှုပ်တယ်ဗျ … ကျောင်းစတက်တဲ့နေ့က … ဘကြီးခန့်လိုက်ပို့ပေးတော့ … မှတ်မိသေးတယ် … နောက်နေ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သွားတော့ … လမ်းနည်းနည်းမှားသွားတယ် … သာကေတဘက်မှာ လည်နေလို့ … မနည်းမေးပြီး … သန်လျင်ဘက် သွားရပါတယ် … သန်လျင်တံတားကျော်သွားတော့မှ … လမ်းကို မှတ်မိတယ်ဗျ … ဒီအတိုင်းမောင်းရင်း … ကျောင်းရှေ့ရောက်တော့ … ၁၀ နာရီခွဲကျော်သွားပြီ … တချိန်တော့ လွတ်သွားပြီနဲ့တူတယ် …
ကျောင်းသားရေးရာအရှေ့ရောက်တော့ … လူတွေ သိပ်မရှိဘူး … ရှင်းနေတယ် … စာသင်နေကြပြီနဲ့တူပါတယ် … အရိပ်ရတဲ့နေရာမှာ … ကားရပ်လိုက်တယ် …အချိန်စာရင်းအရ … Drawing အချိန် … တီပေတံရယ် … လွယ်အိတ်ရယ် ယူပြီး … အခန်းလျှောက်ရှာကြည့်ပါသေးတယ် … အခန်းက ဘယ်နားမှာမှန်း မသိဘူး … ဟိုလျှောက် ဒီလျှောက်နဲ့ .. မတွေ့တာနဲ့ … ကျောင်းသား တယောက်ကို .. မေးကြည့်လိုက်တော့ … အခန်းက နည်းနည်း ဝေးသေးတယ် … ကားကိုလည်း မရွှေ့ချင်တော့ပါဘူး … ဒီအတိုင်း လျှောက်လာရင်း … ကောင်မလေး တစ်ယောက် … ငိုမဲ့မဲ့နဲ့ ထိုင်နေတယ် … သူ့ပုံစံလေးက … လှတယ်ဆိုရုံလေး လှတယ် … ချောတယ် ဆိုရုံလေး ချောတယ် … ထူးခြားတာလေးက … သူ့မျက်နှာ … အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ် … ရင်အေးစေတဲ့ မျက်နှာပေါက်မျိုးဆို ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ် … ရင်ထဲမှာ အေးကနဲ ဖြစ်သွားတယ်လို့ … ခံစားမိတယ်ဗျာ … ကြည့်ရတာ … သူလည်း ကျွန်တော့်လိုပဲ အခန်းပျောက်နေတယ်နဲ့ တူတယ် … လမ်းပေါ်မှာလည်း ဘယ်သူမှ မရှိတော့ … သနားပါတယ် … ကျွန်တော်လျှောက်လာတာ မြင်တော့ … အားကိုးတဲ့အကြည့်နဲ့ လှမ်းကြည့်နေပါတယ် …
“တခုလောက် မေးပါရစေရှင့် … Drawing အခန်းက ဘယ်နားမှာလဲမသိဘူးနော်”
“ညီမက … ဘယ်အတန်းကလဲ”
“Electrical Power ပထမနှစ်ပါရှင့်”
“ဟင် … ဒါဆို ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူပဲဗျ … ကျွန်တော်လည်း EP ပဲ”
“ဟုတ်လား … အိ … ဝမ်းသာလိုက်တာ … ကျောင်းနောက်ကျတော့ … အခန်းက ဘယ်လိုမှ ရှာမရဘူး … ငိုတောင် ငိုချင်တယ်”
“ကျွန်တော့်နာမည် … ခန့်မင်းပါ … “
“ဟုတ်ကဲ့ရှင့် … အိနာမည်အရှည်က … ယွန်းအိလို့ ခေါ်ပါတယ် … သူငယ်ချင်းတွေက ယွန်းအိလို့ ခေါ်ကြတယ်”
“ကျွန်တော်လည်း … အရမ်းဝမ်းသာပါတယ် … ယွန်းအိ … လို့ပဲ ခေါ်မယ်ဗျာ”
“ဟုတ်ကဲ့ရှင့် … ကိုခန့်လို့ ခေါ်ရင်ရတယ်မှတ်လား”
“ရပါတယ် ခင်ဗျ …”
ယွန်းအိ … နာမည်လေးကလည်း မြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ … ချစ်ဖို့ကောင်းသား … အသံလေးက ချိုပြီး … နားထဲအေးသွားစေတဲ့ အသံ … အရင်ဘဝက ရေခဲတုံးတွေ အများကြီး လှူခဲ့တယ်ထင်ပါရဲ့ …
“အင်း … ဒါနဲ့ အဆောင်က မရောက်သေးဘူးလားဟင်”
“ရောက်သေးဘူး … ဟိုးမှာ လိုသေးတယ်”
“ညောင်းလာပြီ … ဟင့်”
သယ်လာတာ လေးလို့ ထင်ပါရဲ့ … ယွန်းအိ … အောက်နှုတ်ခမ်းလေး ကိုက်ရင်း … မျက်နှာလေးက နီရဲရဲလေးဖြစ်နေတယ် … ချစ်ဖို့တော့ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျ …
“ခြင်းတောင်းကိုင်ပေးမယ်လေ … လေးနေပြီနဲ့ တူတယ် … ပေးပါဗျာ”
“အို … ရပါတယ်ရှင့်”
ကျွန်တော် … ယွန်းအိ လက်ထဲက ခြင်းတောင်းကို အတင်းယူလိုက်ပါတယ် … ယွန်းအိလက်ကလေးက … အရမ်းနူးညံ့တာပဲဗျာ … မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ကို … တကယ်ပါ … ပထမဆုံး ကိုင်ဖူးတာပါ … လူကဖိန်းကနဲ ရှိန်းကနဲ ဖြစ်သွားပေမယ့် … ဘာကြောင့်မှန်းတော့ မသိသေးပါဘူး … သူလည်း တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားပါတယ် … သူလည်း ညောင်းနေပြီ ထင်ပါရဲ့ … သိပ်မငြင်းရှာဘူး … ယွန်းအိ နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ဆို … ကျွန်တော်က ခေါင်းတစ်လုံးလောက် ပိုမြင့်တယ်ဗျ … ယွန်းအိ က ဂါဝန်အဖြူရောင် ဝမ်းဆက်လေး ဝတ်ထားတယ် … မှတ်မိတာပေါ့ဗျာ … နည်းနည်းခွာလျှောက်တယ် ဆိုပေမယ့် … ယွန်းအိ သုံးတဲ့ ရေမွှေးအနံ့က သင်းပျံ့နေတာပဲ … အဲဒီတုန်းက … ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်တွေက ဖြူဖြူစင်စင်လေးတွေမို့ … ဟိုဟိုဒီဒီ မတွေးတတ်သေးပါဘူး … ယွန်းအိ သိပ်လှတာတော့ သိပါတယ် …
“ဖြေးဖြေးလျှောက်ပါ … ကိုခန့်ရယ် … နောက်က ကျားလိုက်လာတာကျနေတာပဲ”
“ဆောရီး … ယွန်းအိ … မောနေပြီလား”
“အင်း … ချွေးတောင် နည်းနည်းစို့လာပြီ”
“ဟိုရှေ့က အဆောင်က … Drawing ခန်းပဲ “
ယွန်းအိနဲ့ ကျွန်တော် … အခန်းထဲဝင်လာတော့ … အတန်းထဲက လူတွေ အားလုံး ၀ိုင်းကြည့်ကြတယ် … ဆရာ့ကို … ခွင့်တောင်းပြီး … သုံးတန်းမြောက် ခုံမှာ … နေရာယူလိုက်ပါတယ် … ဆရာက ပုံအသစ် သင်ဖို့ စလုပ်နေတုန်း … ဆိုတော့ … အတော်ပါပဲ … ကျွန်တော် ပုံကောင်းကောင်းဆွဲဖို့ လုပ်နေတုန်း … ယွန်းအိ ဘက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ … ယွန်းအိမှာ ပုံဆွဲစာရွက်မပါဘူးလေ … သနားပါတယ် … ဗလာစာအုပ်ထုတ်ပြီး … ငိုမဲ့မဲ့လေး ဖြစ်နေရှာတယ် …
“ယွန်းအိ … စာရွက်မပါဘူးလား”
“ဟင့်အင်း … ဗလာစာအုပ်တွေပဲပါတယ်”
“ရော့ … တရွက်ယူပြီး ဆွဲ”
ကျွန်တော့် ပုံဆွဲ စက္ကူလေးငါးရွက်ထဲက … တရွက်ယူပြီး … ယွန်းအိ စားပွဲပေါ်မှာ ခင်းပေးလိုက်တယ် … ပုံဆွဲတဲ့ခုံတွေက … သေချာမစီထားတော့ … နည်းနည်း ကြပ်တယ်ဗျ … အမှတ်မထင်ပါပဲ … ကျွန်တော့်လက်မောင်းက … ယွန်းအိ ရင်သားလေးကို … ထိသွားတယ်ဗျ … ပွတ်ဆွဲသွားတယ် … ဖိန်းကနဲ ရှိန်းကနဲဗျာ … ခံစားချက်ကို … သေချာတော့မပြောတတ်ဘူး … လက်မောင်း တလျှောက် … ကြက်သီးတွေ ထသွားတာတော့ သိလိုက်တယ် … ယွန်းအိကို လှမ်းကြည့်တော့ … မျက်နှာ ရဲကနဲ ဖြစ်သွားပြီး … သူ့ကိုယ်လုံးလေး တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် … အားနာလိုက်တာ ယွန်းအိရယ် …
“ဟာ … မတော်လို့ပါဗျာ … တောင်းပန်ပါတယ်နော် … ယွန်းအိ … ကျွန်တော် တမင်သက်သက်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးနော်”
“ရပါတယ် … ကိုခန့်ရဲ့ …”
ယွန်းအိ … မျက်နှာလေး … ပိုရဲသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ် … နည်းနည်းတော့ ရှက်သွားမယ် ထင်တယ်ဗျာ … အားနာလိုက်တာဗျာ … တကယ်ပါ … တမင်သက်သက် လုပ်တာ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ …
ယွန်းအိ … အသံလေးတိတ်သွားတယ် … သူလည်း တခါမှ … ဒါမျိုး မဖြစ်ဘူးဖူးနဲ့ တူပါတယ် … ကျွန်တော့်ကို နည်းနည်းလေး … ရှိန်သွားတယ် … ကျွန်တော့်ကို အခွင့်အရေးယူတတ်တဲ့ကောင်လို့များ … ထင်သွားလား မသိပါဘူးဗျာ … စကားလည်း ပြန်မပြောတော့ဘူးဗျ … ငါးမိနစ်လောက် ငြိမ်နေပြီး … လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ … ယွန်းအိ ပုံ သိပ်မဆွဲတတ်ဘူးထင်ပါရဲ့ … နောက်ပြီး ယွန်းအိပေတံလေးက တိုတိုလေး … ခဲတံကလည်း … ကောင်းကောင်းမပါဘူး …
“ကိုခန့် … လုပ်ပါအုံး … ဘယ်ကဘယ်လို စဆွဲရမှန်းမသိတော့ဘူး”
“ယွန်းအိ … ပေတံအရှည်မပါဘူးလားဟင်”
“ဟင့်အင်း … မပါဘူး”
“ရော့ … ဒီပေတံနဲ့ဆွဲ”
ကျွန်တော့် ပေတံရှည်ကို … ယွန်းအိကိုပေးလိုက်ပါတယ် … ကျွန်တော် … ယွန်းအိခုံနား ကပ်ပြီး … ဟိုလိုဆွဲ ဒီလိုဆွဲနဲ့ … သင်ပေးပါတယ် … ယွန်းအိ ပေတံကိုင်တာက အစ … လွဲနေတယ် … ဒါမျိုးက ဖြစ်တတ်ပါတယ် … ကျွန်တော်လည်း ငယ်ငယ်က ဖေဖေသင်ပေးလို့ … ဒါမျိုးတွေက ဆွဲတတ်နေတာပါ … ယွန်းအိလိုမျိုး အခုမှ စသင်ရရင် … ယောင်ချာချာ ဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာ … ယွန်းအိအနားမှာ ကပ်ပြီး သင်ပေးတော့ … ကျွန်တော့်စိတ်တွေ … လှုပ်ရှားနေပါတယ် … မိန်းကလေးတွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး … မနေဖူးတော့ … ဒီလိုမျိုးအနီးကပ်နေလိုက်ရင် … ကျွန်တော့် တကိုယ်လုံး ကြက်သီးလေးတွေ ထသွားတာ ဘာလို့လဲဗျာ … ရင်ထဲမှာ … တမျိုးပဲဗျာ … နေရတာ ရှို့တို့ရှန်းတန်းနဲ့ … နည်းနည်း ရှက်သလိုလို … ကျေနပ်သလိုလို ဖြစ်နေတာ … ဘာမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး … ယွန်းအိ ရှက်နေမှာစိုးလို့ … နောက်မဖြစ်ရအောင် … ဂရုတစိုက်တော့ ထိန်းတာပဲဗျာ … ပုံဆွဲတာကို … ပြပေးတော့ … တယောက်နဲ့ တယောက် … ခြောက်လက်မလောက်ပဲ ကွာပါတယ် … ယွန်းအိ ကိုယ်လုံးလေးက … နွေးနွေးလေးဗျ … ကျွန်တော် မထိတွေ့ရပေမယ့် … ခံစားလို့ရပါတယ် … ယွန်းအိရော … ရင်တွေခုန်နေလား မသိပါဘူး … ကျွန်တော်တော့ ရင်တွေ ခုန်လာတယ် … တချက်တချက် … အကြည့်ချင်း ဆုံမိရင် … ယွန်းအိ မျက်ဝန်းလေးက … ပထမပိုင်းမှာ လွှဲလွှဲပစ်လိုက်ပေမယ့် … နောက်တော့ … ကျွန်တော့်ကို ရွှန်းရွှန်းစားစားနဲ့ ပြန်ကြည့်ပါတယ် … စားပွဲခုံက … နည်းနည်းပုတော့ … ခါးကိုင်းပြီးနဲနဲဆွဲရပါတယ် … ယွန်းအိ ဝတ်လာတဲ့ … အဖြူရောင်ဂါဝန်လေးက … လည်ပင်းပေါက် နည်းနည်းတော့ ကျယ်တယ် … လှစ်ကနဲ မြင်လိုက်ရတဲ့ … အတွင်းခံ ဘရာစီယာလေးက … အဖြူလေးဗျ … ကျွန်တော် ကြည့်လဲ ကြည့်ချင်တယ် … မကြည့်လဲ မကြည့်ရဲပါဘူး … စိတ်ထဲမှာ … မကောင်းဘူးထင်လို့ … အတင်း မကြည့်တော့ပဲ နေလိုက်တယ် …
ဒီလိုနဲ့ … အတန်းပြီးသွားတော့ … ယွန်းအိနဲ့ ကျွန်တော် … ပိုပြီး ရင်းနှီးသွားပါတယ် … သူကလည်း … ကျောင်းသူသစ်ဆိုတော့ … အားကိုးတယ်လေ … ကျွန်တော်ကလည်း … ကျွန်တော့်ကို အရေးတယူရှိတဲ့ ကောင်မလေးဆိုတော့ … ခင်မင်မိတာပေါ့ဗျာ … အတန်းပြီးတော့ … ကန်တင်းသွားကြတော့ … ယွန်းအိခြင်းတောင်းလေးကို … ကျွန်တော်ပဲ ကိုင်ပါတယ် … ယွန်းအိက … အားနာနေတယ် … စကားပြောရင်းနဲ့ သူ့အကြောင်း ကျွန်တော် … သိလာပါတယ် … သူက ယုဇန ပလာဇာနားမှာ နေတယ် … ညီမလေး တစ်ယောက် ရှိတယ် … သူ့အဖေက … ပလာဇာမှာ ခေါက်ထီးတွေ ရောင်းတယ် … သူ့အကြောင်းပြောပြီးတော့ … ကျွန်တော့်အကြောင်း ပြောပြဖြစ်တယ် … ယွန်းအိ … ကျွန်တော့် အကြောင်းသိသွားတော့ … သနားသွားတယ် …
“အော် … ဒါကြောင့် … ကိုခန့်က … ပုံဆွဲတာ အရမ်းတော်နေတာပေါ့ …”
“တော်ပါဘူး … နည်းနည်းပါးပါး ဆွဲတတ်တာပါ”
“တော်ပါတယ် … ယွန်းအိကို … ကူညီပေးလို့ ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ … ကော်ဖီတိုက်မယ်နော်”
“ဟိတ် … ယွန်းအိနဲ့ ကျွန်တော့်ကြားမှာ ကျေးဇူးခံ ကျေးဇူးစား မဖြစ်ချင်ဘူး … ကျွန်တော်တို့က သူငယ်ချင်းတွေလေ … ဟုတ်တယ်ဟုတ်”
“ဆောရီး … ယွန်းအိ စကားမှားသွားတယ် … သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် … ကော်ဖီတိုက်မယ်နော်”
“အင်း … ဒီလိုမှပေါ့ … ယွန်းအိရဲ့”
ကန်တင်းမှာ ထမင်းစားတော့ … ပဲပြုတ်ဆီဆမ်းနဲ့ ကြက်ဥကြော်လေး တလုံး … မှာစားဖြစ်တယ် … ယွန်းအိက … သူ့ဟင်းခွက်ထဲက … ပုဇွန်တကောင်ထည့်ပေးတယ်ဗျ …
“ကိုခန့် … ပုစွန်စားတယ်မှတ်လား”
“အင်း … စားတာပေါ့ … ကျွန်တော်က … အမဲသားပဲ မစားတာ”
“အတူတူပဲ … ရော့”
ကျွန်တော်လည်း … အလယ်က အနှစ်ကို မပါအောင် … ပိုင်းပြီး … ကြက်ဥကြော် တခြမ်းကို … သူ့ချိုင့်လေးထဲ ထည့်ပေးတယ် …
“အို … စားပါ ကိုခန့်ရဲ့ …”
“တယောက်တဝက်ပေါ့နော့ … ယွန်းအိက အလယ်က အနှစ်မစားဘူး မှတ်လား”
“ဟုတ်လား … တကယ်”
“အင်း … ဟုတ်တယ် … တခါတလေ စိတ်ထဲက ထင်ရင် မှန်တယ် … အတင်းမေးရင် မှန်တော့ဘူး”
“အင်း … သိပ်ရင်းနှီးတဲ့ လူမှ … ကျွန်တော် ပြောပြတာ … နို့မို့ဆိုရင် … ဂေါက်နေလားလို့ ပြောခံရမှာ”
“ဟုတ်တယ်နော် … “
ကျွန်တော်တို့ စားပြီးတော့ … ကော်ဖီ သောက်မလို့ လုပ်တုန်း … ယွန်းအိက …
“ကိုခန့် … ခွက်ချင်းတိုက်ရအုံးမယ်လေ”
ကျွန်တော် ကြောင်သွားတယ် … ယွန်းအိ ဘာလုပ်ချင်တာလဲ … ကျွန်တော် ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတာကြည့်ပြီး … ယွန်းအိ ရီတယ် …
“ကိုခန့်ကလဲ … သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် …”
“အော် … ဟုတ်ပြီ … ဟား ဟား ဟား”
“သူငယ်ချင်း ဖြစ်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် … ချီးယား … ဟား ဟား ဟား”
“ခစ် … ခစ် … ခစ်”
ယွန်းအိ … ရီနေတာလေးကို … အရမ်းသဘောကျတာပဲဗျာ … တကယ်ပါ … ကျွန်တော့်ရင်တွေကို … ကြည်နူးစေတဲ့ … ယွန်းအိ အပြုံးတွေ အောက်မှာ … ကျွန်တော် သာယာ သွားပါတယ် … ဘေးဝိုင်းက ကောင်တွေ … မသိမသာနဲ့ ရှိုးနေတာကို … သိသားပဲ … ယွန်းအိကို … စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ … ကျွန်တော့်ကိုလည်း … ယွန်းအိနဲ့ … ဘယ်လိုလဲဆိုတာ တွေးနေကြတယ်ထင်ပါတယ် … အဲဒီလို အကြည့်တွေကြောင့် … ကျွန်တော် ယွန်းအိအပေါ် စိတ်ဝင်စားတာတွေက … အရောင်ပြောင်းသွားပါတယ် … ယွန်းအိသာ … ကျွန်တော် ချစ်သူလေးဆိုရင် … ဟာ … ငါ ဘာတွေ လျှောက်တွေးနေမှန်းမသိပါဘူး … ယွန်းအိ သိသွားရင် … မကောင်းဘူး … အခုမှ ခင်မင်ကာစ ရှိသေးတယ် … အခွင့်အရေးယူတတ်တဲ့ ကောင်လို့ ထင်သွားအုံးမယ် …
“ကိုခန့် … တကယ် အကြားအမြင်ရတာလား”
“အင်း … တခါတလေ အာရုံရတယ်”
“မှန်းကြည့်ပေးပါလား … ယွန်းအိ … အိမ်က စာကြည့်စားပွဲပေါ်မှာ ဘာပစ္စည်းတင်ထားလဲဟင် … မနက်ဆို ယွန်းအိ ဘာမှ မတင်ထားဘူး … အကုန်ရှင်းထားတယ် … ညီမလေး ဘာတွေ လာတင်ထားမလဲဆိုတာ”
“ဝက်ဝံရုပ်ကြီး … အဖြူရောင်”
ကျွန်တော့် ပါးစပ်က … လွှတ်ကနဲ ထွက်သွားတယ် … ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိ … ယွန်းအိ မျက်နှာလေးက … ကျွန်တော်ပြောတာကို သိပ်တော့ မယုံဘူး …
“ခဏလေးနော် … ကိုခန့် … အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ကြည့်မယ် … ဟုတ်မဟုတ် … ဟုတ်တယ်ဆိုရင် … မနက်ဖြန်ကျရင် … မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်နော်”
ကျွန်တော် အတွေးက … ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်မှာပါ … တခါတလေလည်း မှန်တယ် … တခါတလေလည်း … လွဲတယ် … ယွန်းအိ ထသွားတော့ … နောက်က လိုက်ကြည့်မိပါတယ် … ဂါဝန်အဖြူရောင်လေး … အောက်က … ကားတက်နေတဲ့ … ယွန်းအိ တင်သားကျစ်ကျစ်လေးတွေက … နည်းနည်းတော့ … ထွားတယ် … အရမ်းကြီး သိသိသာသာ ကားတက်နေတာမဟုတ်ပေမယ့် … လမ်းလျှောက်သွားတိုင်း … တင်သားဆိုင်လေးတွေ … သိမ့်ကနဲ … ညိမ့်ကနဲ … ယမ်းခါသွားတာကို … ကြည့်ပြီး … ရင်ထဲမှာ ကျလိကျလိ ဖြစ်သွားပါတယ် … လှတယ် ယွန်းအိရယ် … လှတယ် … လှပ်ကနဲ ပေါ်ပေါ်သွားတဲ့ … ခြေသလုံးသား ဖြူဖြူလေးတွေကိုလည်း … နမ်းပစ်လိုက်ရင် … ကောင်းမယ်နဲ့ တူတယ်နော် … ရင်ထဲမှာ … အတွေးရိုင်းတွေကြောင့် ပူလောင်လာတော့ … သက်ပြင်းချပြီး … ဖြေဖျောက်ပစ်လိုက်တယ် … မကောင်းပါဘူးလေ … ဒီအတွေးတွေက …
ယွန်းအိ … ကောင်တာက … ဖုန်းနဲ့ အိမ်ကို ဆက်ပြီး … မေးနေတယ် … ယွန်းအိ ပုံစံလေးက … ကလေးတော့ ဆန်တယ် … ဒီပုံစံလေးက … ချစ်ဖို့လည်း ကောင်းပါတယ် … ယွန်းအိ ဖုန်းပြောနေရင်းနဲ့ … ကျွန်တော့်ဘက်ကို ကြည့်ပြီး … မယုံနိုင်တဲ့ အကြည့်မျိုးနဲ့ … မျက်လုံးတွေ ပြူးပြတယ် … ပြီးတော့ … သဘောတွေ ကျနေတယ်နဲ့ တူတယ် … ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံး နဲ့ ဖုန်းချသွားတယ် … ယွန်းအိ … ကျွန်တော့် ရှေ့က … ထိုင်ခုံလေးမှာ … မြန်မြန် ထိုင်ပြီး …
“ကိုခန့် … ပြောတာ … အရမ်းမှန်တယ် …”
“ဟင် … ဟုတ်လား … ကျွန်တော်က လျှောက်ပြောနေတာ”
“မဟုတ်ပါဘူး … တကယ် … ယွန်းအိ စားပွဲပေါ်မှာ … ဝက်ဝံရုပ်ကြီး အကြီးကြီး တကောင်ရောက်နေတယ်တဲ့ … အရောင်က အဖြူရောင်တဲ့ …”
“ဟား ဟား ဟား … ယွန်းအိအတွက် … ဘယ်သူဝယ်ပေးတာလဲဟင် …”
“ဘေးအိမ်က … အန်တီလေး … စင်္ကာပူကနေ ပြန်လာတာ … ယွန်းအိတို့ ညီအမအတွက် လက်ဆောင်ဝယ်လာတာတဲ့”
“ဟုတ်လား … မိုက်တယ်နော်”
“ကိုခန့် … အရမ်းတော်တာပဲနော် … ကိုခန့် … အကြားအမြင်ရတယ်ဆိုတာ … အဟုတ်ပဲ”
“ရှူးတိုးတိုး … သူများတွေ ကြားကုန်မယ်”
“အင် … ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်”
“ကျွန်တော် ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ် … ယွန်းအိ … ဂတိတခုတော့ ပေးရမယ်နော် … တခြားဘယ်သူမှ မပြောပါဘူးဆိုတဲ့ ဂတိ”
“အင်းပါ … ဘယ်သူမှ မပြောပြဘူး … ဟိ ဟိ … ကိုခန့် ထီဂဏန်းမှန်းပြီး ထိုးပါလား … ဒါဆို သိန်း ၁၀၀၀ ဆုတွေ ပေါက်မှာ”
“မဟုတ်ဘူး … ယွန်းအိ … ထင်တာ လွဲနေပြီ”
“ကျွန်တော်က … လက်ရှိအချိန်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာကိုပဲ … သိတာ … အတိတ်အကြောင်းတို့ … အနာဂတ်အကြောင်းတို့ မမြင်ရဘူး”
“ဟုတ်လား … ကိုခန့် … ငယ်ငယ်လေးထဲက … မြင်ရတာလား”
“အင်း ဟုတ်တယ် … ငယ်ငယ်တုန်းက .. ပါးစပ် ပိုစီးတယ် …”
“ပါးစပ်စီးတယ် … အဲဒါက ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟင်”
“ပါးစပ်စီးတယ်ဆိုတာက … ကျိန်ဆဲရင် … ချက်ချင်း လက်ငင်းဖြစ်တတ်တာမျိုးပေါ့ …”
“ဟုတ်လား … ကြောက်စရာကြီး”
“ဟုတ်တယ် … ငယ်ငယ်တုန်းက … ဘေးအိမ်က … ကောင်လေးတယောက်က … ကျွန်တော့်ကို တအား အနိုင်ကျင့်တာ … ခဏခဏ လုပ်တော့ သည်းငြီးမခံနိုင်တော့ဘူး … အပင်ပေါ်က … ပြုတ်ကျပါစေ လို့ ကျိန်ဆဲလိုက်တာ … သိပ်မကြာပါဘူး … ညနေဘက်လည်း ရောက်ရော … မန်ကျည်းပင်ပေါ်က … ပြုတ်ကျတာ … ပေါင်ကျိုးသွားတယ်လေ …”
“ဟယ် … ဟုတ်လား”
“အင်း … အမေသိသွားတော့ … ကျွန်တော့်ကို … နောက်မလုပ်ပါဘူးလို့ ဂတိတောင်းတယ်”
“ကိုခန့် … ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် တော်တော်ထိန်းရမယ်နော်”
“ကျွန်တော် … ဒေါသမထွက်တာ တော်တော်ကြာပြီ … ပြဿနာတက်မှာစိုးလို့ … လူတွေနဲ့ သိပ်အပေါင်းအသင်းမလုပ်ဘူး …”
“ယွန်းအိနဲ့ ကျတော့ရော …”
“ယွန်းအိကို … မြင်မြင်ချင်း ခင်သွားလို့ပါ … နောက် … ယွန်းအိ ပုံစံက အေးတယ်လေ”
“ခစ် … ခစ် … ယွန်းအိလည်း … ကိုခန့်ကို ခင်ပါတယ် …”
စကားတပြောပြောနဲ့ … စာသင်ခန်းထဲ ရောက်လာတော့ … စကားစပြတ်သွားတယ် … ယွန်းအိလည်း … ကောင်မလေး နှစ်ယောက် ထိုင်နေတဲ့ … အတန်းမှာ သွားထိုင်တယ် … ကျွန်တော်က သူ့နောက်က အတန်းမှာသွားထိုင်ပြီး … စာအုပ်တွေ ထုတ်လိုက်ပါတယ် … ကျွန်တော်ထိုင်တဲ့အတန်းက … ဘယ်သူမှ မထိုင်ကြဘူး … ကောင်းပါတယ် … တယောက်ထဲ … နေတာ ပိုအဆင်ပြေတယ် … ယွန်းအိ ထိုင်တဲ့ အတန်းက … ကောင်မလေး နှစ်ယောက်က … တော်တော်ချောပါတယ် … သီရိထွန်းစံ … ကျွန်တော့် စိတ်ထင် … ဒီအတန်းထဲမှာ ကွင်းဖြစ်မယ့် တစ်ယောက် … ချောသည် … လှသည် … တောင့်သည် … ဖြောင့်သည် … ပထမနေ့က … ကျောင်းကို … သူကိုယ်တိုင် ကားမောင်းပြီး … လာတာတွေ့လိုက်သေးသည် … ဒီနေ့တော့ … ကားပါသလား … မပါသလား … မပါဘူးထင်တယ် … ထူးထူးခြားခြား … ဝင့်ကြွားတဲ့ ရင်နှစ်မွှာက … မျက်စိလွှဲမရအောင် … ထွားမို့သည် … နန္ဒလှိုင်လို … မဟာဆန်သည် … ဆံပင် ဂုတ်ဝဲကို … အဖျားကောက်ထားသည် … မျက်လုံးဝိုင်းသည် … ဒါပေမယ့် … စကားပြောတာ နည်းနည်း … ရင့်သည် … အလှတရားကြောင့် … မာနတက်နေသလားတော့ … မသိ … အခန်းထဲက … ကောင်လေးတွေကတော့ … သူနဲ့ ခင်မင်ချင်ကြသည် … စကားပြောချင်သည် … အရောဝင်ချင်သည် … ဖြစ်ချင်လောက်အောင်လည်း … သူ့မျက်လုံးက … ညှို့မျက်လုံး … သူ့မျက်လုံးနဲ့ တည့်တည့်ကြည့်ပြီး … စကားပြောရင် … တော်ရုံယောက်ျားလေး ကြွေလောက်သည် … ကျွန်တော်လား … သူနဲ့ မခင်ချင်ဘူး … အရမ်းလှပြီး … မာနကြီး ကောင်မလေးမျိုးကို … ကြောက်တယ် … သူလိုလူမျိုးနဲ့ … ပေါင်းရင် … အနည်းဆုံး … လူကို ရင်ပူစေသည် … သွေးကြွစေသည် … မဖြစ် … လုံးဝမဖြစ် … ကျွန်တော့်အကြောင်း ကျွန်တော်သာ သိသည် …
နောက်တယောက်ကို နာမည် မသိဘူး … မော်ဒယ်တယောက်လို … ပိန်တယ် … မျက်နှာလေးက သွယ်တယ် … ယွန်းအိလို … မျက်စိအေးတဲ့ အလှမျိုးရှိသည် … ထူးခြားတာက … မျက်ဝန်း … ဥဿဖရားကျောက်လို … သူ့မျက်ဝန်းက … တဖျပ်ဖျပ်လက်နေသည် … ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး အလွန်ထက်မြက်မည်ဆိုတာ သေချာသည် … စကားပြောတာတော့ … သီရိထွန်းစံလို … မရင့် … ယဉ်ကျေးသည် … ကျွန်တော်တို့ ထိုင်တဲ့နေရာ ဘေးမှာ … ပြတင်းပေါက် … နေ့လည်နေ့ခင်းဆိုပေမယ့် … လေက တဖြူးဖြူးနဲ့ … ခဏခဏ တိုက်နေသည် … လေက … အပျိုကညာ သုံးဦးကို … ဖြတ်ပြီး … သင်းရနံ့တွေ သယ်ဆောင်လာတာ … ကျွန်တော့် နှာခေါင်းက သိသည် … ချိုအီမွှေးနေတဲ့ … အနံ့တွေက … အပျိုနံ့တွေ … ကြာကြာရှူမိရင် … တဏှာထကြွလာလိမ့်မယ် … ထူးထူးခြားခြား … အေးကနဲ သင်းပျံ့နေတာက … သီရိထွန်းစံ … သူဆွတ်ထားတဲ့ … ရေမွှေးက … တော်တော် ဈေးကြီးလိမ့်မယ် … အတန်း တချိန်လောက် … ကျွန်တော့်နှာခေါင်းက … အပျိုသုံးယောက် အနံ့ရှူနေရတော့ … ခေါင်းက အီလည်လည် ဖြစ်လာသည် … မဖြစ်သေးပါဘူး … အတန်းပြီးတော့ … သာလိကာမလေး သုံးယောက် … အနောက်ဖက်ကို လှည့်ပြီး … ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောသည် … အဓိက သွေးဆောင်သူက … ယွန်းအိ … ခုနကတုန်းက … ကျောင်းလာတာ … ဘက်စ်ကား တော်တော်ကြပ်တဲ့အကြောင်း … အခန်း ပျောက်နေတဲ့ အကြောင်း … ကယ်တင်ရှင် … ကျွန်တော့်အကြောင်း … ရွှန်းရွှန်းဝေအောင် … သူတို့ကို ပြောပြသည် … ယွန်းအိ … တခုတော့ ကောင်းသည် … ကျွန်တော့်အကြောင်း … ဘာမှမပြော … နှုတ်လုံသည် … ယွန်းအိက … သီရိထွန်းစံကို ပုခုံးဖက်ပြီး …
“ဒီမမက … မသီရိထွန်းစံ”
“ဒီညီမလေးက … အေးမြတ်လှိုင်”
“ဟုတ်ကဲ့ … တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် … ကျွန်တော့် နာမည် …”
“ကိုခန့်မင်း … ဟုတ်တယ်ဟုတ် …”
“အင် … ဘယ်လိုသိတာလဲဗျ”
“ယွန်းအိ … ပြောပြထားတာ … ဒီနေ့ အခန်းပျောက်နေတုန်း … ကယ်တင်ရှင် ပေါ်လာလို့ … နို့မို့ဆို … ယွန်းအိ … ငိုတော့မယ် …”
“ဟုတ်ဘူးနော် … ယွန်းအိ … မငိုပါဘူး”
“ငိုချင်ရင် ငိုချင်တယ်ပေါ့ … အေးမြတ်တို့ … ငိုချင်လည်း … ကိုခန့်ကို အကူအညီတောင်းမယ်နော် … ခစ် ခစ်”
“အော် … အော် … ဟုတ်ကဲ့ … တတန်းထဲဆိုတော့ … အကူအညီလိုရင်လည်း ပြောပါ … တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပါ့မယ် …”
သုံးယောက်လုံး … သံပြိုင်အော်လိုက်တာ … ကျွန်တော် လန့်သွားသည် … မလွယ် … သိပ်တော့ မလွယ် … ဒီသုံးယောက် … အချိန် တစ်နာရီလောက်လေးအတွင်း … ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်လို … ပေါင်းမိသွားသည် … ယွန်းအိအတွက်တော့ ကောင်းသည် … မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းရပြီပေါ့ …
“ကိုခန့် … ဒီနှစ် … ယွန်းအိတို့အခန်းမှာ … ကွင်းဘယ်သူရမယ်ထင်လဲဟင် … ယွန်းအိတော့ … မသီရိရမယ်လို့ထင်တယ် …”
“အင်း … ဟုတ်တယ် … ဖြစ်နိုင်ပါတယ်”
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ … ကျွန်တော့် စကားကို … သီရိ … နည်းနည်းတော့ … မနှစ်မြို့တဲ့ အရိပ်အယောင်လေး … သမ်းသွားသည် … ကျွန်တော်ကလည်း … မြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်သည် … ကျွန်တော် စကားနည်းနည်းမှားသွားသည် … ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ပြောရမှာ မဟုတ်ဘူး .. ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ် … သေချာတယ်ပြောရမှာ … ယွန်းအိက …
“ကိုခန့်ကလည်း … ဖြစ်နိုင်တယ် မဟုတ်ဘူး … ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာ … ဟုတ်တယ်နော် … အေးမြတ်”
“ဟုတ်တယ် … ကိုခန့်ရဲ့ … ဒီအခန်းထဲမှာ … သီရိက အလှဆုံး”
“ယွန်းအိ ပြောတာ ဟုတ်တယ် … ဖြစ်ကို ဖြစ်မှာ ဟဲ ဟဲ”
ယွန်းအိနဲ့ … အေးမြတ် … သီရိအလှကို ဝိုင်းချီးမွမ်းကြလို့ … သီရိ … မျက်နှာ နည်းနည်း ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ပြန်ဖြစ်လာသည် … နည်းနည်းတော့ ကျေနပ်သွားတဲ့ ပုံပါပဲ … ဒါပေမယ့် … ကျွန်တော် သိသည် … သူ့အတွင်းစိတ်လေးက … ကျွန်တော့်ကို … တေးထားပြီ … ဟင်း … ခက်တော့တာပဲ … ကျွန်တော်လည်း ကျေနပ်လောက်အောင် … နည်းနည်း ပင့်ပေးမှနဲ့ တူတယ် …
“သီရိ … ကျောင်းလာတက်ကတည်းက … ကျွန်တော်သိပါတယ် … ဒီမေဂျာရဲ့ ကွင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာ …”
ဒီလိုလေး အပင့်စကားလေး ပြောတော့ … ယွန်းအိက သိပ်မကျေနပ် …
“ကိုခန့်က … သီရိကို သိပြီးသားပေါ့”
“ဟင့်အင်း … မြင်တယ်ပြောတာပါ … အခု ယွန်းအိ မိတ်ဆက်ပေးမှ စကားပြောဖြစ်တာ”
“ဟုတ်လို့လား … မနေ့က … ကိုခန့် … မှောက်ခုံလဲပြီး ဒူးပြဲသွားတယ်ဆို … “
အေးမြတ်နဲ့ … သီရိ … ကျွန်တော့်ကို … ၀ိုင်းမေးသည် … ခက်ပြီ … ယွန်းအိ အချွန်နဲ့ မပြီ … မိန်းကလေးတွေ စိတ်ကလေ … မှန်းရခက်သည် … စကားလေး တခွန်းမှားတာနဲ့ … တသက်လုံး ရန်သူဖြစ်သွားနိုင်သည် …
“အင် … မဟုတ်ပါဘူးဗျာ”
“ဟုတ်ပါတယ် … သိပြီသိပြီ … သီရိကို … အငမ်းလွန်သွားတာ ဟုတ်တယ်ဟုတ်”
ယွန်းအိ … ပေါ်တင်ကြီး စလိုက်တော့ … ကျွန်တော် ရှက်သွားသည် … မျက်နှာ တခုလုံး ပူထူသွားတာပဲ … သီရိကတော့ … ဘာမှမဖြစ် … ဒါမျိုး ကြုံနေကြ ဖြစ်ဟန်တူသည် … ရိုးနေပြီဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး … နောက် ဒီလိုမျိုး … သူ့အလှမှာ … ကောင်လေးတွေ ကြွေသွားတာကို … သဘောကျသည် … ထင်သည် … ကျွန်တော် … ဇောချွေးတွေ ပြန်လာသည် … မျက်နှာက နီလာသည် … မဟုတ်ပါဘူးလို့လည်း … မငြင်းရဲ … သီရိ … စိတ်ခုသွားမှာ စိုးသည် …
“ခဏလေးနော် … ရေသွားသောက်လိုက်အုံးမယ် …”
“အို … ကိုခန့်ကလည်း … မရှက်ပါနဲ့ဆိုမှ …”
ကျွန်တော် … ကြာကြာမထိုင်ရဲ … လစ်မှရတော့မည် … ယွန်းအိကို … လက်သီးလေး ဆုပ်ပြပြီး … အခန်းအပြင်ဘက် ထွက်လာသည် … ယွန်းအိတို့ … တခစ်ခစ်နဲ့ ကျန်ခဲ့သည် … ယွန်းအိ … ယွန်းအိ … ကျွန်တော့်ကို … မ လိုက်တာ … ဘိုးတော်ထက်ဆိုးသည် …
ကျွန်တော် … ကန်တင်းက … ရေသန့်ဘူး … တဘူးဝယ်ပြီး … ၁၅ မိနစ်လောက် … ကန်တင်းမှာ ထိုင်နေလိုက်သေးတယ် … အခန်းကို ချက်ချင်း မပြန်ချင်သေးဘူး … အခန်းဘက် ပြန်လာတော့ … အခန်းထဲ မဝင်ချင် … နည်းနည်းတော့ ရှိန်သည် … တခြားကောင်လေးတွေလို … မိန်းကလေးတွေရဲ့ အထာတွေကို မနပ်တော့ … စကားပြောရတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး … နည်းနည်းလေးမှားတာနဲ့ … ၀ိုင်းသြဘာပေးခံရတယ် … ခက်လိုက်တာဗျာ … အခန်းနားရောက်တော့ … အခန်းထဲက လူတွေ … လွယ်အိတ် ကိုယ်စီနဲ့ … ထွက်လာကြပြီ … အတန်းမရှိတာလား … အတန်းပြောင်းတာလား … အခန်းထဲ ခပ်သွက်သွက်ဝင်သွားတော့ … ယွန်းအိတို့ပဲ ကျန်တော့တယ် … ကျွန်တော့်ကို စောင့်နေတာ ထင်တယ် …
“ကိုခန့်ရယ် … ကြာလိုက်တာ … ရေသွားသောက်တာလား … ကန်တင်းက ကောင်မလေးတွေ သွားငန်းနေတာလား”
“မဟုတ်ပါဘူး … ယွန်းအိကလည်း … အတန်းထဲမှာ ဘယ်သူမှလဲ မရှိတော့ဘူး … အတန်းမရှိတော့ဘူးလား”
“အင်း … မရှိတော့ဘူး … ပြန်ရတော့မယ် … ယွန်းအိတို့က … ကိုခန့်ကို စောင့်နေတာ …”
“ဟုတ်လား … ကျေးဇူးပဲဗျာ …”
ကျွန်တော် စာအုပ်တွေ မြန်မြန်သိမ်းပြီး … အပြင်ရောက်တော့ … ယွန်းအိက …
“ကိုခန့် … ဘယ်ပြန်မှာလဲဟင် … “
“သီရိက … မြေနီကုန်း”
“အေးမြတ်က … ယွန်းအိနဲ့ … အတူတူပဲ … အိမ်ချင်းနီးတယ် …”
“ဟုတ်လား … ယွန်းအိ … အဖော်ရတာပေါ့”
“အင်း … တလမ်းကျော်ပဲ ဝေးတယ် … အေးမြတ်နဲ့ … တာမွေမှာဆင်းပြီး … အတူတူပြန်မယ်လေ”
ကျောင်းရှေ့ကို လမ်းလျှောက်တော့ … ပထမတော့ … လေးယောက် အတူတူ လျှောက်ဖြစ်တယ် … အဆောင် သုံးလေးခု ကျော်ရော … သူတို့သုံးယောက်ကအရှေ့ကလျှောက်တယ် … ကျွန်တော်က အနောက်က လျှောက်ဖြစ်တယ် … တမင်သက်သက် နောက်ချန်ပြီး … လျှောက်တာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ … သူ့အလိုလို … ကျန်ခဲ့တာပါ … အဲဒီမှာ ဇာတ်လမ်းစတာပဲဗျာ … အပျိုချောလေး သုံးဦး … အရှေ့ကနေ … လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ … လျှောက်တာ … သိပ်လှတယ် … ပထမ … ကျွန်တော် မကြည့်ရဲပါဘူး … တစ်ချက်ဗျာ … တစ်ချက် … ကျွန်တော်ခိုးကြည့်မိပါတယ် … ကောင်မလေး သုံးယောက်ရဲ့ … နောက်ပိုင်းအလှတွေက … ကျွန်တော့်ရင်တွေ … ပူလာစေတယ် … တယောက်နဲ့ တယောက် … အလုံးအထည်မတူဘူးဗျ … အေးမြတ်က တင်သိပ်မရှိဘူး … ပါးပါးလေး … သီရိ … နောက်ပိုင်းက … တော်တော်တောင့်သည် … မယ်မြန်မာ အသေးစားလေးဆို … ပိုမှန်လိမ့်မယ် … သိမ်တဲ့ ခါးကနေ ဆင်းလာတဲ့ … တင်သားဆိုင်တွေက … ရုတ်တရက် … မို့မောက်သွားသည် … ကားစွံ့လာသည် … တင်သားနှစ်ခုက တင်းပြီး … ကျစ်လစ်ပေမယ့် … နည်းနည်းထွားတော့ … ပန်းအိုးလေးတောင် … တင်ထားလို့ ရမယ်ထင်တယ် … ထမီအနက်ရောင်လေးကလည်း … အသားပျော့တော့ … တင်သားဆိုင်တွေကို … အရှိအတိုင်း … ပေါ်စေသည် … တကယ်ပါဗျာ … အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျတွေက … မတူဘူးဗျ … ပစ္စည်းကြီးလေ … အတက်အကျ ပိုကြမ်းလေပဲ … ယွန်းအိ တင်လေးက … သီရိလောက် မထွား … သူ့ပစ္စည်းနဲ့ သူ ချစ်ဖို့ကောင်းသည် … အိအိလေးနဲ့ … သိမ့်ကနဲ ငြိမ့်ကနဲ … လှုပ်ရှားတတ်သည် … ယွန်းအိ တင်လေး … လှုပ်တာကို … ကျွန်တော် ပိုစိတ်ဝင်စားသည် … ချစ်ဖို့လည်း ကောင်းသည်ဟုထင်သည် … ငြိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲက … မျက်စိထဲကို စွဲစေသည် … သီရိကျတော့ … ဒီလိုမဟုတ် … ရင်ပူစေသည် … ထွာဆိုင်တွေက … အလှုပ်အပြု ကြမ်းသည် … တခြားကောင်လေးတွေဆိုရင်တော့ … သည်းသည်းလှုပ်သဘောကျလိမ့်မည် … လှပါသည် … ကြွပါသည် … ကားကားလေးနဲ့ … ပြည့်နေတဲ့ … အိုးလေးက … ညဘက် … အိပ်ရာဝင်တိုင်း … တွေးချင်စရာ … ဟာ … မကောင်းပါဘူးဗျာ … အတွေးတွေက … ရိုင်းလိုက်တာ … ကျွန်တော် အတွေးတွေကို … အမြန်ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ် … သူတို့ကို … မကြည့်ပဲ ဟိုဘက်မျက်နှာလွှဲပြီး လျှောက်တော့ … ရင်ထဲက အပူလျော့သွားသည် … မလွယ်ဘူး … တကယ်မလွယ်ဘူး …
ကံကလည်း ဆိုးချင်တော့ … ဟိုဘက်ငေးရင်း … ခလုတ်တိုက်ပြီးလဲပါရော … ရှက်လိုက်တာဗျာ … ယွန်းအိတို့ သုံးယောက် … နောက်လှည့်ပြီး … ကျွန်တော့်ကို ဝိုင်းရီကြတယ် … ရှက်လိုက်တာဗျာ … ရှက်လိုက်တာ …
သီရိက … “ကိုခန့်နော် … နောက်ကနေ … ဘာတွေ အငန်းလွန်ပြီးချော်လဲ … အဲ … ဟုတ်ပါဘူး … ဘာတွေ အတွေးလွန်နေတာလဲဟင်”
ဟာ … သွားပါပြီဗျာ … ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ မသိတော့ဘူး … သူတို့ အိုးလေးတွေကို … ငမ်းလို့ … ချော်လဲသွားတယ်ဆိုရင်လည်း … နှာဘူးကျတဲ့ကောင်လို့ ထင်သွားအုံးမယ် … သီရိက … ဒါမျိုးတွေ ကြုံလေ့ရှိတယ်နဲ့ တူပါတယ် … ကျွန်တော့်ကို ချောင်ပိတ်မေးခွန်း မေးတယ် … သူမေးတာ အကြောင်းမဟုတ်ဘူး … ယွန်းအိ စိတ်ထဲ တမျိုးထင်သွားမှာ … ကျွန်တော် စိုးရိမ်တယ် …
“ဟာ … မဟုတ်ရပါဘူး … သီရိကလည်း …”
“ဘာ မဟုတ်တာလဲ … ကိုခန့်ရဲ့”
သီရိ ကျွန်တော့်ကို ကြပ်နေပြီ … ရှက်လိုက်တာဗျာ … တော်တော်လည်း စိတ်အိုက်တယ် … ကျွန်တော် ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး … ရှက်စိတ်ကြောင့် … ကျွန်တော့် တကိုယ်လုံး နီရဲတွတ်လာသည် …
“ဟိုလေ … ပုဆိုးနဲ့ ခြေထောက် ငြိပြီး … ချော်လဲတာ”
ယွန်းအိက … ကျွန်တော့် လွယ်အိတ်က … ဖုန်တွေကို ခါပေးပါတယ် …
“ကိုခန့်ကလည်း … ကလေးကျနေတာပဲ … မှောက်ခုံလဲရတယ်လို့ … လွယ်အိတ်မှာ ဖုန်ပေသွားပြီ … ဆက်ခါလိုက်အုံး”
ယွန်းအိ … ကျွန်တော့်လွယ်အိတ်ကို … ဖုန်ခါပေးတာကို … သီရိက ကြည့်နေတယ် … သီရိအကြည့်က … ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကို … သိပ်မသင်္ကာတဲ့ အကြည့်မျိုး … သီရိက စကားနာ ထိုးသည် …
“ယွန်းအိက … အရမ်းကြင်နာတတ်တယ်နော် …”
“အင်း … ကိုယ့်ရှေ့မှာ ချော်လဲနေတဲ့လူတွေ့ရင် … ယွန်းအိက … ဖာသိဖာသာ မနေတတ်ဘူး … အဟဲ”
အေးမြတ်က “ယွန်းအိ စိတ်ထားက လှတယ်နော်”
သီရိက “ဟုတ်တယ် … ယွန်းအိက … စိတ်ထားကောင်းတယ်နော်”
ယွန်းအိက … “ဟုတ် … ကျေးဇူးနော်”
ကျွန်တော်လည်း … မနေနိုင်တော့ဘူး … ယွန်းအိကို … ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရတော့တာပေါ့ …
“ယွန်းအိ … ကျေးဇူးပဲဗျာ”
“အို … ရပါတယ် … ကိုခန့်ကလည်း … သူငယ်ချင်းတွေပဲဟာကို …”
သီရိနဲ့ … အေးမြတ်က … အရှေ့ကလျှောက်သည် … ကျွန်တော်နဲ့ ယွန်းအိက … အလိုလို … နောက်ကျန်နေခဲ့သည် … ဒီတစ်ခါတော့ … သီရိ အိုးလှလှလေးကို … ကျွန်တော် … မငမ်းရဲတော့ပြီ … ခပ်စိုက်စိုက်နဲ့ လျှောက်လာရင်း … ကျွန်တော့် ကားရပ်ထားတဲ့နေရာကို ရောက်လာသည် …
“ယွန်းအိ … ကျွန်တော် ကားပါလာတယ် … အကုန်လုံးကို လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ …”
“အင် … ဘယ်မှာလဲ …”
ဘောက်စဂွန် ကားလေးကို လက်ညှိုးထိုးပြပြီး …
“ဟင် … တကယ်ပြောတာလား”
“အင်း … တကယ်ပေါ့ … ဒီမှာကြည့်”
ယွန်းအိ … ယုံအောင် … ကားတံခါး ဖွင့်ပြလိုက်သည် …
“သီရိ … ခဏလေး … ကိုခန့်က ကားပါတယ်တဲ့ … အကုန်လုံးကို … လိုက်ပို့ပေးမယ်တဲ့ …”
သီရိတို့ နှစ်ယောက် … ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီး …
“ဟုတ်လား … တကယ်လိုက်ပို့ပေးရမှာနော် … ကိုခန့်”
“အင်း … လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ … တက်တက် …”
“ညာပြီး … အိမ်မခေါ်သွားရဘူးနော်”
“အောင်မလေးဗျာ … ခေါ်သွားမှာ … စိတ်ချ …”
“အံမယ် … ခေါ်ရဲ ခေါ်ကြည့်ပါလား … ခစ် … ခစ် … ခစ် …”
ကျွန်တော် … သူတို့ အကြောကို … နည်းနည်းတော့ နပ်လာတယ် … အလိုက်သင့် … ဟိုလိုဒီလိုလို … ပြောတော့ … ရီရတာပေါ့ဗျာ … သာလိကာမလေး သုံးယောက် … ကားပေါ်တက်ကြတယ် … ယွန်းအိနဲ့ … အေးမြတ်က နောက်မှာ ထိုင်တယ် … သီရိက … အရှေ့မှာ ထိုင်တယ် … တမျိုးပဲဗျာ … နည်းနည်းတော့ … ရှိန်းတိန်းတိန်းနိုင်တယ် … ခပ်ချောချော ကောင်မလေး သုံးယောက်နဲ့ … ဒီလိုမျိုး သွားလာရတာ … တမျိုးပဲဗျ … ကျေနပ်သလိုလို … ဝမ်းသာနေသလိုလို …
“ကိုခန့် … သီရိတို့ သုံးယောက်လုံး … အိမ်ခေါ်သွားပြီး … ဘာလုပ်မှာလဲဟင်”
“တယောက်ကို … ကော်ဖီဖျော်ခိုင်းမယ် … တယောက်ကို … ထမင်းခူးခိုင်းမယ် … တယောက်ကို … ရေချိုးခိုင်းမယ် …”
“အယ် … တော်တော် ညစ်ပတ်တယ် … ကိုခန့်နော် … “
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး … စလိုက်ပေမယ့် … ကျွန်တော့် … လက်မောင်း … ဆစ်ကနဲ နာသွားသည် … သီရိလေ … ကျွန်တော့်ကို ဆွဲဆိတ်တယ် … ဟာကွာ … ဒီကောင်မလေးကတော့ … ဖက်နမ်းပစ်လိုက်ရင်တော့ … အကုန်လုံး ရှုပ်ကုန်မယ် … ကျွန်တော်က … ကျွန်တော့်အသားနာရင် မကြိုက်ဘူးဗျ … ဒီလိုမျိုး လက်ပါတာမျိုးလည်း မကြိုက်ဘူး … ဒါပေမယ့် … ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတယ် … ကျွန်တော်က တောပြောတောင်ပြော … လျှောက်ပြောမိတာကိုး … အဲဒီမှာ ပါးစပ်သေနတ် သုံးလက် ၀ိုင်းပစ်တာ ခံရတော့တာပဲ … နားထဲ အူနေတာပဲ … ကျွန်တော်လေ … ခေါင်းတောင် မဖော်နိုင်တော့ဘူး … သုံးယောက်တယောက်ဆိုတော့ … မနိုင်ဘူးလေ … မီးများမီးနိုင်ပေါ့ … တာမွေနား အထိ … စကားတွေ တတွတ်တွတ် … တီတီတာတာတွေပြောလာကြတာ … ကားပေါ်ကနေ … ဟီးဟီးဟားဟား ရီမောသံတွေက … လျှံထွက်နေတာပဲဗျာ … ယွန်းအိ အိမ်ကို အရင်ရောက်တယ် … နောက်ကနေ … ဟိုဘက်ကွေ့ … ဒီဘက်ကွေ့ … လမ်းညွှန်ပေးရင်း … အိမ်ရောက်တော့ …
“ကိုခန့် … ကျေးဇူးပဲနော် … ညကျရင်လေ … စာမေးလို့ရအောင် … ဖုန်းနံပါတ် ပေးအုံး”
“အင်း … xxx xxx xxx”
“xxx xxx xxx နော် … အိမ်ဖုန်းလား … စကားပြောလို့ရတယ် မှတ်လား …”
“ရတယ် … ရတယ် … လှမ်းခေါ်လိုက်နော် … ဘိုင့်”
“တာ့ တာ … မနက်ဖြန်မှ တွေ့မယ်နော်”
ကျွန်တော့်ကားလေး … လမ်းထိပ် ရောက်တဲ့အထိ … ယွန်းအိ ရပ်ကြည့်နေတုန်း … အင်း … နည်းနည်းတော့ စိတ်မကောင်းဘူး … စတွေ့တာ တရက်ပဲရှိပေမယ့် … ယွန်းအိကိုလေ … ရင်ထဲက သံယောဇဉ် ဖြစ်မိပါတယ် … ယွန်းအိ ကျန်နေခဲ့တာကို … စိတ်မကောင်းဘူး … ဟူး … မတတ်နိုင်ဘူးလေ … မနက်ဖြန်ကျရင် တွေ့ရအုံးမှာပဲဟာကို …
အေးမြတ်အိမ်က … တလမ်းကျော်မှာ … အေးမြတ်ကလည်း … ငလောင် …
“ကိုခန့် … ကျေးဇူးပဲနော် …”
“ရပါတယ် … မနက်ဖြန်မှ တွေ့မယ်နော်”
“ကိုခန့် … သီရိကို အိမ်ရောက်တဲ့အထိ … သေချာပို့ပေးလိုက်အုံးနော် …”
“အင်းပါ … စိတ်သာချ … ကျွန်တော့် အိမ်ခေါ်သွားမယ် …”
“ဟား ဟား ဟား … တကယ်လား … သီရိက … တိုက်ကွမ်ဒို … တတ်တယ်နော် … ဟိ ဟိ … စိတ်ချမယ်နော် … ကိုခန့် … ခစ် … ခစ် ခစ်”
အ … ဆစ်ကနဲ … နာသွားပြန်ပြီ … လုပ်ပြန်ပြီ နောက်တစ်ခါ …
“တာ့ … တာ”
“သွားပြီနော် … အေးမြတ်”
“ဟုတ် … တာ့တာ”
ကားလေး မောင်းထွက်လာတော့ … စစချင်း … တမိနစ်လောက် … ငြိမ်သွားသည် … သီရိ … ဟိုဘက်ငေးပြီး … လျှောက်ကြည့်နေသည် … အခုမှ သတိထားမိသည် … သီရိက … တော်တော့်ကို လှသည် … မျက်ခုံး … မျက်လုံး … နှာတံ … မျက်နှာပေါက် … ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား … ဘေးကနေကြည့်ရတာ … တော်တော်လေးကို လှသည် … အထူးခြားဆုံးက … သီရိရဲ့ ရင်နှစ်မွှာ … ထွားသည် … မို့သည် … တချက်ကြည့်ပြီးရင် … မျက်စိမခွာနိုင်လောက်အောင် … ထွားသည် … ဘရာစီယာခွက်ပဲ ကြီးနေတာလား … တကယ် ရင်သားကြီးတာလား … ချွတ်ကြည့်မှ သိမယ်ထင်တယ်နော် …
“ဟိတ် … ဘာလို့ ဒီလောက် … ကြည့်နေတာလဲဟင် … အရှေ့ကို တည့်တည့်ကြည့်မောင်း”
“ဟုတ်လို့လား … ယွန်းအိနဲ့ … သီရိ … ဘယ်သူပိုလှလဲဟင်”
“ယွန်းအိက … ကလေးတစ်ယောက်လို … ချစ်ဖို့ကောင်းတာ … သီရိက … တကယ့်မိန်းမချော … ချောတယ်လို့ ပြောရမယ် … မတူဘူး”
ဒီလိုမျိုး … မေးခွန်းတွေကို … နည်းနည်းတော့ ရှောင်တတ်လာပြီ … မုဆိုး စိုင်သင်ပေါ့ … စိုင်လှလှတောင့်တောင့်လေး … သင်ပေးလို့လေ …
“ကိုခန့်က … သီရိကို ဘယ်လိုမြင်လဲဟင် …”
ဟိုက် … ဘယ်လိုမြင်တယ် ပြောရမလဲ … လှတယ် … ချောတယ် … တောင့်တယ် ဖြောင့်တယ် … ပြောရမလား … အတိုချုံးပြောမှရမယ် …
“အရမ်းလှတယ် … အရမ်းချောတယ် …”
“ဟုတ်လို့လား … ဘယ်လို လှတာလဲဟင်”
“ယောက်ျားလေး တစ်ယောက် … ငမ်းငမ်းတက် ဖြစ်လောက်အောင် … လှတယ် …”
“အဟား … ကိုခန့်က အရမ်းမြှောက်ပြောတတ်တယ်နော် … “
“ကျွန်တော်က … မြှောက်ပင့် မပြောတတ်ဘူးဗျ … အရှိတရားအတိုင်း … အမှန်အတိုင်း ပြောပြတာ … သီရိရဲ့ … စိတ်နေစိတ်ထားတော့ … ကျွန်တော် မပြောတတ်သေးဘူး … တပတ် တလလောက်နေရင်တော့ … အကဲဖြတ်လို့ရပြီ …”
“အင်း … မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်နော် … သီရိကို ငမ်းတဲ့ ထဲမှာ … ကိုခန့်လည်း ပါတယ်မှတ်လား”
ဟာဗျာ … သီရိဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက … ရုပ်လေးလှသလောက် … သူများကို ချောင်ပိတ်မေးတာ … တော်တော် အကျင့်ပါနေလားမသိပါဘူး …
“သီရိရယ် … မိန်းကလေး တယောက် … သိပ်လှရင် … မကြည့်တဲ့ ယောက်ျားရှိလို့လား”
“တကယ်ပြောတာလား … ဒါဆို … ကိုခန့် မှောက်ခုံလဲတာ … သီရိကြောင့်လားဟင် … ခစ် … ခစ်”
ချောင်ပိတ်မေးခွန်းတွေက … မမိုက်ဘူးဗျာ … အဲဒါမကောင်းဘူးဗျ … မကောင်းဘူး … လူတယောက်ကို … အနုနည်းနဲ့ … အနိုင်ကျင့်တာ … ကျွန်တော် သဘောပေါက်လိုက်တာက … သီရိက … အလှတရားကြောင့် … မာနတွေ သွေးနားထင်ရောက်နေတဲ့ … ကောင်မလေးတယောက်ဆိုတာကိုပဲ … ကျွန်တော်လည်း … ရွဲ့ချင်တဲ့ စိတ်က ပေါ်လာတယ် …
“ဟုတ်တယ် … သီရိကို အငမ်းလွန်တာ … မှောက်ခုံလဲတာပဲ … ဟား ဟား”
“အယ် … ကိုခန့် နော် … ဟွန့် …”
သီရိ … ရှက်သလိုလို ရွံ့သလိုလိုနဲ့ … မျက်နှာလေးက နည်းနည်းရဲလာသည် … ဖြစ်မှာပေါ့ … မိန်းကလေးတယောက်က … သူ့နောက်ပိုင်းအလှကို … ပေါ်တင်ကြီး အငမ်းခံရတာ … ငမ်းပါကြောင်း … ကြည့်တဲ့အကြောင်း … ပေါ်တင်ကြီး ဝန်ခံလိုက်တော့ … ရှက်သွားတယ်နဲ့ တူတယ် … မှတ်ထား သီရိရေ … ကျွန်တော်က … စိတ်မထင်ရင် … ရွဲ့တတ်တယ် … သူ့ဘက်ကို နည်းနည်းတိုးပြီး …
“ဟိတ် … တကယ် အိမ်ခေါ်သွားမှာနော် …”
“ဟင် … ကိုခန့်နော် … “
သီရိ … နည်းနည်းလေး … မျက်နှာလေး ပျက်သွားသည် … ကြောက်သွားသည့် ပုံစံ … မျက်နှာနှစ်ခုက … ပေဝက်လောက်ပဲ ဝေးတော့သည် … ကျွန်တော် သီရိမျက်လုံးတွေကို … စိုက်ကြည့်တာ … ဆယ်စက္ကန့်လောက် ကြာသွားသည် …
“အို … ကိုခန့်ကလည်း …”
“တကယ်ပြောတာ … သီရိကို ကြည့်ပြီး … အရမ်း ရင်တွေ ခုန်တယ်ဗျာ …”
သီရိ … အကြည့်ချင်း လွှဲဖယ်သွားသည် … ငြိမ်သွားသည် … နည်းနည်း … စိတ်အိုက်သွားသည့်ပုံ … ဒီလောက်လှတဲ့ မိန်းကလေးတယောက် … ဒီလိုမျိုး ရီးစားစကားတွေ … အပြောခံရတာ မဆန်းပါဘူး … ဆန်းတာက … ကားပေါ်မှာ … နှစ်ယောက်ထဲလေ … ရှောင်ပြေးလို့လဲမရ … မသိချင်ယောင် ဆောင်လို့လဲမရ …
“ဟိတ် တကယ် အိမ်ခေါ်သွားရမှာလားဟင် …”
“ကိုခန့်နော် … သိပ်မစနဲ့ … တကယ်လိုက်ခဲ့မှ … ဟိုလိုလို … ဒီလိုလို မလုပ်နဲ့ …”
“အိုကေ … ဒါဆို … အိမ်မပြန်နဲ့တော့နော် …”
“အင် … အဲဒီလို မနောက်ရဘူးလေ … ခစ် … ခစ်”
“ရော် … ခက်တော့တာပဲ … အမိကလည်း … တကယ်ပြောတာပါဆို …”
“ဟင့်အင်းနော် … သီရိက … ငယ်သေးတယ် …”
ကျွန်တော့် စကားက … နည်းနည်းတော့ လွန်သည် … မတတ်နိုင် … မာန မိုးမွှန်အောင် ကြီးနေတဲ့ ကောင်မလေးကို … နည်းနည်းတော့ … နှိပ်စက်အုံးမယ် ….
သီရိ … သူ့ကိုသူ … မလုံမလဲ … ရင်ဘတ်လေးပေါ် … လက်ဖိလိုက်သည် … သီရိ … ရင်တွေ ခုန်နေပုံရသည် … သူ့ပစ္စည်းသူ ထွားမှန်း သိပုံရသည် …
“ကိုခန့်နော် … သိပ်မဆိုးနဲ့ … သီရိက … ရိုးရိုးသားသားခင်တာ … ဟိုစိတ်ဒီစိတ် မမွေးရဘူးလေ”
“အို … ပြောလေ … ကဲလေပဲ …”
“ကဲမှာပေါ့ … သီရိက … သိပ်လှတာကိုး”
“အိုး … ကိုခန့်နော် … ဟွန့် … တိုင်ပြောမယ် ကြည့်နေ”
“တိုင်တလုံး … ငါးပြား … ကြိုက်တဲ့လူကိုတိုင် … တရားသူကြီးတော့ သွားမတိုင်နဲ့နော် … တခါထဲ လက်မှတ်ထိုးပစ်လိုက်မယ် … ဟား ဟား ဟား”
အတည်လိုလို … အရွှန်းလိုလိုနဲ့ … သီရိကို ကြပ်နေသည် … မသိရင်ပဲ … ကျွန်တော့်ပုံစံက … တခါတည်း … လက်ထပ်ပစ်လိုက်တော့မယ့်ပုံစံ …
“အို … ကိုခန့်နော် … သိပ်မစနဲ့ … သီရိ ရှက်လာပြီနော်”
“ဟား ဟား … အလကားပြောတာနော် … စိတ်မဆိုးနဲ့”
“တော်တော် အူမြူးနေတယ် … ဟွန့်”
ဆစ်ကနဲ … နာသွားပြန်ပြီ … နောက်တစ်ခါ … ဆွဲဆိတ်ပြန်တယ် … သီရိ … သီရိ … နောက်တခါ မဆိတ်ရဲအောင် … ဖက်နမ်းပစ်မှနဲ့တူတယ် …
“ကိုခန့်ကို … အကူအညီတခုတောင်းမလို့ … အရမ်းစတော့ … မတောင်းတော့ပါဘူး …”
“အလကား လျှောက်စနေတာ … ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ … ပြောပါ … အားမနာပါနဲ့”
“ဟိုလေ … သီရိ … ပုံဆွဲဖို့ … စာရွက်တွေရယ် … ပစ္စည်းတွေရယ် … ဝယ်ရမယ် … ဘယ်မှာ ဝယ်ရမလဲဟင်”
“လမ်း ၃၀ မှာ ရောင်းတယ် … မြို့ထဲလမ်းတော့ … သိပ်မကျွမ်းဘူးနော် …”
“အင်း … သိပြီ … ထရိတ်ဒါး အောက်ဘက်က ဘလောက် … “
“အဲဒီပဲ မောင်းလိုက်မယ်နော် …”
“သီရိက … မောင်နှမတွေရှိသေးလား”
“မရှိဘူး … ကိုခန့်ရဲ့ … သီရိက … တဦးတည်းသော သမီး”
“အတူတူပဲ … ကျွန်တော်လည်း … တဦးတည်းသော သား”
“ဟယ် … ဟုတ်လား … ဒါဆို … လူဆိုးတွေပေါ့”
“အင်း … ဒါပေမယ့် … မိဘတွေက … မရှိတော့ဘူး … ပေါင်းတည်က အိမ်မှာ ဆုံးသွားကြတယ် …”
“ဟင် … ဟုတ်လား … သနားပါတယ် …”
“ဟုတ်တယ် … သီရိရဲ့ … ကျွန်တော် စိတ်တအားညစ်လို့ … လျှောက်စနေတာ … တမျိုးတော့ မထင်နဲ့နော် …”
“အာ … ရပါတယ် … စိတ်မညစ်ပါနဲ့ … ကိုခန့်ရဲ့ … သီရိတို့ရှိပါတယ် … ပျော်အောင်သာနေနော် … စိတ်မညစ်ရဘူး”
“အခုကော … ဘယ်သူနဲ့ နေလဲဟင်”
“ကျွန်တော့် ဘကြီးနဲ့ အတူတူနေတယ် …”
“ဟုတ်လား … ဘကြီးက … အိမ်ထောင်နဲ့လား …”
“ဟုတ်ဘူး … လူပျိုကြီး …”
“ထမင်းစားတော့ … ဝယ်စားတာလား”
“အင်း … ဝယ်စားတယ် … သူလည်း သူကြိုက်တာ ဝယ်တယ် … ကျွန်တော်လည်း … ကျွန်တော်ကြိုက်တာ စား”
“နောက်နေ့ … ထမင်းဘူး ပိုထည့်လာပေးမယ်နော် … စားမယ်မှတ်လား”
“သီရိ ကျွေးရင် … အကုန်စားမယ်”
“အို … ကိုခန့်နော်”
သီရိမျက်နှာ … ရဲကနဲ ပြန်ဖြစ်သွားတယ် … ရော် … အထအန သိပ်ကောက်တာပဲ … ထမင်းကို ပြောတာပါဗျ … ထမင်းကို ပြောတာ … ဒီလို… မထိတထိလေးတွေ ပြော … သီရိကလည်း … မထိတထိလေး ပြန်ပြော … ကြာရင် … ထိသွားတော့မယ်နဲ့ တူပါရဲ့ … မြို့ထဲရောက်လာတော့ … စကားစ ပျက်သွားသည် … မြို့ထဲက … ကားတော်တော်ရှုပ်သည် … ထရိတ်ဒါးနောက်ဘက်မှာ … ကားရပ်လိုက်သည် … သီရိ အရင်ဆင်းသည် … ဆိုဖာခုံလေးကနေ အထမှာ … ကျွန်တော် မသိမသာလေး လှမ်းကြည့်လိုက်သည် … သီရိ ဖင်လေးက … လုံးလုံးတောင့်တောင့်လေးဗျ … ကားတက်နေတာပဲဗျာ … ကားထဲကထွက်တော့ … သီရိအနောက်ပိုင်းလေးက … သိသိသာသာ ကောက်ပြီး … နောက်ကို ပစ်ထားသလိုဖြစ်နေသည် … အနီးကပ် မြင်ခွင့်ရတော့ … သက်ပြင်းကို ခပ်ပြင်းပြင်းချပစ်လိုက်တယ် … ဟင်း … ဘယ်ဘဝက ကုသိုလ်အဟုန်တွေကြောင့် … ဒီကောင်မလေး … ဒီလောက်လှပြီး တောင့်နေတာလဲ မသိပါဘူးဗျာ … လမ်း ၃၀ ဘက်ကို ကူးလာသည် … ကားတွေက ကြပ်ညပ်နေတာပဲဗျာ … ကျွန်တော် ဒုက္ခ ရောက်ပြီ … လမ်းမကူးတတ်ဘူးဗျ … မကူးရဲဘူးဗျာ … ဝေါကနဲ … ဝေါကနဲ … သွားနေတဲ့ ကားတွေ ကြား ဘယ်လို ဘယ်လို ကူးရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး …
“လာလေ … ကိုခန့် … မြန်မြန် …”
သီရိ … ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး … သဘောပေါက်သွားသည် … တောသား မြို့ရောက်တော့ … ဘယ်ကူးတတ်ပါ့မလဲ …
“လာ … မြန်မြန် … သီရိနောက်ကလိုက်ခဲ့လေ …”
လိုက်ခဲ့လေ … ဆိုပေမယ့် … မလိုက်ရဲဘူးဗျ … ကားတွေက ဝှီးကနဲ ဝှီးကနဲ ဖြတ်နေတာ … ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ရပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို … သီရိ … စိတ်မရှည်တော့ … ဆက်ကနဲ လက်ကို … ဆွဲပြီး … လမ်းကူးတော့သည် … ဒါကြောင့်ပြောတာ … မိန်းကလေးတွေက … ယောက်ျားလေးတွေထက် သတ္တိပိုရှိပါတယ်လို့ … ကျွန်တော့်လက်ကို … ဆွဲပြီး … ဟိုဘက်ရောက်တဲ့အထိ … မလွှတ်သေးဘူးဗျ … ကျွန်တော်လေ … ရင်တွေ တအားခုန်တာပဲဗျာ … ကောင်မလေးတယောက်က … လက်ဆွဲပြီး … ကားလမ်းကူးတာ … ဒါပထမဆုံးပဲဗျာ … အရမ်းကို … စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် … နူးညံ့တဲ့လက်ကလေးကို … ကိုင်ပြီး … တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ … ကားလမ်းကူးတာ … ကျွန်တော့်တသက်မှာ စိတ်အလှုပ်ရှားဆုံး အချိန်လေးပါပဲ … သီရိလက်ကလေးက … နွေးနွေးလေး … ကြင်နာမှုတွေပါတဲ့ လက်ကလေးကို … ကျွန်တော် … မလွှတ်ပဲ ကိုင်ထားတုန်းပဲ … တကယ်ပါ … မလွှတ်ချင်ပါဘူး …
“ကိုခန့် … လက်ကိုလွှတ်အုံးလေ …”
“ဟင့်အင်း … မလွှတ်ချင်တော့ဘူး”
“အွန် … လွှတ်ပါ … ကိုခန့်ရယ် … လူတွေအများကြီး ကြားထဲမှာနော် … ဟင့်”
သိပ်လှတဲ့ … သီရိမျက်နှာလေး … ညိုသွားသည် … အသံလေးကလည်း တိုးသွားသည် …
ဆောင့်ရုန်းလိုက်ချင်ရပေမယ့် … သီရိ မရုန်းသေး … ကျွန်တော်ကလည်း မလွှတ်သေး …
“တသက်လုံး ကိုင်ခွင့်ပေးပါလားဗျာ … နော် … သီရိ … ကျွန်တော်လေ … သီရိကို …”
“ဟိုးဆရာ … ဟိုးထား … ဟိုမှာကားလာနေပြီ …”
ကျွန်တော် လှည့်ကြည့်လိုက်တုန်း … သီရိ … ဇတ်ကနဲ … ရုန်းပြီး … လမ်းထဲကို ခပ်သွက်သွက် ပြေးတော့သည် … လူလည်မလေး … သီရိ … ကျွန်တော့်ကို လှည့်စားတယ် … သီရိမျက်နှာလေးကို … ရိပ်ကနဲ လှမ်းမြင်လိုက်ရသည် … ရှက်ရွံ့စွာ ရင်ခုန်နေတဲ့ … မျက်နှာလေး … အထိအတွေ့က … ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ကို … ယိမ်းယိုင်စေသလား … ကျွန်တော်မပြောတတ် … အစက … ယွန်းအိကို … စိတ်ထဲမှာ တော်တော်နှစ်သက်မိသည် … အခု … သီရိ … ချစ်တယ်လို့ ဖွင့်ပြောဖို့ စကားလေးပဲ ကျန်တော့သည် … ကျွန်တော့် စိတ်တွေက ယိမ်းယိုင်လွယ်တာလား … ဒါမှမဟုတ် … သိပ်လှတဲ့ သီရိက … ညှို့ယူဖမ်းစားနိုင်တာလား … ကျွန်တော့်စိတ်ပဲ ဖြစ်မှာပါလေ … သိပ်လှတဲ့ လူလည်မလေး သီရိ … ခပ်ကော့ကော့နဲ့ … အရှေ့ကလျှောက်သွားတာကို … မနည်းမှီအောင် … လိုက်ရင်း … သီရိ နောက်ပိုင်းလေးကို … စိုက်ကြည့်မိပြန်သည် … လှသည် … တောင့်သည် … တင်သားဆိုင်လေး … နှစ်ခုက … သီရိအပျိုစစ်စစ်ပါလို့ သက်သေခံနေသည် … ခပ်သွက်သွက်သွားပေမယ့် … ယမ်းခါမနေ … ဝေ့ကနဲ ၀ိုက်ကနဲ … သိမ့်ကနဲ … စကောဝိုင်းလေးလို … အောက်ကို ကျပြီး အပေါ်ကို ပြန်ပြန်တက်သွားသည် … သီရိတင်သားဆိုင်လေး … အောက်ကို … အိကနဲ ကျသွားတဲ့အချိန်မှာ … ကျွန်တော့်ရင်ထဲ … သိမ့်ကနဲ ဖြစ်သွားပါတယ် … တကယ်ပါဗျာ … တင်သားဆိုင်လေး ပြန်တက်သွားတဲ့အချိန် … ရင်ထဲမှာ … ဒုန်းကနဲ ရင်ခုန်သွားတယ် … လှတယ်ဗျာ … သိပ်လှတယ် …
စာရေးကိရိယာဆိုင်ထဲ … သီရိဝင်သွားမှ … ကျွန်တော့် စိတ်တွေ … နည်းနည်း ပြန်ငြိမ်သွားသည် … မကောင်းပါဘူးလေ … သီရိ … A3 စာရွက် တလိပ် … တီ ပေတံ … ဝယ်တယ် …
“ကိုခန့် … ပုံဆွဲဖို့ … ဘာတွေလိုသေးလဲဟင် … “
“compass နဲ့ pencils လိုတယ် … ruler ကောင်းကောင်းလိုတယ်”
“STAEDTLER ဝယ်လေ … ကိုလည်း … ဒါပဲသုံးတယ်”
ဟဲ ဟဲ … ခပ်တည်တည်နဲ့ … ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကို လို့ သုံးကြည့်လိုက်တယ် … သီရိ … ဆတ်ကနဲ ကျွန်တော့်ကို … လှန်ကြည့်တယ် … သူ့အကြည့်က … ဘာမှလည်း မဆိုင်သေးပဲနဲ့ … ဒီလိုပြောရလားပေါ့ …
ဘောက်ချာဖြတ်တဲ့ ကုလားက … တော်တော် စကားရှည်တယ် … ဘာယူအုံးမလဲ … ဟိုဟာလိုသေးတယ် … ဒီဟာလိုသေးတယ် … သူပြောတိုင်း … သီရိက … ကျွန်တော့်ကို လှမ်းလှမ်းကြည့်တယ် … ထောက်ခံမဲတောင်းနေတာ … လိုအပ်သလား … ယူသင့်သလား … ပေါ့ … လိုအပ်တာလေး နည်းနည်းဝယ်ပြီး … ကျွန်တော်တို့ ပြန်ထွက်လာတယ် … သီရိ ဝယ်သမျှအထုပ်တွေကို … ကျွန်တော်ပဲ ဆွဲတယ် … ယောက်ျားလေးပဲဗျာ … ဒီလောက်တော့ … လုပ်သင့်ပါတယ် … ဟုတ်ဘူးလား … ဒီတခါတော့ … ကားလမ်းကူးတာ … ကျွန်တော်သေပြီ … ကျွန်တော် မကူးရဲဘူး … ခုနက သီရိ ဆွဲခေါ်သွားတော့ … အလွယ်တကူပဲ … အခုတော့ … ကျွန်တော် မကူးရဲ … မကူးတတ် … သီရိလမ်းကူးတာ တဝက်ရောက်သွားပြီ … စိတ်ထင့်သွားတယ်နဲ့ တူတယ် … ကျွန်တော့်ကို … ပြန်လှည့်ကြည့်တယ် …
“လာလေ … ကိုခန့် … မြန်မြန်”
ကျွန်တော် ဘာစကားမှ ပြန်မပြောတတ် … တကယ်ပါဗျာ … ကျွန်တော် … အရမ်းငိုချင်လာတယ် … ခြေထောက်တွေက … တလှမ်းဆို … တလှမ်းမှ ရွှေ့လို့မရဘူးဗျာ …ချီတုံချတုံနဲ့ … မကူးရဲဘူးဗျာ … မကူးရဲဘူး …
သတ္တိနည်းတယ်ပဲပြောပြော … တကယ်ကို … မကူးရဲတာဗျာ … သီရိ … ပြန်လှည့်လာတယ် … ကျွန်တော် အရမ်းဝမ်းသာသွားတယ် … ကယ်တင်ရှင်မလေး … ကျွန်တော့်လက်ကို အတင်းဆွဲပြီး …
“မြန်မြန်ကူး … ဟိုမှာ မီးပွိုင့်စိမ်းသွားပြီ …”
ညာဘက်ကနေ … ကားတွေ ဝေါကနဲ ပြေးချလာသည် … သီရိက ရှေ့ကပြေး … ကျွန်တော်က နောက်က ပြေး … မိုင်ကုန်ပဲ … ကျွန်တော်ဗျာ … ဝမ်းသာတယ် … အရမ်းဝမ်းသာတယ် … ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာ … ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက … ပြန်လာခေါ်တဲ့ … ခံစားချက်ကို … ဒီတသက်မေ့မှာမဟုတ်ဘူး … သီရိလက်ကို … ခပ်တင်းတင်းကိုင်ထားရင်း … ဝမ်းသာပီတီကြောင့် … ကျွန်တော့် ခြေထောက်တွေ … ကတ္တရာလမ်းနဲ့ ထိတယ်လို့ … မထင်ဘူးဗျာ … ဟိုဘက်ခြမ်းက … လူတချို့ကလည်း … ကျွန်တော်တို့ကို … ၀ိုင်းကြည့်တယ် … သိပ်လှတဲ့ ကောင်မလေးက … လမ်းတဝက်ကနေ … ကောင်လေးကို ပြန်လာခေါ်ပြီး … ပြေးတယ် … အားကျတဲ့အကြည့်တွေကို … ကျွန်တော် သေချာမြင်လိုက်ပါတယ် … အရမ်းကို ကျေနပ်တယ်ဗျာ … ကျေနပ်တယ် … ကျွန်တော်လေ … ပျော်လွန်းလို့ … မျက်နှာက ပြုံးဖြီးဖြီး ဖြစ်နေမှာပဲဗျာ …
“ကိုခန့်က … ကားလမ်း မကူးတတ်ဘူးလား”
“ဟင့်အင်း … ကူးတတ်ဘူး”
“ဘာဖြစ်လို့လဲဟင် … ကြောက်လို့လား”
“အင်း … ကားတွေက ဝှီးကနဲ ဝှီးကနဲ ဖြတ်နေတာ … မကူးတတ်ဘူးဗျာ … သီရိလာခေါ်လို့ … နို့မို့ဆို … မလွယ်ဘူး …”
“အားကိုးတယ်ပေါ့ … တော်တော်ဟုတ်တယ် … သီရိက … အားကိုးရမလား မှတ်တယ် … ကိုခန့်က … ဆိုးတယ်နော် …”
“မဆိုးပါဘူးဗျာ … နယ်ကလာတော့လေ … အကျင့်မရသေးလို့ပါ …”
“တော်ပါ … ကားလမ်းကူးတတ်မှ … ရီးစားစကား လာပြော … ခစ် ခစ်”
“အင်း … လက်လွှတ်အုံး …”
“ဟင့်အင်း … တသက်လုံး သီရိလက်ကို ကိုင်ထားချင်တယ် …”
“အပိုတွေ … လမ်းဖြင့်မကူးတတ်ပဲနဲ့ … လွှတ်ပေးကွာ … သီရိ ရှက်လာပြီ …”
“မစောတော့ဘူး … ၄ နာရီခွဲကျော်နေပြီ …”
“ကျွန်တော် အရမ်း ဝမ်းသာတယ် သိလား … သီရိ ပြန်လာခေါ်တာကိုလေ … အရမ်းဝမ်းသာတယ် …”
“ခစ် ခစ် … လမ်းမကူးတတ်တဲ့ တောသား …”
လမ်းမကူးတတ်တဲ့ … တောသားကို … မြို့သူလှလှလေးက … လက်ဆွဲပြီး ပြေးတယ်လေ … ဟဲ ဟဲ … ကျွန်တော့်စိတ်တွေ … အရမ်းပျော်နေတယ်ဗျာ … ကားပေါ်တက်ထိုင်ပြီး … အထုပ်တွေနောက်ထဲထည့်တော့ … ကျွန်တော်ကလည်း အလှည့် … သီရိကလည်း အလှည့် … သီရိမျက်နှာလေးနဲ့ … ကျွန်တော် တော်တော်လေး ကပ်သွားတယ် … သီရိရဲ့ ဝင်လေထွက်လေ … နွေးနွေးလေးက … ကျွန်တော့်ပါးကို လာထိတယ် … တစက္ကန့် … နှစ်စက္ကန့် … သုံးစက္ကန့် … ရုတ်တရက်ဗျာ … ကမ္ဘာကြီး ရပ်သွားသလိုပဲ … ကျွန်တော်လေ … အချိန်တွေကို ရပ်ဆိုင်းလို့ရရင် … ဒီအတိုင်းလေးပဲ ရပ်ထားပစ်လိုက်ချင်ပါတယ် … အရင်ဆုံး လွှဲဖယ်လိုက်တာက … သီရိ …
“ခန့်နော် … လမ်းလယ်ကောင်ကြီးမှာ”
ခန့် … တဲ့ဗျာ … ကို တလုံး မကြားမိတာလား … ပြုတ်ကျန်ခဲ့တာလား … မဖြစ်နိုင်ဘူး … ဒီလောက်ကပ်ကပ်လေး ပြောတာကို … တမင်သက်သက် သီရိ ချန်ခဲ့တာ … သေချာတယ် … ဟာဗျာ … လှိုက်ကနဲ ဝမ်းသာသွားတဲ့ … စိတ်ကို … ဘယ်လို ပြောရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး …
“ခန့် တလုံးပဲ ခေါ်တာလားဟင် …”
ကျွန်တော်က မသေချာမှာစိုးလို့ … သီရိမျက်ဝန်းလေးကို … သေချာစိုက်ကြည့်လိုက်တော့ … သီရိ အကြည့်လွှဲသွားပြန်တယ် … ဒါပေမယ့် … နှုတ်ခမ်းဖူးလေးက …
“အင်း …” တဲ့ …
သီရိနဲ့ … ကျွန်တော် ပိုရင်းနှီးသွားတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ် … ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ … ပျော်ရွှင်ခြင်း … ကြည်နူးခြင်း … ချစ်ခြင်းတွေကြောင့် … ကျွန်တော့် စိတ်တွေ လေထဲ လွင့်နေသလို ခံစားရပါတယ် …
“သီရိလက်ကို … တသက်လုံး ကိုင်ထားခွင့် ဘယ်တော့ရမှာလဲဟင်”
“တို့ ပြောပြီးပြီပဲ … ကားလမ်းကူးတတ်မှလို့ …”
“တကယ်ပေါ့ … ခန့်ရဲ့ … သီရိ မလိမ်တတ်ဘူး … ဟာကွာ … မမေးနဲ့တော့ … သီရိ အရမ်းရှက်လာပြီ …”
“ဟား ဟား ဟား … အရမ်းပျော်တယ် … နော် … သီရိ”
“ခစ် … ခစ် .. ခစ် … တော်ပါ …”
သီရိ … ရှက်လွန်းလို့ထင်ပါရဲ့ … ဟိုဘက်လှည့်ပြီး … အပြင်ကို ကြည့်နေတယ် … မျက်နှာလွှဲထားတဲ့ … မျက်နှာလေးက … ရှက်သွေးတွေ ယှက်ဖြှာလို့ နေသည် … ချစ်တယ် သီရိရယ် … ချစ်တယ် … ဘောက်စဂွန်ကားလေးက … အချစ်တွေ လျှံကျနေလို့လား မသိပါဘူးဗျာ … ရွှတ်ကနဲ … မြေနီကုန်းရောက်သွားသည် … ဟာဗျာ … မြန်လိုက်တာ … သီရိ အိမ်နားရောက်တော့မယ် …
“လမ်းထိပ်မှာပဲ … ရပ်လိုက်နော် … ခန့် “
“အင်း … သီရိအိမ်ကို လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ”
“ဟင့်အင်း … မေမေ ဆူလိမ့်မယ် … နားလည်တယ်မှတ်လား”
“အင်း … ဖုန်းနံပါတ်ပေးအုံးလေ …”
“တို့ ဆက်လိုက်မယ်နော် … ဒီမှာရေးပေး …”
“အင်း … သီရိ … မနက် ကျောင်းဘယ်လိုသွားမှာလဲဟင် …”
“၂၁၆ လိုင်းကားစီးသွားမယ်လေ … “
“ဟင့်အင်း … သွားနဲ့ … ကို လာကြိုမယ် … ၆ နာရီ … ဒီနေရာမှာပဲ စောင့်နေ …”
“အင်း … ၆ နာရီနော် … စောင့်နေမယ် …”
“သီရိ … တို့က … တကယ်ချစ်တာနော် … ပြန်ချစ်မယ် မှတ်လားဟင်”
“တို့ ပြောပြီးပြီပဲ … လမ်းကူးတတ်မှ … ရီးစားစကား လာပြောလို့ … ခစ်ခစ် … တော်ပါ … ကားသေချာမောင်းသွားအုံး”
“အင်းပါ … ချစ်တယ်နော် … သီရိ”
“သွားတော့နော် … မေမေ ထွက်လာရင် … ပြဿနာတက်မှာစိုးလို့ …”
“ဖုန်းဆက်လိုက် … စောင့်နေမယ် …”
ကားလေးကို … မောင်းထွက်လိုက်ပေမယ့် … စိတ်တွေက … ချစ်သူဆီမှာ ကျန်ခဲ့သည် … နောက်ကြည့်မှန်ကနေ … သီရိလက်ပြနေတာကို … ကျေနပ်သဘောကျပေမယ့် … သီရိကျန်ခဲ့တာကို … စိတ်မကောင်းဘူး … ချစ်ဦးစဆိုတော့လေ … အချိန်လေးတခု ခွဲနေရတာကို … ဝမ်းနည်းမိတာ … ရင်ထဲက ဆန္ဒပါ … တကယ်လည်း … ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ … သီရိလက်လေးကို … တချိန်လုံး ကိုင်ထားချင်တယ်ဗျာ … ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို … အခုမှ စသိပေမယ့် … ကျွန်တော်လေ … အချစ်ကို မဝေခွဲတတ်သေးဘူး … သိပ်လှတဲ့ … သီရိကို … ချစ်မိတာ … သီရိရဲ့ အလှတရားကြောင့်လား … အတွေ့အထိကြောင့်လား … မနက်တုန်းက … ယွန်းအိကို ကျွန်တော် … စိတ်ဝင်စားမိတာကကော … ကျွန်တော် … ယွန်းအိကို ချစ်တာလား … ကျွန်တော် ချစ်တာ … ယွန်းအိလား … သီရိလား … ဟာဗျာ … ခေါင်းတွေ ရှုပ်လာပြီ … အချစ်ဆိုတဲ့ အရာဘယ်လိုမှန်း ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမယ်မှန်း … မသိပေမယ့် … သေချာတာတော့ သီရိကို ရီးစားစကားပြောခဲ့ပြီးပြီ … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သီရိကို ချစ်တယ်ဗျာ …
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ … ဘကြီးခန့်က … ဧည့်ခန်းထဲမှာ … ပုလင်းသေးသေးလေး တခုကို တသသနဲ့ ကြည့်နေပါတယ် … ပုလင်းလေးထဲက … အရည်က အပြာရောင် … တချက်တချက် … လက်ကနဲ လက်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် … ကျွန်တော်ကတော့ စိတ်မဝင်စားဘူး … သီရိနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ကြည်နူးမှုတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ကို … ဘကြီးခန့် ပုလင်းလေးက … မလွှမ်းမိုးနိုင်ပါဘူးဗျာ … ဘကြီးခန့်က … ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး …
“သား … ကျောင်းသွားတာ … အဆင်ပြေရဲ့လား”
“ဟုတ် … ပြေပါတယ် … ဘကြီးခန့်ရဲ့ …”
“ဟုတ်လား … သားပုံစံက … တော်တော် အဆင်ပြေလာပုံရတယ် …”
ကျွန်တော် နည်းနည်းတော့ လန့်သွားသည် … ဘကြီးခန့်ပုံစံက ဆူတာလည်း မဟုတ် … ရိတာလည်းမဟုတ် … သူ ဘာပြောချင်တာလဲ … ကျွန်တော့်ကားပေါ်မှာ ကောင်မလေး သုံးယောက်ပါလာတာ … သီရိနဲ့ … ငြိတိတိဖြစ်ခဲ့တာ … ဘကြီးခန့်က သိနေတာလား … မေမေ မသေပြောဖူးတာက … ဘကြီးခန့်က … အနံ့အာရုံ ခံနိုင်တယ်တဲ့ … လူတွေရဲ့အနံ့ကို ခံပြီး လူကောင်းလား … လူဆိုးလား … ဘဝဖြစ်စဉ်ကို တခါတလေ ပြောပြပေးနိုင်တယ်တဲ့ … ကျွန်တော့်ရဲ့ မေမေဘက်က အမျိုးတွေမှာ … တယောက်ကို တမျိုးစီ … စိတ်စွမ်းအင်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ် … တခါတလေလည်း … ပြင်းပြင်းထန်ထန် အာရုံရတယ် … တခါတလေလည်း … မရဘူး … ဆန်းတော့ ဆန်းတယ်ဗျ … အထူးသဖြင့် … ဘကြီးခန့်ပေါ့ … လူတယောက်ကို အာရုံစိုက်ပြီး အနံ့ခံရင် … မိုင်ထောင်ချီအောင်ဝေးလည်း … ဘယ်မှာ ရှိတယ်ဆိုတာ သိတယ်တဲ့ … ငယ်ငယ်က မေမေပြောတုန်းကတော့ … ပုံပြင်လို့ပဲ ထင်ထားတာ … အခုတော့ … ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်က အနံ့တွေ … သူ ရနေပြီ …
“ဟား ဟား … ငါ့သားကိုယ်ပေါ်မှာ … အပျိုနံ့တွေ သင်းထုံနေတယ်လေ …”
ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး သဘောကျသလိုနဲ့ … ဘကြီးခန့် … ပြောတော့ … ဘကြီးခန့်နားမှာ ထိုင်ပြီး … ကျွန်တော်လည်း … ကိုယ့်ကိုကိုယ် နမ်းကြည့်တယ် …
“ဟုတ်လား … ကျွန်တော်တော့ဘာနံ့မှ မရဘူး …”
“အင်း … သားက ဘယ်ခံစားလို့ရအုံးမလဲ … ဒါတွေက အလေ့အကျင့်နဲ့ ဆိုင်တယ်လေ …”
“ဟုတ်ကဲ့ … ကျောင်းကအပြန် … ကောင်မလေးသုံးယောက်နဲ့ အတူတူပြန်ခဲ့ပါတယ် … ဘကြီးခန့် …”
“ငါ့သားက တယ်စွံပါလား … ဟေ့”
“မစွံပါဘူး … ဘကြီးခန့်ရယ် … အခုမှ သူငယ်ချင်းဖြစ်ကြတာ”
“အင်း … တခုတော့ သတိပေးမယ် … သား … ဂရုစိုက်ရမယ်”
“ဟုတ်ကဲ့ ပြောပါ ဘကြီးခန့် …”
လူကြီးသူမက ဆုံးမတာကို နာခံရမယ်လေ … ဘကြီးခန့်ဆိုတာကလည်း … အလကားနေရင် ဆူပူတာမျိုးတခါမှ မရှိဘူး … အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် … ပြောပြသွန်သင်တတ်ပါတယ် … ဘကြီးခန့်ပြောတာကို … ကျွန်တော် သေချာ နားထောင်ဖြစ်တယ် … ဘကြီးခန့်က မျက်စိမှိတ်ပြီး …
“သားနဲ့ … အတူတူပြန်လာတဲ့ ကောင်မလေး သုံးယောက်ထဲက … တယောက်က … Aphrodite ရဲ့ ကိုယ်နံ့မျိုးဖြစ်နေတယ် …”
“ခင်ဗျာ … “
Aphrodite ဆိုတာ ဘာလဲဗျာ … ကျွန်တော်လည်း မသိဘူး … အလှကုန်ပစ္စည်းလား … ဖြစ်နိုင်တယ် … ပေါင်းတည် ဘုရားပွဲတုန်းက … အလှကုန်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာ ဆိုင်းဘုတ်အကြီးကြီး တွေ့ဖူးတယ် …
“ဘာပြောတာလဲဟင် … ဘကြီးခန့် … ကျွန်တော် မသိလို့ပါ …”
“အင်း … Aphrodite ဆိုတာကလေ … ဂရိနတ်ဘုရားမ တပါးပေါ့ …”
“ဗျာ … ဟုတ် …”
Aphrodite နဲ့ … သီရိတို့ ဘာဆိုင်လို့လဲဗျာ … တမျိုးပဲ … သိပ်နားမလည်တော့ … ဘကြီးခန့်ပြောတာကို ဆက်နားထောင်ဖြစ်တယ် …
“ဒီနတ်ဘုရားမက … လူသားတွေနေတဲ့ … ကမ္ဘာမြေဆီကို … ချစ်ခြင်းမေတ္တာရယ် … အလှတရားရယ် သယ်ဆောင်လာတယ် …”
“သူက အရမ်းလှတယ် သား … ဘယ်လောက်လှသလဲဆိုရင် … နတ်ဘုရားအချင်းချင်းတောင် … ဖောက်ပြန်စေလောက်အောင် … လှတယ် …”
“နောက် သူက … အလိုရမက်လည်း ကြီးတယ် … သစ္စာလည်းမရှိဘူး … သူ့ယောက်ျား … နတ်ဘုရား နောက်ကွယ်မှာ … ဖောက်ပြန်တယ် … ဇာတ်လမ်းတွေ အများကြီးပဲ … နောက်ပြီး စိတ်ဆိုးလွယ်တယ် … အပြစ်ဒဏ်ပေးလွယ်တယ် …”
“မိန်းကလေး တယောက်မှာ … Aphrodite ရဲ့ အနံ့မျိုးရရင် … အများအားဖြင့် … အဲဒီမိန်းကလေးဟာ … ရွှေအဆင်းလို လှတယ် … တော်ရုံယောက်ျားလေး … မကြည့်ပဲမနေနိုင်ဘူး … အလိုရမက်ကြီးတယ် … သစ္စာမရှိဘူး … အချစ်နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် … လိုက်တဲ့ သဘောရှိတယ် … သား”
ကျွန်တော် အရမ်းအံ့သြသွားတယ် … ဘကြီးခန့် ပြောချင်တာ … နည်းနည်းတော့ နားလည်လိုက်တယ် … သီရိ … ယွန်းအိ … အေးမြတ် … ဒီသုံးယောက်ထဲက … တယောက်က Aphrodite နတ်ဘုရားမလို ဖြစ်မယ့်သူလား …
“Aphrodite ရဲ့ ကိုယ်ရနံ့မျိုးနဲ့ မွေးဖွားလာတဲ့ ကလေးမ တယောက်ကို … မချစ်ပါနဲ့ မကြိုက်ပါနဲ့ … တားဆီးဖို့ခက်တယ် … ဘာလို့လဲဆိုတော့ … Aphrodite က ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို … ကမ္ဘာမြေကို သယ်ဆောင်လာလို့”
“သူ့ရဲ့ ကိုယ်နံ့ကို ရလိုက်တာနဲ့ … အချစ်စိတ်တွေ ဝင်သွားတယ် … တခြားအာရုံတွေ ပျောက်ပြီး … သူ့ကိုပဲ ချစ်ချင်တဲ့ စိတ်ပဲ ပေါ်နေလောက်အောင် … ဖမ်းစားနိုင်တယ် … သတိထားပေါ့သားရယ် … ဟုတ်ပြီလား”
“အပြစ်ဒဏ်ပေးလွယ်တယ် … ဆိုတာကကောဟင်”
“သူ့စိတ်အလိုက … အပြောင်းအလဲ မြန်တယ် … သူ့ကို ချစ်တဲ့စိတ်လျော့သွားတာနဲ့ … သူက ပြဿနာတွေ ဖန်တီးလေ့ရှိတယ် သား”
“ဟုတ်ကဲ့ … သား ဂရုစိုက်ပါ့မယ် …”
“အေးပါ … သားရယ် … အထိအတွေ့ကို … ဂရုစိုက်ပေါ့ … ဘကြီးကတော့ ဒါပဲ မှာချင်တယ် …”
“ဟုတ်ကဲ့ … စိတ်ချပါ … ဘကြီးခန့်”
ဇဝေဇဝါနဲ့ … ကျွန်တော်ထလာပြီး … ကျွန်တော့အခန်းထဲ … ရောက်တော့ … ခေါင်းထဲ ဝင်လာတာက … သီရိ … သိပ်လှတဲ့ကောင်မလေးက … Aphrodite ရဲ့ ကိုယ်ရနံ့မျိုးရှိနေလို့လား … သီရိနဲ့ အတူတူသွားတဲ့အခါ … ဘာလို့ ချစ်စိတ်တွေ ယိုဖိတ်လာတာလဲ … အချစ်ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ်ဖြစ်တာလား … ဒါမှမဟုတ် … ဘကြီးခန့် ပြောသလို … ဖြစ်နေတာလား … သူနဲ့ ချစ်ရင် … သီရိကကော သစ္စာရောရှိပါ့မလား … ကျွန်တော့်စိတ်မှာ … ချစ်မိလေတော့လည်း … ချစ်ရသူလေးဘက်ကို … ဖေးဖေးမမလေးတွေးကြည့်သည် … သီရိက … မျက်နှာများတဲ့ … မိန်းကလေးတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး … မာနတော့ နည်းနည်းကြီးတယ် … လှတာကိုး … မာနကြီးတာလည်း တမျိုးကောင်းတာပဲ … တော်ရုံယောက်ျားလေး … ကပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ … ချစ်တယ် … သီရိရယ် … ချစ်တယ် … သီရိနဲ့ ချစ်ပြီးမှ … ချစ်ငြိုးပြစ်ဒဏ်တွေလည်း … ပေးချင်ပေးပါစေလေ … ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး … သီရိက … ကျွန်တော့်ကို … ချစ်လို့ မလုပ်ရက်ဘူးလို့ ယုံတယ် … ဒီအချိန်မှာ … ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ … ယွန်းအိအကြောင်းမေ့သွားတာ … အမှန်ပါပဲ … အေးအေးလေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ … ယွန်းအိကို … စစချင်းတွေ့ပေမယ့် … အခုတော့ … ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ … သီရိမှ … သီရိ ဖြစ်နေပါတယ် … သိပ်လှတဲ့ … သီရိ … အခုချိန်ဆို … ဘာတွေများလုပ်နေမလဲဗျာ … အာရုံစိုက်ပြီး … သီရိအကြောင်းလေးကို စဉ်းစားတော့ … အတွေးထဲမှာ သီရိပေါ်လာသည် … သီရိ … ရေချိုးဖို့ … အင်္ကျီလေးကို ချွတ်နေသည် … သိပ်လှတဲ့ သီရိမှာ … စွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့ ရင်နှစ်မွှာရှိတာ … ကျွန်တော်သိပါတယ် … အရင်တုန်းက … မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် … ကျွန်တော့်စိတ်က ရိုးသားပေမယ့် … အခုတော့ ဆန်းပြားချင်နေပါတယ် … သီရိရဲ့ လှသွေးကြွယ်နေတာလေးကို … မြင်မိတွေ့မိတော့ … ယောက်ျားစိတ်တွေ … ထကြွလို့လာပါတယ် … ချစ်ချင်တယ် သီရိရယ် … ထွားအိတဲ့ ရင်သားတွေက … လှလိုက်တာဗျာ … အတွေးထဲက … သီရိ ရင်နှစ်မွှာက … ဝင်းမွတ်နေသည် … ပန်းသစ်တော်သီးလို … ထွားထွားမို့မို့နဲ့ … ထိပ်ဖျားလေးက … ပန်းနီရောင်လေး … ဂွမ်းပုံလေးထဲမှာ နစ်နေသလို … သေးသေးလေး … ဟင်း … ကျွန်တော့်ရင်တွေ ပူလာသည် … ချစ်ချင်လာပြီကွာ … သီရိ ရင်သားလေးကို ပွတ်သပ်ချင်တယ် … ဖြစ်နိုင်ရင် … အနမ်းပွင့်လေးတွေ ပေးကြည့်ချင်တယ် … သီရိက … ခွင့်ပြုပါ့မလား … ခွင့်ပြုပါ သီရိရယ် … နော် … ရင်နှစ်မွှာကို ဆော့ကစားပြီးရင် … အောက်က … တင်သားဆိုင်လေးတွေကိုလည်း … ကိုင်ကြည့်ချင်တယ် … ကျောင်းကအပြန် လမ်းလျှောက်တုန်းက … ဖွံ့ဖွံ့ကားကား … တင်သားဆိုင်လေးတွေ … လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ … ဖြစ်နေတာကို … ပြန်သတိရမိသည် … ရင်ပူစေတယ်ဗျာ … စိတ်ကြွစေတယ် … ဘယ်အချိန်မှ … သီရိရဲ့ တင်သားဆိုင်လေးတွေကို … ပွတ်သပ်ခွင့် ရမလဲမသိပါဘူးဗျာ … ကိုင်ခွင့်ရရင်တော့လေ … ကျွန်တော့်လက်ဝါးနဲ့ အုပ်ပြီး … ခပ်တင်းတင်း ကိုင်ကြည့်ချင်တယ် … လက်ဝါးနဲ့တောင် ဆန့်ပါ့မလား …
ဖြတ်ကနဲ ပေါ်လာတဲ့ အတွေးထဲမှာ … ဖောင်းမို့နေတဲ့ … ပန်းနုရောင် တောင်ကုန်းလေး … သွယ်သွယ်လျလျ … ပေါင်တံလေးနှစ်ခုကြားက … ဝင်းဝင်းမို့မို့လေး … နုထွားလေးမို့ … ကိုင်ကြည့်ချင်သည် … ရွှေအိုရောင် ပြောင်းဖူးမွှေးတွေလို … အမွှေးနုလေးတွေက … ပေါက်ခါစ … သေချာမြင်လိုက်ရတာ … ညာဘက်ပွင့်ဖတ်လေးပေါ်မှာ …အနီရောင် အစက်လေးတစက် … ခဲတံနောက်က … ခဲဖျက်အရွယ်အဝိုင်းလောက်ရှိတဲ့ … အမှတ်လေး … လှလိုက်တာဗျာ … တကယ်ချစ်ပြီဆိုမှ … ဟုတ်မဟုတ် … သေချာအောင် ကြည့်ရမယ် … အခုတော့ … နမ်းချင်လာပြီဗျာ … အော် သီရိ … သီရိ … အလှချင်းပြိုင်ရင် … ဘယ်သူနိုင်ပါ့မလဲ … ဘကြီးခန့်ပြောသလို … Aphrodite ဖန်ဆင်းထားတဲ့ သမီးပျိုလားမသိပါဘူး … သီရိရယ် … မနက်ဖြန်မနက် … တွေ့လို့ … စိတ်မထိန်းနိုင်ရင် … ဖက်နမ်းပစ်မိလိမ့်မယ် … အမျက်တော်ရှပြီး … ပြစ်ဒဏ်ပေးလည်း … ခံချင်ပါတယ် … ဖြစ်ချင်တာသာ ဖြစ်ပလေ့စေတော့ … ကျွန်တော်လေ … Aphrodite မလေးကို … ရယူပိုင်ဆိုင်ချင်လာပြီ … ဆန္ဒတွေကြောင့် ထကြွလာတဲ့ တဏှာကို … ကျွန်တော် ဘယ်လိုရှင်းရမလဲ … အတွင်းခံ ဘောင်းဘီအောက်မှာ … တောင့်တင်းနေတဲ့ … အောက်ကကောင်ကြောင့် … ကျွန်တော့် အောင့်လာပါတယ် … ခန္ဓာကိုယ်က … အကြောတွေ တင်းလာပြီး … ရင်တွေလည်း ပူလာပါတယ် … သွေးသားက တောင်းဆိုလာလို့ … သွေးကြောထဲမှာ … ပုရွက်ဆိတ်တွေ လျှောက်သွားနေသလို … ယားနေတော့ … ဟာဗျာ … မဖြစ်သေးပါဘူး … စိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် … ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး … ခေါင်းကနေ … လောင်းချိုးပစ်လိုက်တယ် … အေးမြတဲ့ရေက … ခန္ဓာကိုယ်က အပူတွေကို … လျော့ကျသွားစေပါတယ် … ဒါပေမယ့် … သီရိကို ချစ်တဲ့ စိတ်က … ဒီရေအလား တိုးလို့သာနေပါတယ် … ရေချိုးပြီးတော့ … စာအုပ်တွေထုတ်ပြီး … စာကြည့်လိုက်တယ် … အာရုံစိုက်ပြီး စာဖတ်နေရင်း … ယွန်းအိလေးက … အတွေးထဲ ရောက်လာပြန်တယ် … ဟင်း … ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ယွန်းအိကိုလေ … သိပ်လှတဲ့ သီရိသာ မရှိရင် … ကျွန်တော် ချစ်မိသွားလိမ့်မယ် … ကျွန်တော် နှစ်သက်သဘောကျတဲ့ မိန်းကလေးပုံစံမျိုးက … ယွန်းအိလေးလိုမျိုး … ချစ်ဖို့လည်း ကောင်းတယ် … မျက်စိလည်း အေးစေတဲ့ မေ့မေ့လို မိန်းကလေးမျိုးကို … လိုချင်ပါတယ် … ယောက်ျားလေးတော်တော်များများက … သူတို့ရဲ့ အမေနဲ့ တူတဲ့ … မိန်းကလေးမျိုးကို … လိုက်ရှာကြတယ်တဲ့ … အမေ့ရဲ့ နွေးထွေးမှု … ယုယမှု … ကြင်နာမှု လိုမျိုးပေးနိုင်တဲ့ … မိန်းကလေးမျိုးကို … တောင့်တကြတယ်တဲ့ … ဒါပေမယ့်လည်း … ကံဆိုတဲ့ ဇာတ်ဆရာအလိုကျ … ဖူးစာဖက်ရတာပါပဲ …
စာအုပ်တွေ ဖွင့်ထားပြီး … အတွေးတွေက … တောရောက်တောင်ရောက်နဲ့ … ဖြစ်နေတုန်း … ဘကြီးခန့် တံခါးလာခေါက်တယ် …
“သား … ဖုန်းလာနေတယ် … ကောင်မလေး တယောက်ပဲ”
“ဟုတ်ကဲ့ … ဘကြီးခန့်”
သီရိများ ဆက်တာလား … ကျွန်တော် … ဖုန်းသွာကိုင်တော့ … ခပ်ချိုချိုအသံလေးက … ယွန်းအိ …
“ဟယ်လို … ကိုခန့်လား”
“ဟယ်လို … ယွန်းအိလား”
“အင်း … ပြန်ရောက်ပြီပေါ့”
“သီရိကို … သေချာမှ ပြန်ပို့ပေးလိုက်ရဲ့လား”
“ဟိတ် … မှန်မှန်ပြောနော် … သီရိကို ကြိုက်လား”
ဘယ်လို ပြောရမလဲဗျာ … သိပ်လှတဲ့ ကောင်မလေးကို … မကြိုက်ဘူးဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး … သီရိကိုလည်း … ရီးစားစကားပြောပြီးသွားပြီ … ဒါပေမယ့်ဗျာ … ကျွန်တော်လေ … ယွန်းအိကို … မပြောပြချင်ဘူး … ဘာကြောင့်ရယ်ဆိုတာ သေချာမသိပေမယ့် … ယွန်းအိ မသိစေချင်ဘူး …
“ယွန်းအိကလည်း … အခုမှ ခင်ကြမင်ကြတာကို”
“အခုမှဆိုတော့ … စောသေးတယ်ပေါ့ … နောက်မှပေါ့ ဟုတ်လား”
“ယွန်းအိ … သိပ်မစနဲ့ကွာ … အဖြူကို အရောင်မဆိုးရဘူးလေ”
“အင်းပါနော် … နောက်မှ … အဲဒီအဖြူကို အရောင်ဆိုးချင်လို့ … ယွန်းအိရယ် … ကူညီပါအုံးဆို … ဟိ ဟိ …”
“ဟား ဟား … ပြောလေ … ကဲလေပဲ … ယွန်းအိ … စိတ်ကျေနပ်အောင် … ပြောပြမယ် … သီရိက တအားလှတယ် … အရမ်းကြိုက်တယ် … ဟုတ်ပြီလား”
“ဟင် … အဲဒါများ ကိုခန့်ရယ် … ညနေက အတူတူ ပြန်တာ … ကားပေါ်မှာ … အပိုင်ပဲ …”
“ဟုတ်တယ်နော် … ဒါပေမယ့် … ကျွန်တော် မပြောတတ်ဘူး”
“အလိုက်တာ … ဟိတ် သီရိ … မင်းတို့ကို ပြန်ချစ်ချင်ချစ် … မချစ်ရင် … အိမ်ခေါ်သွားမယ်”
ဟိုက် … ဗိုလ်အောင်ဒင်လေသံနဲ့ … ယွန်းအိ … ကျွန်တော့်ကို လက်ချာလာပေးနေတယ် … သီရိကို … ချစ်ခွင့်တောင်းတာ … လက်တကမ်းအလိုတောင် ရောက်နေတာ သူမသိသေး … စိတ်ထဲမှာ တဟားဟားရီပြီး … ကလေးဆန်တဲ့ … ယွန်းအိပြောသမျှ … လျှောက်ပြောရင်း … ဖုန်းချလိုက်တယ် … ယွန်းအိနဲ့ စကားပြောရင် … ကျွန်တော့်စိတ်တွေ … ပျော်ရွှင်ကြည်နူးလာတာ … ယွန်းအိ အစွမ်းလားတော့ မသိပါဘူး … ကျွန်တော် … ဖုန်းမျှော်နေတာက … သီရိ … ဆက်တာက … ယွန်းအိ …
သီရိ ဆီကဖုန်းကို … စောင့်ရင်း … ဧည့်ခန်းထဲမှာ တီဗီ ထိုင်ကြည့်နေတာ … ၁၀ နာရီလည်း … မလာသေးဘူး … ၁၁ နာရီလည်း … မလာသေးဘူး … ၁၂ နာရီ … မျက်စိလည်း ညောင်းလာပြီ … အိပ်ချင်လာပြီ … ဘကြီးခန့်ကတော့ … အိပ်ပျော်သွားပြီ … အိပ်ခန်းထဲ ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့မှ … ဖုန်းလေးက … ကလင် ကလင် ထမြည်သည် … သီရိ … သေချာတယ် သီရိဆက်တာ … ဝမ်းသာအားရ … ဖုန်းကောက်ကိုင်လိုက်တော့ … ကျွန်တော့် အတွေး မှန်တယ် …
“ဟယ် … လို …”
“ဟုတ်တယ် … အချစ်”
“ဘာအချစ်လည်း … ဟွန့် … သူ့ကိုတောင် အဖြေမပေးရသေးပဲနဲ့ … လူကိုနော် … ပိုင်စိုးပိုင်နင်းနဲ့ … ခန့်နော် … မအိပ်သေးဘူးလား”
“အိပ်သေးဘူး … သီရိဖုန်းကို စောင့်နေတာ”
“ဟုတ်တယ် … သီရိက ဆက်မယ်ဆိုလို့ ထိုင်စောင့်နေတာ … အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ … ချစ်တယ် ခန့်ရယ်လို့ များ ပြောမလားလို့ …”
“ဟား ဟား … ဖြစ်ရမယ် … တို့ပြောပြီးပြီပဲ … ကားလမ်း ကူးတတ်မှလို့ …”
“ကျွန်တော်တော့ … သီရိကို အရမ်းချစ်နေပြီသိလား …”
“အင်း … ဒါပဲနော် … မေမေလာနေပြီ … ၆ နာရီစောင့်နေမယ်”
ဂွပ်ကနဲ ဖုန်းချသွားတော့ … ကျွန်တော့်ရင်တွေ ဟာကနဲ ဖြစ်သွားသည် … ချစ်သူလေးနဲ့ … စကားပြောလို့ … ဖီလင်လေးက တက်ခါစ … ဖုန်းကို … ခွပ်ကနဲ ချသွားသည် … သီရိပုံစံက … သူ့အမေကို တော်တော်ကြောက်တဲ့ပုံ … ယောက္ခကြီးက လွယ်ဘူးနဲ့တူတယ် …
ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ကျွန်တော် အခန်းထဲ ပြန်လာပြီး … သွားတိုက် မျက်နှာသစ်ပြီး … အိပ်ယာထဲမှာ လှဲချလိုက်သည် … မနက် ၅ နာရီ ထနိုင်အောင် … နှိုးစက်လေးကို ပေးထားပြီး … ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ … ကျွန်တော် အိပ်ပျော်သွားသည် … ဖျက်ကနဲ ပြန်နိုးလာတော့ … ငါးနာရီထိုးဖို့ တမိနစ်အလို … အိပ်ယာကနေ မြန်မြန်ထ … ရေမိုးချိုးပြီး … သပ်သပ်ရပ်ဝတ်ပြီး … ဘကြီးခန့်ကတော့ ပြုံးစိစိနဲ့ … ကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေတယ် … ကျွန်တော်လည်း … ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ … ခပ်သုတ်သုတ် … မြေနီကုန်းဘက် ထွက်လာခဲ့တယ် …
၅း၄၅ … ချစ်ရသူလေးကတော့ … မထွက်လာသေးဘူး … သီရိထွက်လာမယ့် လမ်းလေးကို .. စောင့်ကြည့်နေရင်း … ကျွန်တော်ရင်တွေ ခုန်လာတယ် … သီရိရယ် … ဘာကြောင့် … သီရိအကြောင်းတွေးရင် ရင်တွေ ခုန်ရတာလဲ … ဘာကြောင့် … သီရိအလှတွေကို … တွေးမိရင် … သွေးတွေက ဆူပွက်လာတာလဲ … မတွေးတတ်ဘူးဗျာ … ချစ်တယ်ဗျာ … ချစ်ချင်တယ်ဗျာ … ကျွန်တော့် စိတ်နှလုံးကို ဖမ်းစားထားတဲ့ … အချစ်နတ်သမီးက … ဟော … လာပါပြီ … ပန်းနုရောင်ဇာ ဝမ်းဆက်လေးနဲ့ … လှလိုက်တာဗျာ … နုထွားတဲ့ … ရွှေရင်မို့မို့ကို … ပန်းနုရောင် ဖိုင်လေးနဲ့ … ရှက်ကိုးရှက်ကန်း … ကွယ်ထားသည် … သီရိလမ်းလျှောက်ပုံက … မော်ဒယ်တွေလို … မျဉ်းတပြေးတည်း … ဒါ့ကြောင့်ထင်ပါရဲ့ … မနေ့က … သီရိလျှောက်တာ … အလှုပ်အပြု နည်းနည်းလေး … ကြမ်းတယ်လို့ထင်တာ … ပန်းရောင် ဒေါက်ဖိနပ်လေးကို … စီးထားတဲ့ … ခြေဖဝါးလေးက … မျဉ်းတပြေးတည်းကျအောင် … လှမ်းတော့ … အနောက်က … တင်းသာဆိုင်တွေ … လှုပ်ခါပြီပေါ့ဗျာ … သိပ်လှတဲ့ သီရိ … လမ်းလျှောက်လာတာက … ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ … နတ်သမီးလေး လျှောက်လာသလိုပဲ … ချစ်ရတဲ့သူဆိုတော့ … အပြစ်မမြင်ဘူးပေါ့ … အနားကို နီးလာတော့ … သီရိမျက်နှာလေးက … သာမန်လောက်ပဲ ပြင်ထားသည် … ဒါပေမယ့် … ကျွန်တော် သိလိုက်တာက … ပန်းနုရောင် နှုတ်ခမ်းလေး … ပန်းရောင် ဝမ်းဆက်ဖက်ရှင်လား မသိပါဘူးဗျာ … သီရိ နှုတ်ခမ်းက မထူမပါး … အပေါ်နှုတ်ခမ်းက … ပါးတယ် … အောက်နှုတ်ခမ်းက ထူတယ် … နမ်းးချစ်စရာလေးဗျာ … အသဲယားလာပြီ … နေအုံးပေါ့ … သီရိရယ် … ချစ်တယ်လို့ … အဖြေပေးတဲ့နေ့ … အားရအောင် … နမ်းပစ်လိုက်အုံးမယ်ဗျာ … စိတ်ဆိုးချင်လည်း ဆိုးပလေ့စေ … အသဲယားတယ်ဗျာ …
“ရောက်နေတာ … ကြာပြီလား …
“ဟင့်အင်း ကြာသေးဘူး …
သီရိ … ကားပေါ်ရောက်တဲ့ အထိ … စောင့်နေလိုက်တယ် … ကားပေါ် စွေ့ကနဲ ဝင်လာတော့ … တင်သားဆိုင်အိအိလေးက … အိကနဲ … ပြားသွားသည် … ကျွန်တော် သက်ပြင်းလေး တချက် ခိုးချလိုက်သည် …
“အရမ်းလှတယ်နော် သီရိ … “
“အပိုတွေ … လာမြှောက်မနေနဲ့ … မုန့်ဟင်းခါးဝယ်ကျွေးမယ်နော်”
“ခဏလေးနော် … သီရိ …”
သီရိ ကားပေါ်ကနေ … ကျွန်တော့်ကို လိုက်ကြည့်နေတယ် … ကားပေါ်က ဆင်းပြီး … ပြည်လမ်း ဟိုဘက်ခြမ်းကို …ကူးလိုက်တယ် … ကားက ရှင်းတော့ … အေးဆေးပေါ့ … ဒီဘက်ပြန်လာတယ် … ကားထဲဝင်ပြီး …
“တွေ့လား … သီရိ …”
“ခစ် … ခစ် … အပိုတွေ …”
“အဖြေပေးတော့လေ … ကို … ကားလမ်းကူးတတ်သွားပြီ …”
“အံမယ် … လူလည်တော်တော်ကျတယ် … ကားမှမရှိတာ … ကူးရဲတာပေါ့ …”
“မရဘူး … မရဘူး … သီရိပဲ ပြောပြီးတော့ … ကားလမ်းကူးရဲရင် … ပြန်ချစ်မယ်ဆို …”
“အို … ခန့်နော် …”
“သီရိနော် … မညစ်ပတ်ရဘူး … ကတိတည်ရမယ်လေ …”
“ဟာ … မရဘူးလေ … တို့ပြောတာက … လမ်း ၃ဝနားက ကူးခိုင်းတာ … ခန့် ဉာဏ်မများနဲ့နော် …”
ချစ်လွန်းလို့ လူလည်ကျကြည့်တာ … ရဘူးဗျ … သီရိက လည်တယ် … အဖြေပေးသေးဘူး … ညစ်ထားတယ် … သီရိ ကျွန်တော့်ကို ချစ်တာ … သိသာပါတယ် … ကျွန်တော် သိတယ် … ဒီနေ့တွေ့ … ဒီနေ့ကြိုက် … ဒီနေ့အဖြေပေးရင် … တန်ဖိုးမထားမှာ စိုးလို့ထင်ပါရဲ့ … အချိန်ဆွဲထားတယ် … ဒါကြောင့်ပြောတာ … အချိန်က တန်ဖိုးရှိပါတယ်လို့ … မတတ်နိုင်ဘူးလေ … စောင့်ရမှာပေါ့ … ကိုယ်ကချစ်မိနေပြီဆိုတော့လဲ …
“မုန့်ဟင်းခါး ကြိုက်လား …”
“အင်း ကြိုက်တယ် … သီရီလောက်တော့ မကြိုက်ဘူး …”
“ခန့်နော် … ခဏခဏပြောနဲ့ … ဟိုဘက်ကိုမောင်း …”
ဆစ်ကနဲ … လက်မောင်းက … နာသွားသည် … ချစ်မျက်စောင်းက … ဒိုင်းကနဲ ရောက်လာသည် … ဟင်းနော် … ချစ်ချင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို … လာဆွပေးနေတယ် … မျက်စောင်းလေးထိုးကြည့်နေတဲ့ … သီရိကိုကြည့်ပြီး … ဖက်နမ်းပစ်လိုက်ချင်တယ် … ဟင်း … စိတ်ထိန်း … စိတ်ထိန်း …
သီရိပြောတဲ့အတိုင်း မောင်းပြီး တနေရာရောက်တော့ … မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်မှာ … ဝင်စားဖြစ်သည် …
“သီရိ ဘာစားမလဲ …”
“ခန့်ကော ဘာစားမလဲ …”
သီရိက … ကျွန်တော် ဘာစားမလဲ သိချင်သည် … ကျွန်တော်ကလည်း … သူဘာစားမလဲ သိချင်သည် …
“ညှပ်ခေါက်ဆွဲ … ဗူးသီးကြော် … ဟင်းရည်နည်းနည်း …”
“အတူတူပဲ … စားတော့မယ် …”
အရင်က သီရိဘာကြိုက်တတ်မှန်းမသိပေမယ့် … ကျွန်တော် မှာတာကို … သူလိုက်စားတာ … ကျွန်တော် ဝမ်းသာသည် … ကျွန်တော်နဲ့ တသားတည်းဖြစ်ဖို့ … ကျွန်တော့်အကြိုက်လိုက်စားသည် ဟု … ထင်သည် … ဟဲ … ဟဲ … ကိုယ့်အထင်နဲ့ကိုယ်တော့ ဟုတ်နေတာပဲဗျာ … မုန့်ဟင်းခါး ပုံစံတူ နှစ်ပွဲမှာလိုက်သည် … မုန့်ဟင်းခါး … ခပ်သွက်သွက် … စားပြီးတော့ … ကျောင်းဘက်ကို မောင်းတော့သည် … ကားပေါ်မှာ … တီတီတာတာနဲ့ … ပလီပလာ စကားများဆိုကြသည် … သီရိကို မထိတထိ စလိုက် … သူ ဆွဲ ဆိတ်လိုက် … ကြာရင်တော့ … ခက်ရချည်ရဲ့ … ဟင်းနော် … ဖက်နမ်းပစ်ချင်စိတ်ကို … အတင်းထိန်းထားရတယ် … သိပ်လှတယ် … သီရိရယ် …
အကွေ့တစ်ခုမှာ … ကျွန်တော် … အရှိန်နဲ့ ကွေ့နေတုန်း … ဗြုန်းဆို … ဟိုဘက်က … ၂၁၆ ကားကြီး … ပေါ်လာတော့ … ဆတ်ကနဲ … ဘေးကို ဆွဲချပစ်လိုက်သည် … တော်သေးသည် … ဘာမှ မဖြစ် … သီရိခန္ဓာကိုယ်လေးက … အိကနဲ … ကျွန်တော့်ဘက် ယိုင်ကျလာသည် … စကားပြောနေရင်း …ရုတ်တရက်ဆိုတော့ … တခုခုကို ဖမ်းကိုင်ဖို့ မမှီတော့ … ပြိုယိုင်လဲကုန်သည် …
“အရမ်းမောင်းတာပဲ … ခန့်ရယ် …”
“ဆောရီး … လန့်သွားလား …”
ကျွန်တော် ကားလေးကို … ရပ်လိုက်တယ် … လမ်းကလဲ ရှင်းတယ် … ဘေးဘက်မှာလည်း ကွင်းပြင်ကြီး … ဘယ်သူမှ မရှိတုန်း … သီရိကို ကြင်ကြင်နာနာလေး မေးလိုက်တယ် … သီရိရဲ့ ရွှေရင်နှစ်မွှာက … အထိတ်တလန့်ကြောင့် … တသိမ့်သိမ့်တုန်နေသည် … ဖားဖိုလို နိမ့်လိုက် မြင့်လိုက်နဲ့ …
“ဆက်မောင်းလေ … ခန့်ရဲ့ …”
“အရမ်းလန့်သွား တယ်မှတ်လား …”
သီရိက … ကျွန်တော့်ကို ရွှန်းရွှန်းစားစား ပြန်ကြည့်လို့ …
“မှန်းစမ်း … ရင်တွေ တုန်နေလား”
ကျွန်တော်လက်က … သူ့ရွှေရင်တွေကို … စမ်းဖို့ လက်မြှောက်ရုံပဲရှိသေးတယ် … သူ့ရင်နှစ်မွှာကို … လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကာထားရင်း … သီရိ … အတင်းငြင်းတော့သည် …
“အို … ခန့်နော် … လက်ကြီးက …”
“သီရိ … ကို လေ … သီရိလက်လေးကို … မနေ့ကလိုပဲ ကိုင်ထားချင်တယ် …”
“ဟွန့် … အဖြေမှ မပေးရသေးတာကိုကွယ် …”
“မရဘူး … ကို အရမ်းကိုင်ချင်တယ် … တမိနစ်လောက် ပေးကိုင်ပါနော် …”
ကျွန်တော့်ရဲ့ … ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒကို … သူနားလည်တယ် ထင်ပါရဲ့ … ချစ်ရည်ရွှမ်းတဲ့ အကြည့်နဲ့ … ၃ စက္ကန့်လောက် … စိုက်ကြည့်တယ် …
“ခန့်က … တို့ကို … တကယ်ချစ်တာလား”
“အင်း … ချစ်တယ် …”
“တို့ကို … တကယ်လက်ထပ်နိုင်ပါ့မလား”
“အခု လက်ထပ်ပြရမလား …”
“ဟုတ်လို့လား … တို့က အပျိုမဟုတ်ဘူးနော် … “
“ဟား ဟား … သီရိက အပျိုမဟုတ်လို့ … တခုလပ်ဖြစ်ဖြစ် … တလင်ကွာဖြစ်ဖြစ် … ကျွန်တော့်ကိုချစ်လို့ … သစ္စာရှိမယ်ဆို … ယူမယ်ဗျာ … ဒီအတွက် ဘယ်တော့မှ စိတ်ထဲမထားဘူး …”
“တယ်ဆိုတဲ့ စာပါလား …”
“စာဆိုမဟုတ်ဘူးဗျာ … တကယ်ချစ်တာ … သီရိက မယုံလို့လား …”
“အင်း … ယုံအောင် … ဒီလိုပြမယ်လေ …”
“အင်း … မှိတ်လိုက်ပြီ …”
မျက်စိမှိတ်ထားတဲ့ … သီရိ မျက်နှာလေးနဲ့ ကပ်အောင် တိုးသွားလိုက်သည် … ပန်းနုရောင် နှုတ်ခမ်းဖူးလေးကို … နမ်းချင်လိုက်တာဗျာ … တိုးတယ် … တလက်မချင်း တိုးကြည့်တယ် … ဆီးစေ့လောက်အကွာအဝေးမှာ … ကျွန်တော်ရပ်လိုက်တယ် … သီရိရယ် … အနားကပ်တာနဲ့ … ကျွန်တော့် တကိုယ်လုံး ကြက်သီး တဖြန်းဖြန်းထသွားသည် … ကျွန်တော့်ပုံစံက နမ်းသည်လည်း မဟုတ်သေး …
“ခန့် … ဘာတွေလုပ်နေတာလဲဟင် … ကြက်သီးတွေထလာပြီ … အို … ခန့်နော် … “
ဟုတ်ပဗျာ … သီရိ တကိုယ်လုံး … ကြက်သီးဘုလေးတွေ ထလာသည် … ကြက်သီးလေးထလာတော့ … သီရိ မနေနိုင် … မျက်စိလေးဖွင့်လိုက်တော့ … မျက်နှာချင်းက ကပ်တော့မတတ် … သီရိ မျက်နှာလေး လွှဲဖို့ ကြိုးစားလိုက်သည် … ရင်ထဲမှာ … ဟာကနဲ ဖြစ်သွားပေမယ့် … လွှတ်ပေးလိုက်ပါသည် … ကျွန်တော့်စိတ်ကို ကျွန်တော် နိုင်အောင် ထိန်းပြီး … ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် … ချစ်သူက ခွင့်ပြုချက်မရမချင်း … မထိမကိုင်ပါလို့ …
“ခန့်နော် … ဘာတွေ လျှောက်လုပ်မှန်းမသိဘူး … ရင်တွေ အရမ်းခုန်တာပဲကွာ …”
“ရင်တွေ အရမ်းခုန်တာ … အရမ်းချစ်လို့တဲ့ … ယုံပြီလား”
“ဟွန့် … တော်တော် တတ်တယ် … ဘာလို့ … တို့ကို … မနမ်းတာလဲဟင်”
“မယုံရင် … သီရိလည်း ပြန်စမ်းကြည့်လေ … တို့က ချစ်လား မချစ်လား … သိရအောင်”
“အပိုတွေ … ခစ် … ခစ် … ခန့်ကို … မယုံဘူး … စမ်းကြည့်မယ်”
ရီတော့ ရီရတယ် … သီရိက … ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပြော … ကျွန်တော်ကလည်း … သူပြောသလို ပြန်ပြော … ဟား ဟား … သီရိ … ကျွန်တော့်မျက်နှာနားကို ကပ်လာသည် … မျက်စိမှိတ်ထားပေမယ့် … ကျွန်တော် သိတယ် … ဟာဗျာ … ကြက်သီးတွေ ထလိုက်တာဗျာ …
သီရိနှုတ်ခမ်းလေး … ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းကို ကပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ … ကျွန်တော့်ရင်တွေ … ဗြောင်းဆန်သွားတယ်ဗျာ … ထိတော့မယ် … သိတယ် … ထိပြီ … ထိတယ် … နှုတ်ခမ်းနှစ်ခု … အိကနဲ ကပ်သွားတယ် … သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပြန်ကွာသွားတယ် … တကယ်ပါ … ငါးစက္ကန့် … ဆိုတဲ့ အချိန်လေးက … ကျွန်တော့် တသက်တာမှာ … အကျေနပ်ဆုံး အချိန်တခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ် … သီရိပေးတဲ့ … အနမ်းဦးကို … ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူးဗျာ … မမေ့ဘူး … ကျွန်တော်သေသွားရင်တောင် … မှတ်မိနေအုံးမှာ … ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အဖြေကို … သိပ်လှတဲ့ … သီရိက … ဒီလိုလေး ပြန်ပေးတော့ … ကျွန်တော့် ရင်တွေ တသိမ့်သိမ့်တုန်သွားသည် … အရမ်းကျေနပ်တယ်ဗျာ … ကျေနပ်တယ် … ချစ်တတ်လိုက်တာ … သီရိရယ် …
“သီရိနော် … ဘာတွေ လျှောက်လုပ်မှန်းမသိဘူး … ကို့ ရင်တွေ အရမ်းခုန်တာပဲကွာ …”
“ဟွန့် … တော်တော် တတ်တယ် … ဘာလို့ … ကို့ကို … နမ်းတာလဲဟင်”
“ဟင့်အင်း … နမ်းနဲ့ …”
“မရဘူး … နမ်းလိုက်ပြီ … ရွှတ် …”
“ဟာ … ခန့် … အို … အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ …”
ရွှတ်ကနဲ … သီရိပါးလေးကို နမ်းပစ်လိုက်တယ် … ချစ်တယ်ဗျာ … သိပ်ချစ်တယ် … ကျွန်တော် မမျိုသိပ်နိုင်တော့ဘူး … ကျွန်တော့်လက်မောင်းကိုလေ … ဆစ်ကနဲ ပူသွားအောင် … ဆွဲလိမ်ပစ်လိုက်တယ် … ဟဲ ဟဲ … နာတော့နာတာပေါ့ … ဒါပေမယ့် ကျေနပ်တယ်ဗျာ … အနမ်းဆိုတာမျိုးက … ဆားငန်ရေလိုပဲ … နမ်းပြီးတိုင်း … နမ်းချင်နေတာ … အချစ်ရဲ့ ဆွဲအားလို့ ပြောရမယ် ထင်ပါရဲ့ … ရှက်လွန်းလို့ … ရုန်းဖယ်နေတဲ့ … ချစ်သူလေးကို … အနမ်းမိုးတွေ ခြွေပစ်လိုက်တယ် … တခါ … နှစ်ခါ … သုံး လေးခါ …
“ဟိတ် … ခန့် … တော်ပြီနော် … ကားလမ်းဘေးမှာ … တော်တော်ကဲနေ …”
“ဟဲ … ဟဲ …”
“ချစ်တယ်နော် … သီရိ …”
“ချစ်တယ်ကွယ် … ကျောင်းရောက်ရင် … မကဲရဘူးနော် …”
“မကဲပါဘူး … သီရိရယ် …”
“ခန့်ကို … အရမ်းချစ်မိသွားလို့ … အဖြေပေးလိုက်တာနော် …”
“သိပါတယ်ဗျာ … သီရိ ချစ်တယ်ဆိုတာ …”
“သူများတွေ မသိစေချင်သေးဘူးကွယ် …”
“ကျောင်းမှာ … အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ရမယ်နော်…”
စည်းမျဉ်းတွေ အထပ်ထပ် ထုတ်ပြန်နေတဲ့ … ချစ်သူလေးပြောသမျှကို … ဟုတ်ကဲ့ … ဟုတ်ကဲ့ နဲ့ နာခံလိုက်ပါတယ် …
ကျောင်းထဲကို … တက်ကြွတဲ့အပြုံးများနဲ့ … မောင်းလာရင်း … ချစ်ဦးသူလေးကို … ခဏခဏ ကြည့်ရတာလည်း အမော … ကြည့်မဝဘူးဗျာ … ကန်တင်းဘက်ရောက်လာတော့ … နည်းနည်း … ကိုယ်ရှိန်သပ်လိုက်သည် … ယွန်းအိနဲ့ … အေးမြတ် ရောက်နေပြီ … ယွန်းအိ … ကျွန်တော်တို့ကို လက်ယပ် … လှမ်းခေါ်နေပါတယ် … ယွန်းအိကတော့ … တကယ့်ကလေးပဲ … ယွန်းအိနဲ့ … အေးမြတ်က … အတူတူထိုင်နေကြတယ် … ကျွန်တော်က သူတို့ ရှေ့မှာ ဝင်ထိုင်တယ် … သီရိက … ကျွန်တော့်ဘေးမှာ … ယွန်းအိလည်း … ဒီနေ့လှပါတယ် … ဂျပန်ကာတွန်းပုံ … အရုပ်မလေးပါတဲ့ … တီရှပ်ကို ဝတ်ထားတယ် … ယွန်းအိရဲ့ … ရင်နှစ်မွှာက … သိပ်မပေါ်တော့ဘူး … ဒါပေမယ့် … ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ် … အေးမြတ်ကလည်း … တီရှပ်နဲ့ … ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ … ဒီလိုဆိုတော့လည်း … ကိုရီးယားမင်းသမီးကျနေတာပဲ … သူလည်း လှတာပဲ …
“ကိုခန့် … မနေ့က … သီရိကို ဘယ်ခေါ်သွားတာလဲဟင် … မှန်မှန်ပြောနော် … ယွန်းအိသိတယ် …”
ကျွန်တော်နဲ့ … သီရိ … အတိုင်အဖောက် လွဲသွားပြီ … ကျွန်တော်က ငြင်းတယ် … သီရိက လျှောက်ပြောတယ် … ဟား ဟား … ယွန်းအိတို့က ရိပ်မိတာပေါ့ …
“မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး … အတိုင်အဖောက် မညီဘူးနော် …”
“အေးလေ … နဲနဲ ညှိပါအုံး … “
“အေးမြတ် … နင်မနေ့ကရတဲ့ … ဂြိုလ်တုသတင်းက ဘာလဲ … ပြောပြလိုက်စမ်း …”
“မြန်မာစံတော်ချိန် ၅ နာရီ ဝန်းကျင်တွင် … မဟာဗန္ဓုလနှင့် … လမ်း ၃၀ ထောင့်တွင် … အရမ်းချောမောလှပသော … မိန်းကလေးတဦးက … ယောက်ျားလေးတစ်ဦးကို … လက်ဆွဲပြေးခြင်း …”
ကျွန်တော်နဲ့ … သီရိ … တယောက်ကို တယောက် ကြည့်ပြီး … သေပြီ ဆရာ … ကျွန်တော့်မျက်နှာ ပျက်နေတာတော့ သေချာသည် … သီရိကတော့ အေးဆေး … ပုံမှန်ပါပဲ … ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ ရီနေတယ် …
“ရှင်းတယ်နော် … သတင်းအတိအကျ ရထားတယ် … ကဲ … သတင်းထောက်တွေကို … နှုတ်ပိတ်ခ … ဘာကျွေးမှာလဲ …”
သီရိက … “စားချင်တာစား” တဲ့ … ကျွန်တော်က ရှက်ရမ်းရမ်းပြီး … လျှောက်ပြောမှ ပိုဆိုးကုန်သည် …
“ယွန်းအိကလည်း … ငါ လမ်းမကူးတတ်လို့ပါကွ … သီရိက … သဘောရိုးနဲ့ … ကူညီတာပါ …”
“ဟယ် … အေးမြတ်… နင်ယုံလား …”
“ဟင့်အင်း ယုံဘူး …”
“ဂျီတီကျောင်းတက်နေတဲ့ လူက … လမ်းကူးတတ်ဘူးတဲ့ …”
“ဟား ဟား ဟား … တောသား …”
ယွန်းအိ … ကျွန်တော့်ကို တမုန်းကြပ်တော့သည် … ယွန်းအိ ဟားရင်လည်း … ခံရမှာပဲ … ကျွန်တော်က ကူးမှ မကူးရဲတာ …
“မှန်မှန်ပြောနော် … တောသား … တို့မြို့သူလှလှလေးကို … သနားအောင် ဉာဏ်ဆင်တာမှတ်လား “
“မဟုတ်ပါဘူး … ယွန်းအိကလည်း … ကျွန်တော် တကယ်မကူးရဲတာပါ … “
“ဟုတ်ပါပြီ … ဒါဆို … ဒီက မင်းသမီးကကော … ဘာဖြစ်လို့ … တောသားလက်ကို အတင်းဆွဲရတာလဲ …”
“ဟုတ်တယ် … ဟုတ်တယ် … ဖြေရှင်းချက်ပေးပါ …”
မြှားဦးက … သီရိဘက်လှည့်သွားသည် … သီရိကလည်း ငလောင် …
“အမှန်က … တို့က … လက်ဆွဲပြေးဖို့ … မရည်ရွယ်ပါဘူး … “
“ဟုတ်ကဲ့ရှင့် … ဆက်ပြောပါအုံး …”
“ကားလမ်းဘေးမှာလေ … တောသားတယောက် … ကြောက်ဒူးတုန်နေတာနဲ့ … သနားပြီး … လမ်းကူပြီး ကူးပေးတာပါ … လမ်းကူးတာလေ … မျက်နှာလေးက သနားစရာ … ဟိုအစေ့လောက်ပဲရှိတယ် …”
“ဟဲ့ … ဟဲ့ … ဘယ်အစေ့လဲ …”
“ခစ် … ခစ် … ခစ် …”
“မှန်မှန်ပြောနော် … ဒီနေ့မနက်ကားပေါ်မှာ … သီရိကို … ဘာလုပ်သေးလဲ …”
“ဟင့်အင်း … မလုပ်ပါဘူး … သီရိက လုပ်လိုက်တာ …”
“ဟယ် … ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ … ရင်တွေ တုန်လိုက်တာ … ခစ် ခစ် …”
“ပြောပြကွာ … သီရိကလည်း … “
“ဟင့်အင်း … သိချင်ရင် … တောသားကို မေးကြည့် … ခစ် ခစ် ခစ် …”
မီးများမီးနိုင် … ရေများရေနိုင် တဲ့ … သီရိတို့သုံးယောက် … ဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်း … သမျှ ခံပေတော့ … တောသားရေ … ကျွန်တော် ခေါင်းတောင် မဖော်နိုင်ဘူး … ရှက်လိုက်တာဗျာ … သိမယ် … ဟားတိုက်ရီနေတဲ့ သီရိ … အပြန်ကျမှ … အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ … အားရအောင် နမ်းပစ်လိုက်အုံးမယ် … အုပ်စုတောင့်တုန်းတော့ … ရီထားအုံး … ဟား ဟား ဟား …
ယွန်းအိက … မုန့်ဟင်းခါး … မှာစားသည် … အေးမြတ်က … ပဲပြုတ်ဆီဆမ်း … ကြက်ဥကြော်နဲ့ … ကျွန်တော်နဲ့ … သီရိက … ကော်ဖီ …
“အေးမြတ်ရယ် … မုန့်ဟင်းခါးက … ကောင်းလိုက်တာ … ယွန်းအိ … ဝတောင် မဝဘူး …”
“မဝရင် ထပ်မှာလေ … ဒီမှာ ဒကာမလေးက … တောင့်ပါတယ် …”
“ဟဲ့ … ဘာတောင့်တာလဲ …”
“ဟီး ဟီး … စပွန်စာတောင့်တယ် … ပြောတာပါ … ခစ်ခစ် … ဟုတ်တယ်နော် … ကိုခန့် …”
“ဘာအင်းလဲ … တောသားနော် … ရိုးမလိုနဲ့ … တော်တော် လက်သွက်တယ် …”
မရတော့ … မရတော့ … ကျွန်တော် … အလူးအလဲကို ခံနေရသည် … ဘာမှလည်း ပြန်မပြောနိုင် … ကြာရင် … မျက်နှာပူလွန်းလို့ … အရည်ပျော်သွားနိုင်သည် … ဘေးက … ကောင်လေးတွေက … ၀ိုင်းကြည့်နေသည် … အားကျသည့် … ပုံစံမျိုး … ဟား ဟား … ကုသိုလ်ကံက … ကောင်းလွန်းသလိုလိုနဲ့ … မျက်နှာတော့ တော်တော်ပူတယ်ဗျာ … နာရီဝက်လောက် ကြာတဲ့ … ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အပျော်လေးက … လူတယောက်ကြောင့် ပျက်စီးသွားပါတယ် … ကြက်သရေတုံးလိုက်တာဗျာ …
ဘေးဝိုင်းက … ကောင်တကောင်က … ဘာမပြောညာမပြော … သီရိဘေးနားမှာ လာထိုင်သည် … ကွိုင်ပဲ … ဘာလဲဟ … ငတိပုံစံက … လူမင်းလိုလို … မင်းဦးလိုလို ပုံစံမျိုး … ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း … ဗလတောင့်တောင့် … ငတိက … ကျွန်တော်တို့ကို ဂရုလုံးဝမစိုက်ဘူးဗျ … သီရိကို ကြည့်ပြီး …
“ကျွန်တော်က … mechnical က သန့်ဇော်ပါ …”
“ကိုယ်က … ခင်ချင်လို့ပါ … ရတယ်မှတ်လား”
“ကိုယ်လေ … မင်းကို စတွေ့တော့ … လောကကြီးက ရပ်သွားသလိုပဲ …”
“ဪ … ဟုတ်လား”
ယွန်းအိတို့က ပြုံးစိစိနဲ့ … ကြည့်နေတုန်း … အခြေအနေကတော့ … မမိုက်ဘူးဗျာ … ဘာလဲဗျ … ကျွန်တော့်ရင်ထဲ တဖြေးဖြေးနဲ့ … တင်းလာတယ်ဗျာ … ဘယ့်နှယ့် … ကိုယ်ချစ်တဲ့ ကောင်မလေးကို ကိုယ့်ရှေ့မှာ … လာကြောင်နေတာ … ဘယ်လို သည်းငြီးခံရမှာလဲ … သီရိကတော့ … ပြုံးပြုံးနဲ့ နားထောင်နေတယ် … သဘောမကျဘူးဗျာ … ထထိုး ပစ်လိုက်ချင်တယ် … ကျွန်တော် ဒေါပွနေတာ့ ဝင်ပြောပစ်လိုက်တယ် …
“အဲဒီတော့ … မင်းက ဘာဖြစ်ချင်လဲ …”
“မင်းနဲ့ မပတ်သတ်ရင် ဝင်မပြောပါနဲ့လား …”
“ဘာကွ … တောက်”
ကျွန်တော့်လက်ကလေ … အအေးပုလင်းကို … တင်းတင်းဆုပ်ထားနေပြီ … သီရိရဲ့ စကားတခွန်းသာ ဝင်မပြောရင် … ရိုက်ထည့်ပစ်လိုက်ပြီ …
“ရီးစား စကားဆိုရင်တော့ … ကန်တော့ဆွမ်းပါရှင့် … သီရိမှာ ချစ်သူရှိပါတယ် … ဆောရီးနော် … ဆက်ဧည့်မခံနိုင်တော့တဲ့အတွက် … ဝမ်းနည်းပါတယ် …”
“ရီးစားရှိတာ … မယုံဘူးဗျာ … သီရိရယ် … ကိုယ်က … တကယ်ချစ်တာပါ … ကိုယ့်ကို စဉ်းစားပေးပါလားဗျာ … နော်”
ဖြတ်ကနဲ ကျွန်တော် … သီရိကိုကြည့်လိုက်တော့ … သူ့အကြည့်က … လက်မပါဖို့တားနေတယ် … ကျွန်တော် သည်းငြီးခံလိုက်ပါတယ် … သီရိပြောပုံကို ကြိုက်တယ်ဗျာ … အပြတ်ပဲ … ရီးစားရှိတယ် … ဒိုးတော့ … စကားဆက်မပြောချင်ဘူးလို့ …
“သီရိ ပြောပြီးပြီပဲ … သီရိမှာ ချစ်သူရှိတယ်လို့ … နားလည်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် …”
“ချစ်သူရှိတာ … ယောက်ျားရှိတာမှ မဟုတ်ပဲဗျာ … လူပျိုအပျိုချင်း … ချစ်ခွင့်ရှိပါတယ် … ဟုတ်တယ်ဟုတ် …”
သန့်ဇော် ပြောတဲ့ပုံစံက … ရင့်တယ်ထင်တာပဲဗျာ … စည်းမရှိ … ကမ်းမရှိ … တောက် … ဟာကွာ … ထရိုက်ပစ်လိုက်ရင်တော့ … ရန်တွေ ဖြစ်ကုန်တော့မယ် …
“မင်းကဘာကောင်လဲ … မဆိုင်ရင် … ငြိမ်ငြိမ်နေ … ဟုတ်ပြီလား … “
“ငြိမ်ငြိမ်မနေတော့ … ဘာဖြစ်လဲကွာ … ငါက သီရိရဲ့ …”
ကျွန်တော့်ပါးစပ်က ပြောခါနီးဆဲဆဲမှ … ချစ်ဦးသူလေး … သီရိရဲ့ တားမြစ်ချက်တွေကို … သတိရလိုက်သည် … ကျွန်တော်နဲ့ … သီရိ … ချစ်နေကြတာ … ဘယ်သူမှမပြောရ …
“မင်းဘာသာ ဘာဖြစ်ဖြစ် … ငါကတော့ ချစ်ခွင့်ရှိတယ် … ရီးစားစကားပြောခွင့်ရှိတယ် … ဟုတ်ပြီလား”
ကျွန်တော့်အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်နေတယ် … ဒေါသကြောင့် … ဒင်းကို အမှုန့်ကြိတ်ပစ်ချင်စိတ်တွေ … တဖွားဖွား ပေါ်လာသည် …
“ချချင်လို့လား … လာလေ … ကောက်ရိုးပုံစောင့်တဲ့ ခွေးလိုတော့ … လာမဟောင်နဲ့”
ကျွန်တော် တော်တော် ဒေါသထွက်သွားသည် … တော်ရုံဆို ကျွန်တော် သည်းငြီးခံနိုင်ပါတယ် … ကျောင်းသားက … ကျောင်းသူကို ကြိုက်လို့ ရီးစားစကားပြောတယ် … ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောပေါ့ဗျာ … ဘေးက လူတွေကိုပါ … လာဆဲတော့ … ဝုန်းကနဲ ကျွန်တော် ထပြီး … အအေးပုလင်းနဲ့ ကောက်ရိုက်ပစ်လိုက်သည် …
“မလုပ်နဲ့ … ခန့်”
ကြားထဲက … သီရိ တားမြစ်သံလေးကို … ကျွန်တော် မနာခံတော့ … လူကို ခွေးနဲ့ နှိုင်းတဲ့ကောင် …
“ငါ့ကို ခွေးနဲ့ လာမနှိုင်းနဲ့ … ကဲကွာ …”
ဒီခွေးမသားကလည်း … ကျွန်တော့်ထက်ပိုလျင်သည် … ကျွန်တော် ပုလင်းနဲ့ … ရိုက်မယ်ဆိုတာ … သိများသိနေလားမသိပါဘူး … ဆတ်ကနဲ … ရေနွေးခွက်နဲ့ … ကောက်ပက်ပစ်လိုက်သည် … အရမ်းနီးလွန်းတော့ … ဘယ်လိုမှရှောင်မရ … အေးမြတ် … ခွေးမသားကို … ဆောင့်တွန်းပစ်လိုက်တာတော့ သိလိုက်သည် …
ပူလိုက်တာဗျာ … ရေနွေးပူပူတွေက … ကျွန်တော့် မျက်လုံးထဲကို တန်းတန်းမတ်မတ် ဝင်ချလာသည် … မရတော့ဘူး … ကျွန်တော် မျက်စိဖွင့်မရတော့ … တော်ရုံရေနွေးဆို ဒီလောက်ဖြစ်မှာမဟုတ် … မနက်စောစော … ကြွက်ကြွက်ဆူအောင်တည်ထားတဲ့ … ရေနွေးဆိုတော့ … အရမ်းပူသည် … ပြဿနာပဲဗျာ … ကျွန်တော့်မျက်စိ ဖွင့်မရတော့ဘူး … ပူလိုက်တာဗျာ … ကန်တင်းက ကျောင်းသားတွေ အားလုံး … ကြောင်သွားသည် … ရန်ဖြစ်မည်ဟု မထင်ကြ … ဖြစ်လျှင်လည်း … ဒီလိုမျိုး … မျက်နှာကို ရေနွေးနဲ့ အပက်ခံရမယ်လို့ မထင် … သွားပြီဗျာ … သွားပြီ … ကျွန်တော့် မျက်စိကန်းသွားပြီ … သီရိတို့ … တွေ ကက်ကန်လန် ရန်တွေ့ကြတာလည်း … ကျွန်တော် မသိတော့ … မျက်စိကို လက်ဝါးနဲ့ အုပ်ပြီး … ခွေးမသား ရှိမယ့် ဘက်ကိုမှန်းပြီး … စိတ်ရှိလက်ရှိ … အော်ပစ်လိုက်တယ် …
“ခွေးမသား … @^#Q#@&$($()@#”
မျက်စိထဲမှာ … တဆစ်ဆစ်နဲ့ … ပူလောင်နေတဲ့ … ဒဏ်ရာက … ခံရခက်လိုက်တာဗျာ … အရမ်းခံရခက်တာက … ကျွန်တော် ဘာမှ မမြင်ရတော့ဘူးဗျာ … ဘာမှ မမြင်ရတော့ဘူး … လုပ်ကြပါအုံးဗျာ … ကျွန်တော် ဘာမှ မမြင်ရတော့ဘူးဗျာ … သီရိတို့ … ဆေးရုံကို အမြန်ခေါ်သွားပေမယ့် … အခြေအနေက ထူးမလာပါဘူးဗျာ … ဆေးတွေထည့်ပေးလို့ … စပ်ဖျင်းဖျင်း ဒဏ်ရာတွေ ပျောက်သွားပေမယ့် … ကျွန်တော်သိပါတယ် … ကျွန်တော့် မျက်စိကန်းသွားပြီဗျာ … ဟီး … ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး … သီရိလေ … ကျွန်တော့်ကို အတင်းဖက်ထားပြီး … နှစ်သိမ့်ရှာပါတယ် … ဒါပေမယ့်ဗျာ … ဒါပေမယ့် … ဝမ်းနည်းပြီး … အားငယ်တဲ့ စိတ်က … အလုံးအရင်း ဝင်လာတော့ … ကျွန်တော် ငိုချပစ်လိုက်တယ် … ဟီး …
အိစက်နေတဲ့ … သီရိရင်ခွင်လေးကလည်း … ကျွန်တော့် အပူကို … မအေးစေပါဘူး … ၀ိုင်းပြီး အားပေးကြတဲ့ စကားသံတွေကိုလည်း … ကျွန်တော် မကြားချင်တော့ဘူး … ကျွန်တော်ဗျာ … လူဖြစ်ရှုံးပြီဗျ … တသက်လုံး အကန်းဖြစ်သွားပြီ … ဝမ်းနည်းလွန်းလို့ … ရှိုက်ကြီးတင် … ရှိုက်ငိုရင်း … သီရိအင်္ကျီတွေ … ကျွန်တော့်မျက်ရည်ကြောင့် … ရွှဲရွှဲစိုကုန်ပါတယ် … ဒါပေမယ့် … သီရိလေ … ကျွန်တော့်ကို မလွှတ်ဘူး … အရမ်းဖက်ထားတယ် … ကျွန်တော် အရမ်းဝမ်းနည်းတယ်ဗျာ … ဝမ်းနည်းတယ် … ဒီတသက် … ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ … သီရိကို … တွေ့ခွင့်မရနိုင်တော့ဘူး … သီရိပေးတဲ့ … လတ်ဆတ်တဲ့အနမ်းတွေက … နေ့တောင် မကူးဘူးဗျာ … ပြုံးပျော်နေတဲ့ … ချစ်ဦးသူမျက်နှာလေးကို … ထပ်တွေ့ခွင့် … ဟာဗျာ … ကျွန်တော့်ရဲ့ … ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ … အရည်ပျော်သွားပြီး … ဝမ်းနည်းခြင်းသာ … ကျွန်တော့်စိတ်ကို … တချိန်လုံး … ဖုံးလွှမ်းသွားပါတယ် …
“ခန့် … မငိုနဲ့နော် … ခန့် … ဘာဖြစ်ချင်လဲ … ဘာစားချင်လဲ … တို့ လုပ်ပေးမယ်နော်”
“ကျွန်တော် … ကြောက်တယ် … အရမ်းကြောက်တယ် … ကျွန်တော့်မျက်စိ မမြင်ရတော့ဘူး … ဟီး …”
“ခန့်ရယ် … သိပ်မကြာခင် ပြန်ကောင်းသွားမှာပါ … နော် … မငိုရဘူးနော် … တိတ် … တိတ်”
သီရိရဲ့ … နှစ်သိမ့်စကားက … ကျွန်တော်သာ ကလေးဆို ယုံလိုက်ပါ့မယ် … ဒါပေမယ့် … ကိုယ့်အနာကို ကိုယ်က ပိုသိတယ် … ကျွန်တော့် မျက်စိလေ … ကျွန်တော့်မျက်စိ … ကန်းသွားပြီဗျ … ဟီး …
“မကန်းပါဘူး … ခန့်ရယ် … မကန်းပါဘူး … ပြန်မြင်ရမှာပါ …”
“ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း … မမြင်ရဘူး … မမြင်ရတော့ဘူး …”
“ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမို့ပါ … ခန့်ရယ် … စိတ်ကိုလျှော့နော် … ဘာမှမကြောက်နဲ့ … အနားမှာ တို့ရှိတယ် … ဟုတ်ပြီလား …”
“အင်းပါ … အင်းပါ … ခဏအိပ်လိုက်နော် … ခန့် … အရမ်း မောနေပြီ … အိပ်လိုက်နော် … ဆရာဝန်ကပြောတယ် … မျက်စိအနာသက်သာအောင် … မငိုရဘူးတဲ့ …”
“အင်းပါ … ခန့်နားမှာ တချိန်လုံး ရှိနေမယ် … ဟုတ်ပြီ … ခဏအိပ်လိုက် …”
အရမ်းငိုထားလို့ … ကျွန်တော့်မှာလည်း အားအင်တွေလည်း မရှိတော့ဘူး … အမှောင်ရယ် … အလင်းရယ် … ဒါပဲတွေ့နေရတော့ … ကျွန်တော်လေ … စိတ်တွေ … တော်တော်ကျသွားတယ် … ဘာမှလည်း … မသိချင်တော့ဘူး … ဘာမှလည်း မကြားချင်တော့ဘူး … ပြောသမျှ အားပေးစကားတွေလည်း နားမထောင်ချင်တော့ဘူး … ဆရာဝန်က ဆေးတလုံးလာထိုးပေးပါတယ် … သိပ်မကြာဘူး … ကျွန်တော် အိပ်ပျော်သွားတယ် … အိမ်မက်ထဲမှာ … ဖေဖေရယ် … မေမေရယ် … ကျွန်တော့်ကို … လာကြည့်တယ် … ကြင်နာစွာနဲ့ … မေမေက ကျွန်တော့် ဆံပင်လေးတွေကို သပ်ပေးတယ် … ဖေဖေက ကျွန်တော့်လက်ကို ကိုင်ပြီး အားပေးတယ် … မေမေ့ကိုလေ … ကျွန်တော် အရမ်း ဝမ်းနည်းတဲ့အကြောင်း ပြောပြတယ် … မေ့မေ့ကို ဖက်ပြီး … ငိုတယ် … ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုတယ် … ဟီး … နောက်တော့ … သီရိရောက်လာတယ် … သိပ်လှတဲ့ သီရိ … ကျွန်တော့်ကို ဖက်ထားပြီး … သူလည်း အရမ်းငိုတယ် … သီရိကို … အတင်းဖက်ထားပေမယ့် … သီရိက … မီးခိုးလိုပဲ … တဖြေးဖြေး ပျောက်ကွယ်သွားတယ် … ကျွန်တော့်အိမ်မက်ထဲမှာ … တွေးမိတာက … သီရိက သိပ်လှတယ် … ကျွန်တော်သာ ဒီလိုမဖြစ်ခဲ့ရင် … သီရိနဲ့ ချစ်ခွင့်ရမယ့် အနာဂတ်တွေကို … ကျွန်တော် မြင်နေရတယ် … ဒါပေမယ့်ဗျာ … ကျွန်တော်က ကန်းသွားပြီဗျ … တက်ကန်းသွားပြီ … အိမ်မက်ဖြစ်ပါစေလို့ … ဆုတောင်းနေပါတယ် … ဒါပေမယ့်ဗျာ … တကယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ … အဖြစ်အပျက်မို့ … ကျွန်တော် အရမ်းဝမ်းနည်းမိပါတယ် … ကျွန်တော်လေ … ဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့ အသက်မရှင်ချင်ဘူး … မနိုးသော အိပ်စက်ခြင်းမျိုးနဲ့ … ဘဝကို အဆုံးသတ်လိုက်ချင်ပါတယ် …
ကျွန်တော် တရေးနိုးလာတဲ့အချိန်မှာ … ကျွန်တော့် ခြေဖျားလက်ဖျားတွေ အေးနေတယ် … မှောင်မည်းနေတဲ့ … ပတ်ဝန်းကျင်က … အေးစက်စက် … ကျွန်တော် ဘယ်ကမ္ဘာများရောက်နေတာလဲဗျာ … ကျွန်တော် သေသွားပြီလား … ဟင့်အင်း … မဖြစ်နိုင်ဘူး … ကျွန်တော် ကန်းနေတယ် … ဘာမှမမြင်ရဘူး … ဟင်း … ကျွန်တော့်မှာ … အာရုံစိုက်စရာ … နားနဲ့ နှာခေါင်းပဲ ရှိတယ် … အသံတွေက တိတ်ဆိတ်နေတယ် … ကျွန်တော် ဘယ်ရောက်နေတာလဲ … သီရိ … ယွန်းအိ … အေးမြတ် … ဘယ်မှာလဲဗျာ … ဘကြီးခန့် … သူရော … ကျွန်တော် နေမကောင်းဖြစ်တာ သိရဲ့လား … ကျွန်တော့်ကို စိတ်ဆိုးနေမလား … ရန်ဖြစ်လို့လေ … သူ့တူက အကန်းဖြစ်သွားတော့ … ခေါ်ချင်ပါ့အုံးမလား … ဒိတ်ကနဲ စိုးထိတ်သွားတာက … သီရိ … ကျွန်တော့်ကို … ဘယ်ချစ်တော့မလဲနော် … ဒီလိုအကန်းတယောက်ကို … သိပ်လှတဲ့ သီရိက ဆက်ချစ်ပါ့မလား … ချစ်နိုင်သည်ပဲထားပါအုံး … သူ့အမေက … ဘဘောတူမှာမဟုတ် … အတွေးတွေကြောင့် … ရင်ထဲမှာ ပိုလို့ ပူလောင်လာသည် … ဝမ်းနည်းစိတ်က … ကျွန်တော်ရင်တွေကို … ပူလောင်စေသည် … အနားမှာက … ဘယ်သူမှမရှိ … ကျွန်တော်က … ဆေးရုံမှာလား … ဟုတ်သေးဘူး … ဆေးရုံမှာဆို … အသံဗလံတွေ ကြားနေရမယ် … ညဘက်ဆိုရင်တောင်မှ … ချောင်းဆိုးသံတွေကြားနေရမယ် … အထူးခန်းလိုမျိုးထဲမှာလား … ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်သည် … မွေ့ယာကို နမ်းကြည့်သည် … မဟုတ် … ဘာဆေးနံ့မှမရ … သေချာလျှော်ဖွပ်ထားတဲ့ … ဆပ်ပြာနံ့လေးရသည် … ဟင်း … နှာခေါင်းက အာရုံခံတာလည်း … ဘာမှမရှိ …
နားလေးကို စွံ့ကြည့်တော့ … ပထမ ဘာမှမကြားရ … နောက်မှ … ညာဘက်နားမှာ … အသက်ရှူသံတိုးတိုးလေး … ကြားမိသည် … သီရိလား … မဟုတ်ဘူး … ရှန်ပူအနံ့သင်းသင်းလေးက … သီရိ အနံ့မဟုတ် … ချစ်ဦးသူရဲ့ အနံ့မျိုးမဟုတ် … ကျွန်တော်သိသည် … ဒီအနံ့က … မိန်းကလေးအနံ့ … သူဘယ်သူလဲ … လက်ကလေးနဲ့ လျှောက်စမ်းကြည့်တယ် … အိကနဲ လုံးလုံးလေးကို … ထိမိတယ် … ဟိုက် … ငါတော့ မှားကိုင်ပြီနဲ့တူတယ် … ဒါက …ဒါက … မိန်းကလေး တယောက်ရဲ့ … ရင်သားလား … ဟုတ်သေးဘူးနဲ့တူတယ် … မိန်းကလေးတယောက်က … ဒီအတိုင်းချွတ်ထားမယ် … မထင် … ဒါဆို … ငါကိုင်မိတာ ဘာလဲ … စဉ်းစားကြည့်သည် … မပြောတတ်ဘူးဗျာ … ဟင်း … သက်ပြင်းကို ခပ်ပြင်းပြင်းချလိုက်သည် …
သိချင်တာ သိခွင့်မရလေ … ပိုသိချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့် … ခုနက … အသားအိအိလေးကို … ပြန်ကိုင်ကြည့်သည် … အိကနဲ အထိအတွေ့က … ဖြန်းကနဲ ကြက်သီးထစေသည် … ကျွန်တော့်လက်မောင်း တလျှောက် … ကြက်သီးဘုလေးတွေ အတန်းလိုက်ပေါ်လာသည် … ဟာကွာ … ဘယ်သူလဲ …
“ဘယ်သူလဲဟင် … သီရိလား”
ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး … အုပ်ကိုင်ပြီး … လှုပ်နှိုးလိုက်သည် … အသားလေးက … အိအိလေး …
“ကိုခန့် … နိုးလာပြီလား …”
“အင်း … အေးမြတ်လား …”
“ဟုတ် … ရေသောက်မလားဟင် … “
“ဟင့်အင်း … ကျွန်တော် … ဘယ်ရောက်နေတာလဲဟင် …”
“ကိုခန့်တို့ … အိမ်မှာ …”
“ကိုခန့် အိပ်ပျော်တာ … တရက်လောက် ရှိပြီ …”
“အင်း … မနေ့က ဆေးရုံမှာ … ဆေးထိုးလိုက်တာ မှတ်မိလား …”
“မှတ်မိတယ် … ကျွန်တော့်မျက်စိ … ပြန်ကောင်းပါ့မလားဟင် … အမှန်အတိုင်း ပြောပြပါနော် …”
“ပြန်ကောင်းမှာပါ … ကိုခန့်ရယ် …”
အေးမြတ်အသံက သိပ်အားမရ … ကျွန်တော် သိပါတယ် … သွားပြီဆိုတာ …
“ပြန်သွားကြပြီ … မြတ်က ညအိပ်စောင့်ပေးနေတာ …”
“ဟုတ်လား … “
“ကိုခန့်အိမ်ကို ပြန်ခေါ်လာတော့ … ကိုခန့်က အိပ်ပျော်နေတယ် … အိပ်ဆေးအရှိန် မပြယ်သေးလို့နဲ့တူတယ် …”
“ဟုတ်လား … ကျွန်တော့်အိမ်ကို ဘယ်လိုသိတာလဲဟင် …”
“ကျောင်းသားရေးရာမှာ … မြတ် သွားမေးထားတာ …”
“တယ်တော်ပါလား … မြတ်က ဉာဏ်အရမ်းကောင်းတယ်နော်”
“အင်း … ဒီလောက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး … ကိုခန့်က တယောက်ထဲနေတာလား …”
“ဟင့်အင်း … ဘကြီးခန့်နဲ့ အတူနေတာ … မေမေတို့က … ဆုံးသွားပြီ …”
မေမေတို့ … ဆုံးသွားပြီ ဆိုတဲ့စကားကို … ကျွန်တော် မပြောချင်ပါဘူး … ဝမ်းနည်းစိတ်တွေ တဖန်ပြန်ပေါ်လာမှာစိုးလို့ … အေးမြတ် စကားပြောင်းလိုက်သည် …
“ဟုတ်တယ်လေ … ဘကြီးခန့်ကို မတွေ့ဘူးလား”
“ဟင့်အင်း … တွေ့ဘူး … မြတ်တို့က … ကိုခန့် တယောက်ထဲနေတယ်ထင်တာ …”
တခြားဟာတွေ လျှောက်မေးသည် … ဟိုကောင်ကို … ကျောင်းက ဆရာတွေ လိုက်ရှာနေတဲ့အကြောင်း … သီရိ အရမ်းငိုတဲ့အကြောင်း … ယွန်းအိလည်း … ငိုတဲ့အကြောင်း … သီရိကို … သူ့အမေက … ဒီအိမ်မှာလာခေါ်တဲ့အကြောင်း … နားထောင်နေရင်း … အေးမြတ်အသံက … သီရိအမေကို သိပ်မကျေနပ်တဲ့ လေသံမျိုး ဖြစ်နေသည် … ကျွန်တော် စိတ်ပိုညစ်သွားမှာစိုးလို့ … တခုခု ဖုံးကွယ်ပြီး ပြောနေတဲ့အသံ … မျက်နှာကို … မမြင်ရတော့ … အသံတုန်နေတာ … စကားလွှဲတာ … ကို ခန့်မှန်းကြည့်တာပါ … အင်း … ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ … သီရိအမေက … ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တွေ … မကြိုက်ဘူး ထင်ပါရဲ့ … သူ့သမီးအချောအလှကို … ပြန်ခေါ်သွားမှာပေါ့ … ကျွန်တော် မဲ့ပြုံးပြုံးလေး … ပြုံးလိုက်မိပါတယ် … ရင်ထဲမှာတော့ ဆစ်ကနဲ နာကျင်သွားသည် …
“ဘယ်နှစ်နာရီ ရှိပြီလဲဟင် …”
“မနက် ၂ နာရီ … “
“အေးမြတ်က … ဘယ်မှာနေတာလဲဟင် …”
“မြတ်က .. အမဝမ်းကွဲနဲ့ … နေတာ …”
“အင်း … တောင်တွင်းကြီးဘက်က …”
“မြတ် အခုဘယ်လိုအိပ်တာလဲဟင် …”
“ထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင် … ခုတင်ပေါ်မှာ မှောက်အိပ် …”
“အယ် … “
“မအယ်နဲ့လေ … ခစ် ခစ် … မြတ် အိပ်တတ်ပါတယ် … ကိုခန့် ဗိုက်ဆာနေပြီလား …”
“အင်း … နည်းနည်းဆာတယ် …”
“များများဆာတယ်လုပ်ပါ … တနေ့လုံးအိပ်နေတာ … ဗိုက်ဆာရောပေါ့ … ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားမလား …”
“အင်း စားမယ် …”
“ခဏစောင့်နော် … သွားပြုတ်လိုက်အုံးမယ် …”
“ဒီလိုဆို … အေးမြတ် … ပင်ပန်းပါတယ် … ကော်ဖီနဲ့ မုန့်နဲ့ပဲ စားတော့မယ် … အားနာစရာကြီး …”
“ဟိတ် … အားနာမနေနဲ့ … သူငယ်ချင်းဆိုတာ … တယောက် ဒုက္ခရောက်ရင် … တယောက်က စောင့်ရှောက်ရမယ့် တာဝန်ရှိတယ် …”
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … အေးမြတ်ရယ် …”
“ကျေးဇူးတကယ်တင်ရင် … မြတ်လို့ခေါ် … အေးမြတ်ဆိုတဲ့ နာမည်ကို မကြိုက်ဘူး …”
“ဟုတ်လား … ဆောရီး … မြတ်လို့ပဲ ခေါ်မယ်နော် …”
“အိုကေ … ကိုခန့် … ကော်ဖီမသောက်နဲ့နော် … အိပ်မပျော်ပဲနေလိမ့်မယ် … အိုဗာတင်း ရှိလား …”
“ပြောတတ်ဘူး … ကြောင်အိမ်ထဲမှာ ရှာကြည့်လိုက်နော် …”
“အင်း … ခဏစောင့် …”
ကျွန်တော် ဒုက္ခရောက်တုန်း … ကူညီပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းရယ် … တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … မြတ်သာ … ညအိပ်မစောင့်ပေးရင် … ကျွန်တော် နိုးလာတုန်း … ဘယ်ရောက်နေလို့ရောက်မှန်းသိမှာမဟုတ်ဘူး … မျက်စိအလင်း မရတော့တဲ့ အဖြစ်က … တော်တော်ဆိုးပါတယ် … ဘာမှမမြင်ရတော့ … အကုန်လုံး စမ်းတဝါးဝါး … တော်တော် စိတ်ဒုက္ခရောက်သည် … ကျွန်တော် ဘဝကို ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဗျာ … တယောက်ယောက် အနားမှာမရှိရင် … မဖြစ်နိုင်ဘူးနဲ့တူတယ် … ဒုက္ခပါပဲ … အတွေးတွေ ရှုပ်ရှက်ခတ်လာတော့ … ဇောချွေးကပြန်လာသည် … လူက ငိုချင်လာသည် … ငိုချတော့မလို ဖြစ်တုန်း … မြတ် အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာသည် …
“ဟေး … ယောက်ျားဆိုတာ မငိုရဘူးလေ … စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ထားရမယ်နော် … ကိုခန့်နော် … ငိုနဲ့ …”
“မြတ် … ကျွန်တော်လေ … ကျွန်တော် မမြင်ရတော့ဘူး … ကန်းနေပြီဗျ …”
“ရော် … ခက်တော့တာပဲ … ချက်ချင်းတော့ ဘယ်ပြန်မြင်ရအုံးမလဲ … အနာကျက်တဲ့အချိန်တော့ စောင့်ရမှာပေါ့ … တောင်တွေးမြောက်တွေး လျှောက်မတွေးနဲ့ … ဒီအချိန်မှာ … အရေးကြီးတာ … မျက်စိအနာ မြန်မြန်ကျက်ဖို့ပဲ … ကိုခန့်ငိုရင် … အနာတွေ မကျက်ပဲနေလိမ့်မယ် … အို … ချွေးတွေလည်း … စိုရွှဲနေပါလား …”
“အင်း … အရမ်းအိုက်တယ် …”
“ဟုတ်ပါရဲ့ … ခေါက်ဆွဲပြုတ်လေး … စားလိုက်အုံးနော် … ပြီးမှ အဝတ်လဲပေးမယ် …”
ခေါက်ဆွဲပြုတ်အနံ့လေးက … နှာခေါင်းထဲကို … ဝင်လာသည် … စားချင်လိုက်တာ … ဗိုက်ကတော်တော်ဆာလာသည် … ဗိုက်ကလည်း … တော်တော် အလိုက်မသိ … ဂွီ ကနဲ ထမြည်သည် … မြတ် … တခစ်ခစ်ရီတယ် …
“အရမ်းပူသေးတယ် … ကိုခန့်ရဲ့ … ခဏလေးနော် … မြတ်ခွံ့ကျွေးမယ် … ပါးစပ်ဟ …”
အားနာလိုက်တာ မြတ်ရယ် … ကျွန်တော့်ကို ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ဂရုတစိုက်ကျွေးတာ … ဒီတသက် ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဗျာ … ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က … မေမေကျွန်တော့်ကို … ထမင်းခွံ့ကျွေးတာကို … သတိရမိပါတယ် … အဲဒီလိုပဲ … သားရေ … ထမင်းစားမယ် … ပါးစပ်ဟ ဆိုပြီးကျွေးတာ … ကျွန်တော် ထမင်းစားလို့ … ပါးစပ်မှာ ပေရေနေရင်လည်း … မေမေက … လက်သုတ်ပုဝါလေးနဲ့ သုတ်ပေးပါတယ် … အခုလည်းကြည့် … ကျွန်တော်စားတာ … ပါးစပ်မှာ ပေသွားတော့ … မြတ် … တစ်ရှူးလေးနဲ့ သုတ်ပေးတယ် … ကြင်နာတတ်လိုက်တာ … မြတ်ရယ် … ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ကျွန်တော့်ဘဝ အမှောင်ကျနေတုန်း … အမေတယောက် အစားပြန်ရသလို ခံစားမိပါတယ် …
“အင်း … အရမ်းကောင်းတယ် … မြတ်က … လုပ်တတ်တယ်နော် …”
“အဟဲ … သိပ်မချီးကျူးနဲ့အုံး … မြတ်တို့ ညီအမက … ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပဲ နေ့တိုင်းစားတာ …”
“ဗိုက်မဝသေးဘူးမှတ်လား … ရော့ ဒီမှာ ထပ်စားအုံး …”
“မြတ်ရော … မစားဘူးလား …”
“ရပါတယ် … ထပ်ပြုတ်လိုက်မယ်လေ … “
“ဟင့်အင်း … ဒီဟာကိုစား … ကျွန်တော် ခွံ့ကျွေးမယ် …”
“ဟား ဟား … တကယ် … ကိုခန့်က … ကျွေးတတ်လို့လား …”
“အံမယ် … ကျွေးတတ်တာပေါ့ … ပန်းကန်ပေး … ပါးစပ်ဟထားနော် …”
ကျွန်တော့်လက်ထဲက … ခေါက်ဆွဲပန်းကန်ကို … ခပ်ပြီး … မြတ် ပါးစပ် ရှိမယ့်နေရာကို မှန်းပြီး … ဇွန်းကို ရှေ့တိုးလိုက်သည် … မြတ်က … အလိုက်သိသည် … အမှန်က … ပါးစပ်နဲ့ … ဇွန်းက … တလွဲ … သူက အတင်းလိုက်ပြီး … ပါးစပ်ဟကာ … စားလိုက်သည် … ကျွန်တော်မျက်စိမမြင်လို့ … အဆင်မပြေတာကို … မသိစေချင် …
“ဟဲ ဟဲ … ကောင်းတယ် … ကိုခန့်က တော်တယ်နော် … ကျွေးတတ်တယ် …”
“ကျွေးတတ်တာပေါ့ … မြတ်ကို … ကျွန်တော် မြင်ရတယ် … “
ကျွန်တော် စိတ်ပျော်အောင် နောက်ပြောင်နေပေမယ့် … မြတ် လိုက်ပြောနေပေမယ့် … ကျွန်တော်လည်း သိပါတယ် …
“ပန်းကန်ပေးတော့နော် … မြတ်ဘာ့သာ မြန်မြန်စားလိုက်တော့မယ် …”
မြတ် … ရှလွတ် ရှလွတ်နဲ့ … အမြန်စားတယ် … ကျွန်တော်ကြားပါတယ် … သူတော်တော် ဗိုက်ဆာနေတဲ့အသံ … အားလုံးစားပြီးတော့ … မြတ်က … ကျွန်တော့်လက်ကို ဆွဲပြီး … ရေချိုးခန်းထဲ ခေါ်သွားသည် … သွားတိုက်ဖို့ ပြင်ပေးတော့ … ကျွန်တော်သွားတိုက်လိုက်သည် … မျက်စိမမြင်တော့ … အကုန်လုံး အလွဲလွဲ အချော်ချော် … နေ့စဉ်လုပ်နေကျ ကိစဿစလေးတွေကလည်း … အဆင်မပြေ … ဟိုချော် ဒီချော်နဲ့ … ဒုက္ခပါပဲဗျာ … တော်သေးသည် … မြတ်က ကူလုပ်ပေးသည် … အဝတ်လဲတော့ … ကျွန်တော် ရှက်လိုက်တာဗျာ … အပေါ်အကျီလဲတော့ … ကိစ္စမရှိဘူး … အောက်က ပုဆိုးလဲတော့ … ဒုက္ခပါပဲဗျာ … မိန်းကလေး တယောက်ရဲ့ အရှေ့မှာ … ပုဆိုးလဲရမှာ … အဆင်ပြေရင် ကောင်းရဲ့ … ကို့ယို့ကားယား ဖြစ်ရင် … ရှက်စရာကြီးဗျာ …
“ဟိတ် … ပုဆိုးလဲအုံးလေ …”
“အဟဲ … မြတ် ဟိုဘက်လှည့်နေ …”
“အောင်မြတ်လေး … ကိုလူပျိုရဲ့ … မြတ်ကမရှက်ရဘူး … သူက ရှက်နေတယ် … အင်းပါ … လှည့်လိုက်ပြီ … လဲတော့ … ခစ် … ခစ် …”
ကျွန်တော် ပုဆိုးကို … မြန်မြန်လဲလိုက်သည် … တော်သေးတယ် … အဆင်ချောလို့ …
“အင်း ရပြီ …”
“တယ်ဟုတ်ပါလား … ဝတ်တတ်သားပဲ …”
ဟဲ ဟဲ … ကျွန်တော် ရီလိုက်မိသည် … မြတ်ရဲ့ … အားပေးစကားပြောပုံလေးကို … ကျွန်တော် အသိအမှတ် ပြုလိုက်ပါတယ် … သူက ကျွန်တော့်စိတ်လေး ပျော်စေချင်သည် ထင်ပါရဲ့ … ယုံကြည်မှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးနေတဲ့ … မြတ်က … ကျွန်တော့်ရဲ့ … မီးအိမ်ရှင်မလေးလား … ကျွန်တော် မျက်စိမမြင်ရတာ … ခဏလောက် မေ့သွားသည် …
“ကိုခန့်… အိပ်တော့နော် … ၃ နာရီတောင်ထိုးတော့မယ် …”
“အင်း … မြတ်ရော ဘယ်မှာအိပ်မှာလဲ …”
“ဟင့်အင်း … အဲလို မအိပ်နဲ့ …”
“အဲလို မအိပ်ရင် ဘယ်လိုအိပ်ရမှာလဲ …”
“မြတ်နော် … တခြား ဘာစိတ်မှမတွေးနဲ့ … မြတ်ကို … မှဲ့တစ်ပေါက် မစွန်းစေရဘူး … ဟုတ်ပြီလား”
“အဲလိုလဲ မဟုတ်ပါဘူး … ကိုခန့်ကို ယုံပါတယ် …”
“အံဆွဲထဲမှာ ဓါးတစ်ချောင်းရှိတယ် … ကျွန်တော် … တခုခု … မြတ်ကိုအတင်းလုပ်ရင် … ထိုးသာ ထိုးလိုက် … ဟုတ်ပြီလား …”
ကျွန်တော် မမြင်ရပေမယ့် … စာနာပေးနိုင်ပါတယ် … ညအိပ်လာစောင့်ပေးတဲ့ မြတ်က … ခုတင်ဘေးမှာ ထိုင်လျက်အိပ်တာ … ဘယ်လိုလုပ်အဆင်ပြေမှာလဲ … ကျွန်တော့် ခုတင်က … တယောက် ကုတင် … ဒါပေမယ့် …ကျယ်ပါတယ် … ကျွန်တော် ဟိုဘက်ကပ်အိပ်ရင် … မြတ် ကောင်းကောင်းအိပ်လို့ရတယ် … ကျွန်တော် ဟိုဘက်ရွှေ့ပြီး … အိပ်တော့ … မြတ်က … ဘေးနားမှာလာအိပ်သည် … တကယ်ပါ … ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ … ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ဖြစ်ချင်ပေမယ့် … အတင်းတားမြစ်လိုက်ပါတယ် … မကောင်းဘူးလေ … ကိုယ့်ကို စေတနာနဲ့ လာစောင့်ပေးတဲ့ … သူငယ်ချင်းကို … မညစ်ပတ်ချင်ဘူး … စိတ်ယုတ်တွေနဲ့ … မကြံစည်ချင်ဘူး … ကျေးဇူးကန်းတဲ့ကောင် မဖြစ်ချင်ပါဘူး … ကျွန်တော် … တောတွေး တောင်တွေးနဲ့ … မှေးကနဲ ဖြစ်သွားတော့မယ့်အချိန်မှာ … မြတ်ဆီက … သက်ပြင်းလေး … ခိုးချသံ … ကျွန်တော့်နားနဲ့ ဆတ်ဆတ် ကြားလိုက်ပါတယ် … မြတ်လည်း ရင်ခုန်နေတယ် ထင်ပါရဲ့ … ကျွန်တော် ဇာတ်လမ်းစလိုက်ရင် … ချစ်ဇာတ်လမ်းတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် … ဒါပေမယ့် … ကျွန်တော် မလုပ်ရက်ဘူးဗျာ … ကျွန်တော့်လို … မျက်မမြင်တယောက်ဘဝထဲ … ဖြူဖြူစင်စင် သူငယ်ချင်းလေးကို … ဆွဲမသွင်းချင်ပါဘူး …
မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားရင်း … တီတီ တီတီနဲ့ … နှိုးစက်သံကြောင့် ကျွန်တော် နိုးလာပါတယ် … ၅ နာရီ ထိုးပြီ … မနေ့က … ဒီအချိန်မှာ … ကျွန်တော် … သီရိကို ကြိုဖို့ … အိမ်ကနေ စထွက်တဲ့ အချိန်ပေါ့ … ဟင်း … ပထမဆုံး သတိထားမိတာက … မြတ် … ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ပေါ်ကို … လက်လေးတင်ပြီး … ကျွန်တော့်ကို ဖက်ထားပါတယ် … မြတ်ရဲ့ … ရင်နှစ်မွှာက … ကျွန်တော့် ညာဘက်ခါးကို … ကပ်ထားသလို ဖြစ်နေတော့ … ဟင်း … နွေးပါသည် … အိပါသည် … အတွင်းကအခုအခံတွေ ရှိပေမယ့် … မြတ်ရဲ့ ရင်ငွေ့က နွေးနွေးလေး … သူ့နှာခေါင်းက … ရှူထုတ်လိုက်တဲ့ … လေပူလေးကလည်း .. ကျွန်တော့် ပုခုံးကို … နွေးကနဲ နွေးကနဲ … ဖြစ်သွားစေသည် … အော် … သနားပါတယ် … မြတ်ရယ် … ကျွန်တော့်ကို … လာစောင့်ပေးတာ … တော်တော် အိပ်ရေးပျက်ရှာတယ်နဲ့ တူတယ် … အခန်းလေးက … နည်းနည်းအေးတော့ … နွေးအောင် ကျွန်တော့်ကို ဖက်ထားသလားမသိ … စိတ်ထဲမှာ ဖြူဖြူစင်စင်ထားပေမယ့် … သွေးမတော် သားမစပ် … အဖိုနဲ့အမ … ဖက်အိပ်တော့ … ကျွန်တော့် စိတ်လေးက … ဟိုဘက်ဒီဘက် … ယိမ်းယိုင်စ ပြုလာပါသည် … ကျွန်တော် ခေါင်းလေးကို စောင်းပြီး … မြတ် နှဖူးလေးကို … တချက်နမ်းလိုက်ပါတယ် … ဘာကြောင့်မှန်းမသိ … ကျွန်တော် … မြတ်ကို နမ်းကြည့်ချင်သည် … ချစ်တာလား … ဟင့်အင်း … မပြောတတ်ဘူး … ကျွန်တော် ချစ်တာ သီရိလို့ထင်သည် … ဒါဖြင့် … ဘာလို့နမ်းတာလဲ … မြတ်နိုးတာ … ဟုတ်တယ် … မြတ်နိုးတာ … ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာ … လာကူညီပေးတာ … နွေးထွေးမှုပေးတာ … ကျွန်တော့်အမေလိုပါပဲ … ရင်ထဲက … မြတ်နိုးစိတ်ကြောင့် … ဖွဖွလေး … နမ်းလိုက်ပါတယ် …
ဒီအချိန်ထိ … မြတ်မနိုးသေး … အိပ်ရေးပျက်တော့ … နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် အိပ်ပျော်နေတယ်နဲ့ တူတယ် … ကျွန်တော်လေ … နောက်ထပ် အနမ်းတပွင့် ထပ်ချွေလိုက်တယ် … အဲဒီမှာ ကျွန်တော် ဒုကဿခရောက်တာပဲ …
“ကိုခန့် … မြတ်ကို ဘာလို့နမ်းတာလဲဟင် …”
ဟိုက် … သွားပြီ … မြတ် … မအိပ်ဘူး … နိုးနေတယ် … မျက်စိမမြင်ရတာ … တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာ … ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် မြတ် အိပ်နေမယ်ထင်တာ …
“ဟိုလေ … မြတ်ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်လို့ပါ …”
“ကျေးဇူးတင်ရင် … နမ်းရောလား …”
“ကျွန်တော် ဒုကဿခရောက်နေတုန်း … ကျွန်တော့်အမေ အစားပြန်ရသလို … ခံစားရတယ် … စိတ်မရှိပါနဲ့နော် … ကျွန်တော်က စိတ်ယုတ်နဲ့ … နမ်းတာဟုတ်ပါဘူး … မြတ်နိုးလို့ နမ်းတာ …”
“ဟွန့် … တော်ပါ … စကားတတ်တိုင်း …”
“စိတ်ရင်းနဲ့ ပြောတာပါ မြတ်ရယ် … မြတ်မယုံရင် … “
“ဟုတ်ပါပြီ … ညာတာပါတေးနဲ့ … သီရိကိုရော နမ်းသေးလားဟင်”
“နမ်းတယ် … ဟိုနေ့က … ကျောင်းလာတုန်းက …”
“ဟယ် … လူဆိုးပဲ …”
သီရိကို ချစ်ခဲ့မိပါသည် … သီရိကလည်း ပြန်ချစ်ခွင့်ပေးပါသည် … သိပ်လှတဲ့ သီရိကို … အနမ်းပွင့်တွေ ချွေခဲ့တဲ့ … ကျွန်တော်က လူဆိုးလားဗျာ … အခုတော့ … အခုတော့ … ကျွန်တော် မျက်စိ မမြင်ရတော့ဘူး … သီရိနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီး ရွှေလည်တွဲခွင့်က … ဝေးကွာလို့သွားပြီထင်ပါရဲ့ … ကျွန်တော် မြတ်ကို … စကားတွေ ပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူး … မြတ်လည်း ရိပ်မိတယ် ထင်ပါတယ် … စကားလွှဲသွားတယ် …
“ကိုခန့် … မြတ် … အိမ် ခဏပြန်လိုက်အုံးမယ်နော် …”
“ရေသန့်ဘူး … မုန့် အကုန်လုံး စားပွဲပေါ်မှာ သိလား … “
“သွားပြီနော် … “
မြတ် ထွက်သွားပြီး … အိမ်လေးက တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ် … ကျွန်တော်လည်း … လုပ်စရာမရှိတာနဲ့ … ပြန်အိပ်လိုက်တယ် … ဘာမှလည်း မတွေးချင်တော့ဘူး … ဘာမှလည်း … မစဉ်းစားချင်တော့ဘူး … ကျွန်တော့်ရဲ့ အနာဂတ်တွေ ပျောက်ဆုံးသွားပြီလေ … ကျွန်တော် အိပ်ရာထဲမှာ လှဲနေတုန်း … တယောက်ယောက် အနားကပ်လာတယ် … ဘယ်သူလဲ … ခြေသံက ဖွဖွလေး …
“သား … ဘယ်လိုနေသေးလဲ … နေကောင်းရဲ့လား”
ဘကြီးခန့်အသံ ကြားလိုက်ရတော့ … ကျွန်တော် အရမ်းအားတက်သွားမိပါတယ် … ဘာကြောင့်မှန်းတော့ မသိ … ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ … အားရှိသွားသည် …
“မငိုရဘူးနော် … အားတင်းထား … သား သူငယ်ချင်း ပြောပြလို့ … ဘကြီး အားလုံး သိပြီးသွားပြီ … “
“ဘကြီး … ကျွန်တော့်မျက်စိလေ … မမြင်ရတော့ဘူး … သိလား …”
“ပြန်မြင်ရမှာပေါ့ သားရယ် … စိတ်မလောရဘူး … ဆရာဝန်တွေ ကုလို့မရလို့ … လက်လျော့သွားရင်တောင်မှ … ဘကြီးခန့် ကုပေးမှာပေါ့ …”
“တကယ်လားဟင် … ဘကြီးခန့် … ကျွန်တော် တကယ်ပြန်မြင်ရမှာပေါ့နော် …”
“ဟား ဟား … ငါ့သားကိုယ်မှာ … အပျိုနံ့လေးက … စွဲနေပြန်ပြီ … Aphrodite မလေးတော့ မဟုတ်ဘူး … မှတ်လား”
“သီရိတော့ မဟုတ်ပါဘူး … အေးမြတ်လှိုင်ပါ … ခုနက တယောက်လေ …”
“အေး … အဲဒီတယောက်ကိုတော့ … ငါတော်တော်သဘောကျတယ် … သားနဲ့ဆို … တော်တော်လိုက်တယ် …”
“မဗျာနဲ့ … သူ့ရဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးက အရမ်းကောင်းတယ် … မျက်လုံးလေးကို တောက်နေတာပဲ … စိတ်ထားလဲ အရမ်းလှတယ် … ဘကြီးခန့်ပြောတာယုံ … ဒီမိန်းကလေးက … မင်းဘဝရဲ့ … အလင်းပြ မီးအိမ်လေး ဖြစ်လာလိမ့်မယ် …”
“ဒါပေမယ့် ဘကြီးခန့်ရယ် … ကျွန်တော်ချစ်တာ … သီရိလေ …”
“ဟား ဟား … အေးပါကွာ … သား သဘော … သားသဘော … ရေမိုးချိုးအုံး … စိတ်ကို ကြည်ကြည်လင်ဖြစ်အောင်ထား … ဟုတ်ပြီလား …”
ဒီနေ့ … သီရိမလာဘူး … ယွန်းအိလာတယ် … အားပေးတယ် … ရီသံလေး တခစ်ခစ်က … ကျွန်တော့်စိတ်တွေကို ပျော်စေတယ် .. မျက်စိမမြင်တာကို ခဏလောက်မေ့သွားတယ် … ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ယွန်းအိ …
ယွန်းအိလည်း … မြတ်နဲ့ အတူတူ လာတယ် … အားပေးတယ် … တီတီတာတာ … နဲ့ စတယ် … နောက်တယ် … ကျွန်တော် စိတ်ပျော်အောင်လို့ … ဂိမ်းတွေ ကစားကြတယ် … ပျော်မိပါတယ် … ယွန်းအိနဲ့ မြတ်တို့ရဲ့ … နွေးထွေးမှုက … ကျွန်တော် တသက်မမေ့ပါဘူး … ယွန်းအိက ဒိုးဆက်လေးတွေယူလာတယ် … မှောက်ထားတဲ့ ဖဲကို မှန်အောင်ပြောရတယ် … ပြောလို့မှန်ရင် … ဆရာလို့ ခေါ်ရမယ် … မှားရင် … ဂလိထိုးခံရမယ် … ဘယ်လိုလဲ ကစားမလားတဲ့ … ယွန်းအိ … စမှန်းတယ် … ၆း၁ … မှားတယ် … ၂း၎ … ဘာမှမဆိုင်ဘူး … မြတ်နဲ့ ကျွန်တော် … ယွန်းအိကို ကလိ ဝိုင်းထိုးတယ် … ယွန်းအိ … ရီလိုက်တာ တခစ်ခစ်နဲ့ … နောက်တလှည့် … မြတ် အလှည့် … သူလည်း မှန်ဘူး … တဟားဟားနဲ့ … ရီရော … ကလိထိုးတော့ … မြတ်က ပိုယားတတ်တယ် … ဟင်း … အပျိုလေးခါးတို့တော့ … အိအိလေးတွေနဲ့ … ထိမိပါတယ် … အတွေ့အထိက စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ် … ကျွန်တော် မျက်စိမမြင်တာကို မေ့သွားတယ် … ခဏပေါ့ …
ကျွန်တော် မျှော်နေတာက … သီရီ … တရက်လည်း မလာ … နှစ်ရက်လည်း မလာ … မြတ်ပြောတာတော့ … သိပ်ပုံစံမကျ … ကျောင်းလည်းမလာဘူး … သူ့အမေများ မလွှတ်တော့တာလား … ဖြစ်နိုင်တယ် … သူ့သမီး တာဝန်ယူရမှာစိုးလို့လား … ဟင့်အင်း … ယူပါမယ်ဆိုရင်တောင် … မယူဘူး … နစ်နာတာက ကျွန်တော်လေ … သူ့ကြောင့် ရန်ထဖြစ်တယ် … မျက်စိကန်းတယ် … ဒါပေမယ့် … ကျွန်တော် သီရိကိုချစ်တယ် … ကျွန်တော့် ကြောင့် သူ့ဘဝ မနစ်စေချင်ဘူး … ဝန်မပိစေချင်ဘူး … ပျော်ရွှင်ခြင်းများနဲ့ … သူ့ကို မြင်ချင်တယ် … ဒါကျွန်တော့် ဆန္ဒ … ဒါပေမယ့် … ရင်ထဲမှာ … ပန်းနုရောင် နှုတ်ခမ်းလေးကို … သတိရတယ် …. အပျိုနံ့လေး သင်းနေတဲ့ … သီရိပါးပြင်လေးကို သတိရတယ် … ချစ်ပါတယ် … သိပ်လှတဲ့ … သီရိသာ အနားမှာရှိရင် … ပွေ့ဖက်ထားချင်တယ် … ဒါပေမယ့်ဗျာ … မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး … ကျွန်တော်နဲ့ သီရိ … ချစ်ခြင်းဟာ … တခန်းရပ်သွားပြီ …
မြတ် … ညနေတိုင်း ကျောင်းကနေ လာတယ် … တခုခု ယူလာတယ် … ကျွန်တော့်ကို ကျွေးတယ် … ခွံ့ကျွေးတယ် … သူလည်းစားတယ် … ပျော်ပါတယ် … ကြင်နာခြင်း … နွေးထွေးခြင်းတွေ … ပေးကမ်းနေတဲ့ … သူငယ်ချင်းကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ဘကြီးခန့်က … ယိုးဒယားခေါ်သွားဖို့ ဗီဇာကိစ္စတွေ လုပ်နေတယ် … မြတ်က အိမ်စောင့်ပေးပါတယ် … အိမ်ကို ဧည့်သည်လာတာ မကြိုက်တဲ့ ဘကြီးခန့် … မြတ်ကိုကျတော့ … လိုလိုချင်ချင် … ခေါ်ပါတယ် … သမီး … သမီးနဲ့ … ဒီလိုနဲ့ … တပတ်ကျော်သွားတယ် … မြတ်နဲ့ ကျွန်တော့်ကြားက … သံယောဇဉ်လေးက … တိုးလာတယ် … အဖြူရောင် စည်းလေးက … ပါးလာတယ် … မှောင်မဲနေတဲ့ ဘဝထဲ မလာပါနဲ့ဗျာ … တကယ်ပါ မခေါ်ရက်ပါဘူး …
တခါတလေ … ကျွန်တော် ငိုမိတယ် … စိတ်ဓါတ်ကျတယ် … ဒီလို မမြင်ရတဲ့ဘဝမှာ နေချင်ဘူး … အရမ်းငိုတယ် … ပထမတော့ … မြတ်လည်း … အားပေးပါတယ် … နောက်တော့ … သူလည်း ငိုတယ် … ကျွန်တော့်ကို … သူ ဖက်ထားတယ် … ဝမ်းနည်းမှုတွေကို … သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ .. ပြေလျော့စေတယ် … အိထွားတဲ့ သီရိ ရင်ခွင်နဲ့တော့ မတူဘူး … မြတ်လည်း ရင်သားဆိုင်ခဲလေးက … ရှိသင့်သလောက် … ရှိပါတယ် … သူ့ရင်ခွင်က … နွေးတယ် … ဒါပေမယ့် … ရင်ကို အေးစေတယ် … အပူတွေကို လျော့သွားစေတယ် … ကျွန်တော် အရမ်းငိုမိလေ … ကျွန်တော့်ကို အတင်းဖက်ထားလေပဲ … သူလည်း သိပါတယ် … ကျွန်တော် ပြန်မမြင်ရတော့ဘူးဆိုတာ …
တနေ့တော့ … ကျွန်တော့်ဘဝထဲကို … သူ ဝင်လာပါတယ် … ကျွန်တော် အတင်းခေါ်တ … အဲဒီနေ့က ကြာသပတေးနေ့ … ဘကြီးခန့်က … ဗီဇာကိစဿစသွားမေးတယ် … မြတ် ရောက်လာတယ် … ကျွန်တော့် အခန်းကို ရှင်းပေးတယ် … ရေဒီယိုလေး ဖွင့်ပေးတယ် … ဒီနေ့ သီချင်းတွေ ကောင်းတယ်တဲ့ … အိပ်ယာခင်းတွေ လဲပေးတယ် … နောက်တော့ တကိုယ်လုံး ကပ်စေးစေးဖြစ်နေလို့ … သူ ရေချိုးတယ် … ကျွန်တော် ရေဒီယိုက … ထူးအိမ်သင် သီချင်းလေးကို … နားထောင်နေတယ် …
ပြောင်းလဲတက်တဲ့ … မင်းကို …
ဒို့ဘယ်လိုမှ … နားမလည် …
ကြင်နာတတ်သော … အညိုရောင်မျက်ဝန်းများ …
နှလုံးသားအိမ်ကို ဓားနဲ့ မွှန်းနေတဲ့ စကားလေးတွေ …
ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ ပဲ့တင်ထပ်နေတယ် အမြဲပဲ…။
ချစ်တက်လွန်းတဲ့ … စိတ်တွေ …
သာယာချိုမြိန်ခဲ့သော … အနီရောင်နှုတ်ခမ်းများ …
မေ့မရနိုင်အောင် … စွဲလမ်းမိနေတဲ့ … အပြုံးလေးတွေ …
မှောင်နေမယ့် … ကိုယ့်ရဲ့ကမ္ဘာမှာ … မင်းမရှိခဲ့ရင်လေ …
ကြင်နာသူ … ကိုယ့်ဘဝအလင်းတန်းလေး …
ဘယ်ဆီကို ရောက်နေပြီလဲ …
စိမ်း ရက် လေ အား
ဒီသီချင်းလေးကို နားထောင်ပြီး … ကျွန်တော် … ငိုတယ် … အရမ်းငိုတယ် … သီရိနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော့်ခံစားချက်တွေက … သီချင်းထဲကလို ဖြစ်နေပြီလား … မြတ် ရေချိုးပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ … ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး … ဝမ်းနည်းသွားတယ် … ကျွန်တော့်ကို ချော့တယ် … ကျွန်တော့်ကို သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ဖွက်ထားပြီး နှစ်သိမ့်တယ် … စကားတွေ လျှောက်ပြောတယ် … ကျွန်တော် ငိုတာ လျော့သွားတယ် … နွေးထွေးတဲ့ မြတ်ရင်ခွင်ထဲမှာ … ကျွန်တော် တသက်လုံး နေလိုက်ချင်ပါတယ် … ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ယိမ်းယိုင်နေတယ် … မြတ်ရဲ့ အကြင်နာတွေ … ကျွန်တော့် နှလုံးသားကို စီးဆင်းနေတယ် … ကျွန်တော်သိပါတယ် … ကြင်နာတတ်တဲ့ မြတ်ကို … ကျွန်တော် ချစ်တယ် …
“ကိုခန့် … နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေ ရှည်နေပြီနော် … မြတ် ရိပ်ပေးမယ် …”
ကျွန်တော့်ကို မုတ်ဆိတ်မွှေးတွေ ရိပ်ပေးတယ် … မြတ်က … ကျွန်တော့်ကို ထိုင်ခိုင်းပြီး …မျက်နှာမော့ခိုင်းတယ် … သူက မတ်တပ်ရပ်ပြီး … ရိပ်ပေးတယ် … သူရိုးသားပေမယ့် … ကျွန်တော် မရိုးသားတော့ဘူး … အေးအေးလေးနဲ့ မွှေးနေတဲ့ … အပျိုနံ့လေးကို … ကျွန်တော် ရှူကြည့်တယ် … နူးညံ့တယ် … လတ်ဆတ်တယ် … ဖြေးဖြေးလေးနဲ့ … ကျွန်တော့် သွေးတွေ ဆူလာတယ် … ပန်းအိအိတောင်ကုန်းလေးက … ကျွန်တော့်နှာခေါင်းရှေ့မှာ … ဟိုလိုလိုဒီလိုလို … ရွေ့နေတယ် … မြတ်ကို … နမ်းကြည့်ချင်တယ် … ဖက်ထားကြည့်ချင်တယ် … မြတ်ရဲ့ အတွင်း ပစဿစည်းလေးတွေကို … ကိုင်ကြည့်ချင်တယ် … မြတ် ကျွန်တော့် မေးစေ့လေးကို ကိုင်ပြီး ရိပ်ပေးတယ် … ကျွန်တော် ရင်တွေ ခုန်လာတယ် … ကျွန်တော့်လက်က … သူ့ခါးကို ကိုင်လိုက်တယ် …
“ကိုခန့်နော် … ဟွန့် …”
မြတ် လေသံက … ငြင်းဆန်တာလား … ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး … ဒီဘက်လက်ကိုင်ပြီးတော့ … ဟိုဘက်ကလည်း ကိုင်လိုက်တယ် …
“ဟိတ် … ယားတယ်နော် … ငြိမ်ငြိမ်နေ … ရှကုန်လိမ့်မယ် …”
“ဟင့်အင်း … မြတ်ကို ဖက်ထားချင်တယ် …”
“ကိုခန့်နော် … စကားဆန်းတွေ ပြောနဲ့ …”
“အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ … လျှောက်ပြောမနေနဲ့ … ခစ် … ခစ်”
“တကယ်ပြောတာ … မြတ် … ကျွန်တော့်ကို ချစ်တယ်မှတ်လားဟင်”
“အို … ကိုခန့်နော် … ယားတယ် … ဟိတ် … အမေ့”
ကျွန်တော် … မြတ်ခါးကိုကိုင်ကြည့်နေရင်းက … ဆတ်ကနဲ … ဖက်ပစ်လိုက်တယ် … မြတ်တကိုယ်လုံး … ကျွန်တော့်ရှေ့ကို ရောက်လာတယ် … ကျွန်တော့်မျက်နှာကို … မြတ်ရင်ခွင်ထဲ မြှပ်ထားပြီး … မြတ်အချစ်ကို တောင်းခံလိုက်တယ် … မွှေးတယ်ဗျာ … အရမ်းမွှေးတယ် … အပျိုနံ့သင်းသင်းလေးက … ရင်ခုန်စရာ …
“ကိုခန့်နော် … မြတ်ကို လွှတ် …”
“ဟင့်အင်း … မလွှတ်ဘူး … ချစ်တယ်ပြောမှ လွှတ်မယ် … မောင့်ကို ချစ်တယ်မှတ်လားဟင် …”
“ဘာ မောင်လဲ … လွှတ်ကွာ … မြတ် မနေတတ်ဘူး … ယားတယ် …”
“ဟေ့အေး … ဟိတ် … မနမ်းနဲ့လေ … အရမ်းယားတယ်နော် …”
ကျွန်တော် … မြတ်ရဲ့ ရင်သားဆိုင်လေးတွေကို နမ်းလိုက်တယ် … မြတ် တွန့်ကနဲ … ယားသွားတယ် … မြတ်ရုန်းတယ် … ကျွန်တော် မလွှတ်ဘူး … ထပ်နမ်းတယ် … အသွေးအသားတွေက ဆူပွက်လာတယ် … လက်တွေက လှုပ်ရှားလာတယ် … မြတ် အတင်းရုန်းလေ … ကျွန်တော် အတင်းနမ်းလေပဲ … အိအိစက်စက် … ရင်သားဆိုင်လေးတွေပေါ်မှာ … ဝတ်ထားတဲ့ ဘရာစီယာက ပါးပါးလေး … အပေါ်ဝတ်လေးကလည်း ပါးပါးလေး … ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်းထသည် … ကျွန်တော် … မြတ် ရင်သားဆိုင်လေးကို … နမ်းတာ အားမရ … ဖောင်းမို့မို့နေရာလေးကို … ဖိပြီးနမ်းသည် … ရင်ထဲမှာ ပူလောင်လာသည် … ကိုက်ကြည့်သည် … မြတ် ထွန့်ထွန့်လူးသွားတယ် …
“ဟေ့အေးနော် … ကိုခန့် … အဲဒီလို မနမ်းနဲ့ကွာ … မြတ် အရမ်းရင်တုန်တယ် … ဟာာာ … ဟင့် …”
“ဟာကွာ … ပြောစကားနားမထောင်ဘူး … အရမ်းယားတယ်ကွာ … မြတ် မနေတတ်ဘူး … အို … အို …”
ထောင်မတ်နေတဲ့ … မြတ် ရင်သားထိပ်ဖျားလေးကို … ကျွန်တော် ရှာတွေ့သွားတယ် … မြတ်လည်း အသွေးအသားနဲ့ပါ … သူလည်း … စိတ်ကြွမှာပေါ့ … မြတ်ရဲ့ အတွန်းအရုန်းလေးတွေက … အားမရှိတော့ … ခပ်ပျော့ပျော့ ရုန်းကြည့်သည် … မရ … မြတ် လက်လျော့သွားသည် … ကျွန်တော် … သွားလေးနဲ့ … မြတ် နို့သီးခေါင်းလေးကို ခြစ်ကြည့်သည် …
“ဟာာ … ဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေတာလဲကွယ် … မြတ် မနေတတ်တော့ဘူး … တော်ပြီနော် … “
သူက တော်ပြီဆိုပေမယ့် … ကျွန်တော်က မတော်နိုင် … စိတ်တွေက မရပ်နိုင်အောင် … အရမ်းချစ်ချင်နေသည် … မြတ် ခါးကို ခပ်တင်းတင်းဖက်ထားပြီး … လက်တဖက်က .. မြတ် တင်သားလေးကို … ပွတ်သည် … သပ်သည် … မနေနိုင် … ညှစ်ပစ်လိုက်သည် … အင့် .. မြတ် နှုတ်ခမ်းက တိုးတိုးလေး … ဒါပေမယ့် … ကျွန်တော်ကြားတယ် …
မြတ် တင်ပါးလေးကို … ဆုပ်လိုက် … နယ်လိုက် … ညှစ်လိုက် … အချစ်စာမျက်နှာ … အထက်အောက် … ဖွင့်ပြီး ချစ်ရေးဆိုတော့ … မြတ် စုပ်တသပ်သပ် ဖြစ်လာသည် … မရုန်းတော့ … ပါးစပ်က ချစ်တယ် မပြောသေးပေမယ့် … ကျွန်တော် လုပ်သမျှ … အလိုလိုက်နေတယ် … ချစ်ပါတယ်လို့ ဖွင့်ပြောစရာမလိုတော့ … ကျွန်တော် သိပါတယ် … မြတ် ကျွန်တော့်ကို ချစ်တယ် …
“ကိုခန့်ရယ် … မြတ်ကို တကယ်ချစ်တာလားဟင် … ဟင့် …”
“ချစ်တယ် မြတ် … အရမ်းချစ်တယ် …”
“မြတ်လည်း … မောင့်ကို … အို အရမ်းမနမ်းနဲ့ကွယ် …”
ကျွန်တော် ချစ်လက်စကို ခဏရပ်ပြီး နားစွင့်လိုက်တယ် … မြတ်ရင်တွေ တအားခုန်နေတယ် …
“မောင့်ကို … ဘာဖြစ်တယ် …”
“သိပ်ဆိုးတဲ့ မောင့်ကို ချစ်ဘူး …”
“မြတ် မချစ်ဘူးနော် … ရတယ် … ရတယ် …”
မြတ်ရင်ခွင်ထဲမှာ … ကျွန်တော် အနမ်းဆိုးတွေ ခပ်ကဲကဲလေးပေးပစ်လိုက်တယ် …
“ဟာ … ဟေ့အေး … ဟေ့အေး … မောင် … တော်တော့နော် … မြတ် မနေတတ်ဘူး … ဟာ …. ဟာာာ …”
မြတ် မနေနိုင်ပါဘူး … ထွန့်ထွန့်လူးသွားတယ် … ကျွန်တော်လည်း … မနေနိုင်တော့ဘူး … လက်တဖက်က … မြတ်ပေါင်သားလေးကို … လိုက်ပွတ်တယ် … မြတ် ဘာမှ မပြောဘူး … နောက် … လက်က … မြတ် ပေါင်ရင်းနား ရောက်သွားတယ် …
“ဟိတ် … ဘာတွေ လျှောက်ကိုင်တာလဲ …”
အထိအတွေ့က နူးညံ့လွန်းတယ် … ကျွန်တော့်လက်ကို … တခုခုက သံလိုက်လိုပဲ စွဲငင်နေတယ် … ကျွန်တော် ကိုင်ကြည့်ချင်တယ် … ဟင်း …
အထိအတွေ့က နူးညံ့လွန်းတယ် … ကျွန်တော့်လက်ကို … တခုခုက သံလိုက်လိုပဲ စွဲငင်နေတယ် … ကျွန်တော် ကိုင်ကြည့်ချင်တယ် … ဟင်း … ကျွန်တော် အရမ်း မြင်ချင်တယ် … မြတ်ရဲ့ အတွင်းသား အလှအပတွေကို ကြည့်ချင်တယ် … တကယ်တော့ မမြင်ရပါဘူး … မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်လာတယ် … မြတ် သိပ်လှတယ် …
“ဟာ … ဟေ့ … မောင်နော် … လွန်လာပြီ … အို … အို … ဟင့် …”
နူးညံ့တဲ့ ပန်းအိအိတောင်ကုန်းလေးက … ထမီလေးအောက်မှာ … ဖောင်းအိနေသည် … နွေးသည် … ခံစားချက်က … ကြက်သီးတဖျန်းဖျန်းထသည် … ရေငတ်လာသည် … ချစ်တယ် … မြတ်ရယ် … မြတ်ရုန်းသည် … တွန့်ကနဲ … လိမ်ကနဲ … ခနဿဓာကိုယ်လေးက … တုန်သွားသည် … မြတ်တင်ပါးလေးက … အနောက်ကို ကော့ကော့သွားသည် … မရ … နောက်က ကျွန်တော့်လက်က … အတင်းညှစ်ပစ်လိုက်သည် … မြတ် ပြေးလို့ မရ… အပေါ်မှာ ရင်သားတွေကို ဆော့ကစားနေသည် … အောက်မှာ ပန်းပွင့်လေးက … မထိတထိ … သူ ခံရခက်သည် … ကျွန်တော် ကိုင်လို့ကောင်းသည် … နူးညံ့တဲ့ ပန်းတောင်မို့မို့လေးပေါ်မှာ … ကျွန်တော့်လက်ညှိုးက … အရုပ်လေးတွေ ရေးခြစ်လိုက်သည် … မြတ် ဆောက်တည်ရာမရ … တွန့်ကနဲ … ဆတ်ကနဲ …
“မောင်ရယ် … တော်ပါတော့ … မြတ်မနေတတ်ဘူး … ဟင့် … မောင် အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ”
ကျွန်တော့် အနမ်းတွေက … မြတ် ရင်သားလေးပေါ်မှာ … အုပ်ဆိုင်းနေသည် … နမ်းသည် … စုပ်သည် … ကိုက်သည် … ဒီဘက်ပြီးတော့ ဟိုဘက် … ကျွန်တော့်အတွေးတွေက … အမှောင်ကမဿဘာမှာ … တဝဲလည်လည် … မြတ်ကိုလည်း ခေါ်သွားချင်သည် … မြတ်က သိပ်မလိုက်ချင် … ကျွန်တော်လည်း အတင်းမခေါ်ရက် … ဒါပေမယ့် … ခံစားချက်တွေက … ကျွန်တော်တို့ကို … အတင်းတွန်းပို့လိုက်သည် … ကျွန်တော် … မွေ့ယာပေါ်ကို … လဲချလိုက်သည် … ကျွန်တော်သိသည် … ကုတင်က … ကျွန်တော့် ဘယ်ဘက်မှာ … မြတ်လည်း … ပြိုလဲကျလာသည် … ချစ်တယ် … မြတ်ရယ် … မြတ် နှုတ်ခမ်းလေးက … ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ … နမ်းပစ်လိုက်သည် … အို .. တဲ့ … မြတ် နှုတ်ခမ်းလေးက … ချိုသည် … ခပ်ပါးပါး နှုတ်ခမ်းလေးကို … ကျွန်တော် ချစ်သည် … မမြင်ရပေမယ့် … မြတ်ကိုချစ်သည် … မျက်စိသာ မြင်ရရင် … ဘယ်လောက် ကောင်းလေမလဲဗျာ … ဖြေးဖြေးလေး … ငုံပြီး စုပ်လိုက်သည် … ဂျယ်လီတုံးလေးလို … ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းထဲ ပျော်ဝင်လာသည် … မြတ်လည်းခံစားရမှာ … ကျွန်တော့်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတဿတာတွေ … မြတ်နှလုံးသားထဲ … ညိမ့်ညိမ့်လေး စီးဝင်သွားသည် … အပေါ်နှုတ်ခမ်းပြီးတော့ … အောက် … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးက … နည်းနည်းထူသည် … သီရိနဲ့တူတယ် … ဟင်း …
ဲနှစ်ယောက်ကြားမှာ ညပ်နေတဲ့ … လက်တဖက်က … မြတ် ပန်းအိအိလေးကို … ကိုင်လိုက်သည် … မြတ် ပေါင်လေးကို စိထားသည် … သူကြောက်လို့ ထင်ပါရဲ့ … မကြောက်ပါနဲ့ မြတ်ရယ် … မောင်ချစ်တယ် … ထိလို့နေတဲ့ … ပန်းအိအိလေးကို … ဖြေးဖြေးချင်းပွတ်ပေးသည် … ထမီအောက်မှာ … မြတ်ရဲ့ မြက်ခင်းနုနုလေးက … ပါးပါးလေး … ကျွန်တော်သိပါတယ် … တောင်ကုန်းပေါ်က မြက်ခင်းလေးက … နုနုလေးတွေ …
ကျွန်တော် အလည်သွားချင်ပါတယ် … မြတ်ရဲ့ လျှိုမြှောင်လေးထဲ … ဝင်ခွင့်ပေးပါ ချစ်သူရယ် …
ကျွန်တော့် လျှာလေးကို … မြတ် နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကြားထဲ … ထိုးထည့်ကြည့်သည် … မြတ်ရဲ့ လျှာလေးကို … ထိမိသည် … မြတ် … တုန်သွားသည် … တစကဿကန့် … ဆတ်ကနဲ မြတ် လျှာလေး … အထဲကို ဝင်သွားသည် … ကျွန်တော် လိုက်ဖမ်းသည် … မမိ … ဟင်း … အောက်ကလက်လေးက … မြတ်ပန်းနုနုလေးပေါ်မှာ … တနေရာကို … ကျွန်တော်စမ်းမိသည် … ဒါ လျှိုမြောင်လေးရဲ့အစ … နည်းနည်းလေး … တိုးကြည့်သည် … မြတ် … ပါးစပ်လေး ဟသွားသည် … ငြီးချင်တယ် ထင်ပါရဲ့ … မိပြီ … မြတ် လျှာလေးကို … ကျွန်တော် ထိသွားသည် … မြတ်ကြောက်နေသည် … ကျွန်တော် ထပ်ကလိသည် … ဆော့သည် … မြတ်လည်း … လူပဲ … အသွေးနဲ့ အသားနဲ့ … သွေးသားက … ထကြွစ အရွယ် … ချစ်လွန်းတော့လည်း … ပြန်တုံ့ပြန်သည် … မထိတထိ … ကျွန်တော်ဖမ်းသည် … နောက်တော့ သူပြန်ဖမ်းသည် … လျှာလေးနှစ်ခု … ဆော့ကစားကြသည် … ပျော်ပါတယ် … ချစ်ရသူရယ် …
သိပ်လှတဲ့ မြတ်ကို … တကယ်မမြင်ရပေမယ့် … ကျွန်တော် မြင်နေရသည် … မြတ် … ကျွန်တော့်ကိုချစ်သည် … သူ့ပေါင်လေးကို … ပိုဟပေးသည် … ပန်းလေးကို ကိုင်ရတာ … ပိုအဆင်ပြေလာသည် … တားမြစ်နယ်ထဲ … ဖြေးဖြေးလေး ကျူးကျော်လာသည် … မြတ် ခွင့်ပြုတယ် … တောင်ကုန်းမို့မို့အောက်က … လျှိုမြှောင်လေးကို … စမ်းမိတယ် … စိုစိုအိအိလေးကို … ဖြေးဖြေးလေး ပွတ်ပေးလိုက်တယ် … မြတ် … ထွန့်ထွန့်လူးသွားတယ် … အပျိုလေးရဲ့ ပန်းနုနုကို … ထင်သလို ဆော့ကစားကြည့်တယ် … မြတ် ရင်တွေ အရမ်းခုန်နေတယ် … ငြီးငြူချင်တယ် … ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလေးကို … သူလာကိုက်တယ် … သူပြောချင်တာ ကျွန်တော် သိတယ် … မောင် အရမ်းဆိုးတယ် …
လက်ဖျားလေးက … အရည်စိုစိုလေးကို စမ်းမိတယ် … ကျွန်တော်မနေနိုင် … အထဲကို နည်းနည်းလေး တိုးမိတယ် … မြတ် မနေတတ် … ရုန်းတယ် … ကျွန်တော် ခါးလေးကို ခပ်တင်းတင်းဖက်ထားရင်း … ခပ်သွက်သွက်လေး … ပွတ်လိုက်တယ် … မြတ် … ငြီးတယ် .. တိုးတိုးလေး … နောက်တော့ ကျယ်လာတယ် … ကျွန်တော့်ကို ရုန်းတယ် … နောက်တော့ ရုန်းတော့ဘူး … အတင်းဖက်ထားတယ် … ကောင်းရဲ့လား ချစ်သူ … မြတ် … သိမ့်သိမ့်လေး … တုန်ခါနေတယ် …
မောင် … မောင် … မြတ် မနေတတ်ဘူး … ဟင့် … ဟီး …
လျှိုမြှောင်လေးထဲက … ချစ်ဝတ်ရည်တွေ သိသိသာသာ စိုလာသည် … ကျွန်တော် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဗျာ …
“မောင် မြတ်ကို တကယ်ချစ်တာလားဟင်”
“ချစ်တာပေါ့ … မြတ်ရယ် … အရမ်းချစ်တယ်”
“ဟင့်အင်း … မရှိတော့ဘူး”
“တကယ်နော် … သေချာလား … မြတ်က … မောင့်ကို ပထမဆုံးချစ်တာ … မောင်ကတော့ … ဟုတ်ဘူးနော်”
“မြတ်ရယ် … မောင် … မြတ်ကို တယောက်ထဲပဲချစ်တော့မယ် … ဟုတ်ပြီလား”
“အတူတူပဲ … အို … ဟာာ … မောင်နော် … အာာာ …”
မြတ်က သိပ်ချစ်တယ် ပြောတော့ … ကျွန်တော် ကဲလိုက်သည် … ပန်းပွင့်လေးကို … ခပ်သွက်သွက် … ပွတ်ပစ်လိုက်သည် … မြတ် … ငြင်းဆန်ပေမယ့် … ပန်းလေးကတော့ … ချစ်ဝတ်ရည်တွေ လှိုင်လှိုင်ထွက်လာသည် … ကျွန်တော် မနေနိုင် … မြတ်လည်း မနေနိုင် … မြတ် ထမီလေးကို ချွတ်လိုက်သည် … မမြင်ရတော့ … ခက်သည် … မြတ်က ငြင်းသည် …
“မောင်နော် … ချွတ်နဲ့အုံးကွယ် … မြတ် ရှက်တယ် …”
“မောင်မှ မမြင်ရတာ … ချွတ်လိုက်ပါနော် … မြတ်”
“ဒါဆို … ဟရုံလေးဟပေး …”
“အထဲကနေ … ကိုင်ကြည့်ချင်တယ် …”
“အို … မောင်အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ …”
မြတ် ကြောက်နေပေမယ့် … အလိုလိုက်သည် … ထမီလေးကို ဟပေးသည် … မြတ်ဗိုက်လေးပေါ်ကနေ … အထဲကို လက်ဝင်သွားသည် … ကောင်းလိုက်တာ … နူးညံ့လိုက်တာ … ထမီပေါ်ကနေ ကိုင်တာနဲ့ … ဘာမှမဆိုင် … ထိလို့ထိမှန်းမသိ … ဂွမ်းပုံလေးလို … အိအိလေး … မြတ် … ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်းထနေသည် … ကျွန်တော်လည်း ဖြစ်သည် … မြတ်ရဲ့ ပန်းလေးကို ကိုင်ရတာ ကျွန်တော့်ရင် တထိတ်ထိတ် … ရင်တွေ တအားခုန်သည် … ချစ်တယ် … မြတ်ရယ် … သိမ့်ကနဲ ထိသွားတာနဲ့ … မြတ် ငြီးတွားသည် … နာသွားလားချစ်သူရယ် …
“အို … မောင် … ဖြေးဖြေးနော် … အရမ်းကြောက်တယ်ကွယ် …”
မြတ် လျှိုမြှောင်အဝလေးမှာ … ကျွန်တော် ဝလုံးလေးတွေ လျှောက်ရေးတယ် … ပန်းလေးက စိနေတာပဲ … အပျိုလေးမို့ … ချစ်ရမှာတောင် နှမြောမိတယ် … ဒါပေမယ့် … မြတ်ကို ချစ်တယ် … ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ် … လျှောက်စမ်းရင်း … တနေရာမှာ … ခပ်ဟဟလေး ဖြစ်နေတယ် … သိမ့်ကနဲ … လက်ဖျားလေး ဝင်သွားတယ် … မြတ် တုန်တက်သွားတယ် …
ဟာ … မောင့် … ဘာလုပ်လိုက်တာလဲကွယ် … မြတ် ကြောက်တယ် …
ဟာ … ဟင့် … အို … အို …
ဖြေးဖြေးလေး ထည့်လိုက်တယ် … လက်တဆစ် … မြတ် ပန်းလေးက … အတင်းဖျစ်ညှစ်ထားတယ် … ဖြေးဖြေးလေး ပြန်ထုတ်လိုက်တယ် … မရ … ညှစ်ထားတယ် … ကြည့်ပါအုံး … ဝင်တော့လည်း ညှစ်ထားတယ် … ထွက်တော့လည်း ညှစ်ထားတယ် … မိန်းမလေးတို့သဘော နားလည်ရခက်ပါလား …
“ဟာာ မောင်ရယ် …”
လက်လေး ပြန်ထုတ်လိုက်တော့ .. မြတ် ငြီးတယ် … လက်လေးပြန်ထည့်တော့လည်း … မြတ် အတင်းဖက်ထားတယ် … မောင် အရမ်းဆိုးတယ်တဲ့ …
“မြတ် … ထမီချွတ်လိုက်တော့နော် …”
မြတ် … ဘာမှ ပြန်မပြော … ဟင်းကနဲ သက်ပြင်းချသံနဲ့အတူ … ထမီလေးကို ချွတ်လိုက်တယ် … ထိသွားတယ် … မြတ် အောက်ပိုင်းမှာ … ဘာမှ မရှိတော့ … မြင်ချင်လိုက်တာဗျာ … သိပ်လှတဲ့ … မြတ်ရဲ့အတွင်းပစဿစည်းလေးတွေကို မြင်ချင်လိုက်တာ … ပေါင်သားဝင်းဝင်းလေးတွေ … မြက်ခင်း ပါးပါးနုနုလေး … တောင်ကုန်းမို့မို့လေး … အပျိုစင် လျှိုမြှောင်လေး … မတတ်နိုင် … မမြင်ရတော့ … စမ်းကြည့်လို့ပဲ ရသည် … အတွေးထဲမှာတော့ … မြင်ရသည် … မြတ် သိပ်လှတယ် … ကျွန်တော်လည်း … ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်တယ် …
“ဟာာ … မောင်နော် … ဘာလုပ်အုံးမလို့လဲ … ဝတ်ထားကွာ … ရှက်စရာကြီး …”
မြတ် အသံတွေ တုန်နေတယ် … သူလည်း … သိမှာပါ … ကျွန်တော်တို့ ဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာ … ရင်တွေ တုန်နေလား … ချစ်သူ … သိပ်ချစ်တဲ့ ချစ်သူကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ … ဒီခရီးကို ကျွန်တော် သွားရမယ် … မျက်စိမမြင်လည်း … လျှောက်ရမယ် … မြတ်လည်း သိပါတယ် … ကျွန်တော် ချစ်တော့မယ်ဆိုတာ …
“မြတ် … အကျီလည်း ချွတ်လိုက်ကွာ …”
“ဟာ … ဟေ့အေး … ရှက်တယ်ကွာ …”
“မောင်မှ မမြင်ရတာ … မရှက်နဲ့နော် … ဒီနားကို နမ်းချင်တယ် …”
မြတ် ရင်နှစ်မွှာကို … လက်ညှိုးထိုးပြီး … တောင်းဆိုလိုက်တာ် … ဟင့် … လူဆိုးတဲ့ … မြတ် … အကျီချွတ်လိုက်တယ် … ကျွန်တော်လည်း ချွတ်လိုက်တယ် … အထိအတွေ့က … ရင်တသိမ့်သိမ့်ပဲ … အပျိုနဲ့ လူပျို … အဝတ်မပါပဲ … ထိလိုက်တာ ဖိန်းကနဲ ရှိန်းကနဲ … ကျွန်တော့်လက်တွေ မြန်လာတယ် … ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာတယ် … အရမ်းချစ်တယ် မြတ်ရယ် … မြတ်လည်း အရမ်းရင်ခုန်နေတယ် … မြတ် ကျွန်တော့်ကို အတင်းနမ်းတယ် … သိပ်ချစ်လွန်းတာလား … ရှက်လွန်းလို့လား … ကျွန်တော် မပြောတတ် …
ရင်ခုန်သံတွေ ပေါင်းစည်းဖို့ … ကျွန်တော်ကြိုးစားရအုံးမည် … မျက်စိမမြင်ပေမယ့် … ချစ်ချင်သည် … မြတ်ကလည်း … အိုအိုဟင်ဟင်နဲ့ … အလိုလိုက်သည် … သူလည်းရှက်ရှာမပေါ့ … ထိလိုက် … တို့လိုက် … လူးလိုက် … လှိမ့်လိုက်နဲ့ … မြတ် အပေါ်ကို … ကျွန်တော် ရောက်သွားတယ် … မြတ် … ရုန်းတယ် … ကျွန်တော် … မြတ် … ပါးလေးကို နမ်းတယ် … နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းတယ် … လည်တိုင်လေးကို နမ်းတယ် … ရင်သားလေးကို … ဖွဖွလေးနယ်ပေးတယ် … ချစ်တယ် … မြတ်ရယ် … အရမ်းချစ်တယ် …
မြတ်ကို နမ်းရတာ အားမရ … နှုတ်ခမ်းလေးကို … စုပ်နမ်းပစ်လိုက်တယ် … မြတ်လည်း ပြန်နမ်းတယ် … အောက်မှာလည်း … ချစ်စခန်း ထနေတယ် … မြတ်ပေါင်ကြားထဲမှာ … ကျွန်တော့်ဟာက … ဟိုထိုးဒီထိုး … ဘယ်ဝင်မလဲ … မြင်မှမမြင်ရတာ … အစိမ်းသက်သက် … လူငယ်တွေမို့ … ချစ်ရေးချစ်ရာ … မကျွမ်းကျင် … သူကလည်း အပျို … ကျွန်တော်ကလည်း လူပျို … ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိ … ဟိုထောက်ဒီထောက် … ဟိုပွတ် ဒီပွတ်နဲ့ … ရင်ထဲမှာတော့ … ရမက်ခိုးတွေ ဝေနေကြသည် … နှစ်ယောက်လုံး … ချစ်ခရီးကို အတူတူသွားဖို့ … အဆင်သင့် … ခက်တာက … မလုပ်တတ် … ဘယ်လို ထည့်ရမလဲဗျာ … မမြင်ရတော့ … ခက်လိုက်တာ …
မှတ်မိတယ် … လက်ညှိုးလေးဝင်သွားတဲ့နေရာ … ဒီနေရာကို … ကျွန်တော့်ဟာထည့်ရမှာ … ဝင်ပါ့မလား … မထင် … လက်ညှိုးလေးတောင် ကြပ်ညပ်နေတာ … ကျွန်တော့်ဟာဆို … မလွယ် … မလွယ်လည်း … ခရီးဆက်ရမှာပဲ … ကျွန်တော့်ဟာကို ကိုင်ပြီး … မြတ် ပန်းလေးကို … ပွတ်ပစ်လိုက်တယ် … မြတ် တုန်နေတာပဲ … ထွန့်ထွန့်လူးသွားတယ် … ဖြေးဖြေးတဲ့ … ကျွန်တော် သိပြီ … ဒီလိုပဲ လုပ်ရမှာ … သူယားလေ ထပ်ပွတ်လေ … အထက်အောက် … တခါ … နှစ်ခါ … သုံးလေးခါ … အရည်လေးတွေ စိုရွှဲကုန်တယ် … အရမ်းမောတယ် … မောင်ရယ် … တဲ့ … အထဲကို ဖိသွင်းကြည့်တယ် … မရဘူး … ကျွန်တော်သိတယ် … လည်ပြီး ချော် ထွက်သွားတယ် … တခါမရ … နောက်တခါပေါ့ … မြတ် … အရမ်းကြောက်နေတယ် … ကျွန်တော့်ကို ဖက်ထားတာ … အတင်း … မြတ် ကြောက်တာ လျော့သွားအောင် … လည်တိုင်လေးကို နမ်းလိုက်တယ် … ပိုဆိုးတယ် … အတင်းဖက်ထားတယ် … ငါမှားပြီနဲ့ တူတယ် … ထပ်ထည့်ကြည့်တယ် … မြတ် ပေါင်လေး ပိုဟသွားတယ် … တေ့ထားတယ် … ဝင်သေးဘူး … ခါးလေးကို အားထည့်ပြီး … နှစ်ချလိုက်တယ် … အားးးးးးးး
မြတ် အော်တယ် … ငိုတယ် … ရုန်းတယ် … တအားပဲ … မြတ်ကို ခပ်တင်းတင်းလေး ဖက်ပြီး … နမ်းပစ်လိုက်တယ် … လွတ်သွားမှာစိုးပါတယ် … မြတ် ပန်းလေးထဲ စဝင်သွားတဲ့ အရသာက … ဘယ်လို ပြောရမလဲ … အရမ်းကောင်းတယ် … လမ်းလျှောက်နေရင်း … သိမ့်ကနဲ … ကျင်းနက်ထဲ ပြုတ်ကျသွားသလိုပဲ … ကျွန်တော့်ဟာက … တထစ်ထစ်နဲ့ … မြတ် ပန်းလေးထဲ ဝင်သွားတယ် … ကြပ်တယ် … အရမ်းကြပ်တယ် … ပြုတ်တူနဲ့ ညှစ်ထားသလို စီးနေတာပဲ … နည်းနည်းအောင့်တယ် … မြတ်ကတော့ … အော်တယ် … ရုန်းမရတော့ ငြီးတယ် … တော်ပါတော့ မောင်ရယ် တဲ့ … ရှိကြီးခိုးပါတယ် …. တော်ပါတော့တဲ့ … အရမ်းနာတယ်တဲ့ …
ခက်တော့တာပဲ … မြတ်ရယ် … ကျွန်တော့်အတွက် … ရင်တသိမ့်သိမ့်ဆိုပေမယ့် … သူ့အတွက် … သေမတတ် နာကျင်စေသည် … ကျွန်တော် မရက်စက်ချင်ပါဘူး … မြတ်နိုးရသူလေးကို … ကြင်နာတဲ့အနေနဲ့ ပြန်ထုတ်လိုက်တယ် … ဟားးးး … ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ မြတ်ရယ် … ပြန်ထုတ်တော့လည်း … အတင်းဆွဲမထုတ်နဲ့တဲ့ … မြတ် နာမှာစိုးလို့ ဖြေးဖြေးလေး ထုတ်သည် … ထည့်သည် … ဒါတောင် မြတ်က …. တဟင်းဟင်းနဲ့ အော်သည် … အရမ်းနာတယ်တဲ့ … မြတ် ပန်းလေးထဲ ထည့်ထားပြီး … နည်းနည်းငြိမ်နေလိုက်သည် … ကြာကြာတော့မနေနိုင် … အားရပါးရ ချစ်ပစ်လိုက်ချင်သည် … လည်တိုင်လေးကိုနမ်း … ပန်းလေးထဲကို မွှေပေးလိုက်တယ် … ဖြေးဖြေးပေါ့ … တဟင်းဟင်းနဲ့ အဆင်ပြေသွားတယ် … လေးငါးခါလောက် အဝင်အထွက်လေး မှန်လာတော့ … အဝင်အထွက်က ခပ်သွက်သွက် …
ကောင်းပါတယ် … အရမ်းကောင်းတယ် … တခါမှ မခံစားဖူးတဲ့ … အရသာကို ခံစားမိတော့ … မြတ်ကို အရမ်းချစ်မိသွားသည် … ကျွန်တော့်ကို တကိုယ်လုံး ပုံချစ်တဲ့ … မြတ်ကိုလည်း … မြတ်နိုးသွားသည် … ချစ်တယ် … မြတ်ရယ် … စိတ်ကလေးက ထန်လာတော့ … နည်းနည်းလေး ကြမ်းပစ်လိုက်သည် … တချက် … ဆောင့်ထည့်လိုက်တော့ … ပလွတ်ကနဲ … အတားအဆီးကို ကျော်ဝင်သွားသည် … ဟာ … ကောင်းလိုက်တာ မြတ်ရယ် … တင်းပြည့်ကြပ်ပြည့် … အထဲကို ဝင်သွားသည် … ခုနကလည်း ဝင်ပါတယ် … အားမရ … တဝက်လောက်သာ ဝင်တော့ … အားမရ … အခုတော့ … ဝင်သွားပြီ … အဆုံးပဲ … မြတ်ရဲ့ ဆီးခုံလေးနဲ့ … ကျွန်တော့်ဆီးခုံ ကပ်သွားသည် … မြတ်ရဲ့ ရင်သားနုနုလေးတွေ … ကျွန်တော့်ရင်နဲ့ ကပ်သွားသည် … ခွာမရ … မြတ်က အခွာမခံ … အရမ်းနာတယ်တဲ့ … မောင် … အရမ်းရက်စက်တယ်တဲ့ … ကျွန်တော် ကြားဖူးပါတယ် … အပျိုပန်းလေး … ဘယ်လိုခူးရတယ်ဆိုတာ … အပျိုပန်းလေးထဲဝင်သွားရင် … ဒီလိုမျိုး ခံရခက်တတ်ပါတယ် …
“အရမ်းနာနေလား … ဟင် …”
“ဟင့် … မောင် မကောင်းဘူး … အရမ်းနာတယ် …”
“ပြန်ထုတ်လိုက်ရမလား … ဟင် …”
မြတ် … စိတ်ဆိုးသွားပြီလား မသိပါဘူး … အတင်းပဲ ဖက်ထားတယ် … မြတ်က ထုတ်နဲ့ဆိုပေမယ့် … ကျွန်တော်က ဆွဲထုတ်ချင်သည် … ထပ်ထည့်ချင်တာကိုး …
ချစ်တယ် မြတ်ရယ် … အရမ်းချစ်တယ် … မြတ်ပန်းလေးထဲက … ဆစ်ကနဲ ဆစ်ကနဲ … ညှစ်နေတယ် … ပေါင်တွေက ကားလိုက် စိလိုက်နဲ့ … ရုန်းနေတယ် … ဖြေးဖြေးလေး ဆွဲထုတ်လိုက်တယ် … မြတ် ငြီးတယ် … ဟင့် …
ထိပ်ဖျားရောက်တော့ … ဖြေးဖြေးလေး ပြန်ထည့်တယ် … တထစ်ထစ်နဲ့ ပြန်ဝင်သွားတယ် … မြတ် အတင်းညှစ်ထားတယ် … နာလို့လားဟင် … စိုရွှဲနေတဲ့ ချစ်ဝတ်ရည်တွေကြောင့် … အဝင်တော့ နည်းနည်းချောလာတယ် … ခပ်ကြပ်ကြပ် … ပန်းပွင့်လေးကို … ဆော့ကစားတော့ … မြတ်ငိုတာပေါ့ … လူကလည်း မနေနိုင် … စိတ်ကလည်း မထိန်းနိုင် … ခပ်သွက်သွက်လုပ်ပစ်လိုက်တယ် … ငိုပါနဲ့ ချစ်သူရယ် … မကြာခင်မှာ … ပန်းလေး ပွင့်တော့မှာပါ … ကျွန်တော့် စိတ်တွေ လေထဲလွင့်နေတယ် … အရမ်းကောင်းတယ် … ခံစားချက်က … ရင်သိမ့်တုန်မို့ … အောက်ပိုင်းက … ပိုသွက်လာတယ် … မြတ်ငိုတယ် … အော်တယ် … ကျွန်တော် အတင်းဆက်လုပ်တယ် … နည်းနည်း မောလာတယ် … ဖြေးဖြေးလေး … တချက်တချက် … ဆောင့်ကြည့်တယ် … အဝင်ကြမ်းတယ်တဲ့ … မခံနိုင်ဘူးတဲ့ … သနားပါတယ် … မြတ်ရယ် … ရင်ခုန်သံတွေက နှေးလိုက် မြန်လိုက် … စိတ်တွေက … ရေလှိုင်းတွေလို … တလိမ့်လိမ့်တက်လာတယ် … ကျွန်တော့် စိတ်တွေ ပေါက်ကွဲတော့မယ် … မြတ်ရယ် … မောင် အရမ်းချစ်မှရတော့မယ် …
မြတ်ကို ခပ်တင်းတင်းဖက်ထားရင်း … ဆက်တိုက် … ဆောင့်လိုက်မိတယ် … မြတ် လူးလိမ့်နေတာပဲ … မြတ်အသံမထွက်တော့ဘူး … မြတ်နှုတ်ခမ်းလေးကို … အတင်းဖိကိုက်ထားတယ် … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးက … ပြတ်ထွက်မတတ် … ကျွန်တော် လျှာလေးနဲ့ ကလိပစ်လိုက်တယ် … ဟင့် … တဲ့ … ရင်ခုန်သံတွေက … ပိုလို့ကျယ်လာတယ် … မြတ် အတင်းဖက်ထားတယ် … မြတ်အတင်းဖက်ထားတယ် … ကျွန်တော်လည်း … အတင်းဖက်ထားတယ် … ကြားလေသွေးလို့ … ဝေးမှာစိုးပါတယ် … ချစ်တယ် … မြတ်ရယ် … မြတ်ပန်းလေးက … တဇတ်ဇတ်နဲ့ … ညှစ်ပြန်တယ် … ကောင်းလိုက်တာ … မြတ်ရယ် … မြတ် အဲဒီလို ညှစ်ပေးရင် … ဘယ်လို ခံစားရမှန်းကို မသိပါဘူးဗျာ … အရမ်းကောင်းတယ် … ပန်းနုနုလေးက … ခပ်တင်းတင်းညှစ်တိုင်း … ကျွန်တော့်ရင်တွေ ပြောင်းဆန်ကုန်တယ် … ချစ်တယ် … အရမ်းချစ်တယ် … မြတ်ရယ် … ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်အတွေးထဲ ဘာမှမရှိတော့ဘူး … ဟိုးအမြင့်က ပန်းတိုင်ကို … မြတ်နဲ့အတူတက်နေတယ် … ဘေးနားမှာ တိမ်တွေ ဝေနေတယ် … လေနုလေးက … နွေးနေတယ် … နေရောင်ခြည်က ဖြာကျတယ် … ရောက်ပြီ … ဒီနိဗဿဗာန်ဘုံကို … ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီ … ဟာာာား … မြတ်ပန်းလေးထဲကို … အတင်းထိုးထည့်ထားရင်း … ကျွန်တော့် သွေးတွေ … အကုန်လုံး ညှစ်ပစ်လိုက်တယ် … ကောင်းလိုက်တာ … ကျွန်တော့်ရင်တွေ တသိမ့်သိမ့်တုန်နေတယ် … အသွေးအသားတွေ အကုန်လုံးက … ပွက်ပွက်ဆူပြီး … မြတ်ကို အတင်းဖက်ထားရင်း … တဇတ်ဇတ်နဲ့ … ကျွန်တော့်ကိုယ်လုံး … ငြိမ်သွားတယ် … လောကီဘုံရဲ့ အမြင့်ဆုံးရသကို … ကျွန်တော်သိသွားပြီ … မြတ်လည်း သိသွားပြီ …
“အရမ်းကောင်းတယ်နော် … မြတ် …”
“ဟင့်အင်း … အရမ်းနာတယ် …”
“တော်ပါ … မောင် … အားကြီးဆိုးတယ် … ဟင့်”
ကျွန်တော် … မြတ်ကို … ထွေးပွေ့ထားရင်း … လက်ရှိအခြေအနေလေးကို … ကျေနပ်လို့နေပါတယ် … ချစ်တယ် မြတ်ရယ် … သိပ်ချစ်တယ် … မြတ်ကို ထွေးပွေ့ထားရင်း … နမ်းလိုက်တယ် … သူလည်း ပြန်နမ်းတယ် … ရင်ထဲက ရမက်မီးလေးက … ငြိမ်းမှမငြိမ်းသေးတာ … လောင်စာအားနည်းသွားလို့ … မီးညွန့်ကျိုးသွားတယ် … အခု … ဆနဿဒတွေက … ထကြွလာတယ် … ရမက်မီးက … ပြန်တောက်လောင်လာတယ် … မြတ်လည်း … ဖြစ်ပါတယ် … သူလည်း … ချစ်ချင်နေတယ် … ချစ်ကြတာပေါ့ … နောက်တခါ …
ဒီတခါ … မြတ်ကို ချစ်ရတာ … ပိုအားရတယ် … သိမ့်ကနဲ ပန်းလေးထဲကို ဝင်သွားတာ … သိပ်မခက်ခဲတော့ … မြတ်ကို ချစ်ရတာ … အားရတယ် … မြတ်ကလည်း … အားရပါးရ ကြိုဆိုတယ် … အချစ်မြစ်ထဲမှာ … ကာမလှေလေးနဲ့ … အစုန်အဆန် လှော်ခတ်ပစ်လိုက်တယ် … ရင်ခုန်သံ တဒိန်းဒိန်း … ငြီးငြူသံလေးက … တအိအိနဲ့ … ချစ်တယ် … မြတ်ရယ် … ဒီတခါဝင်တော့ … မြတ်ပန်းလေးကို … အတင်းမွှေတယ် … မြတ် ကျွန်တော့်ခါးကို … ဖက်ထားပြီး … အော်တယ် … ငြီးတယ် … မြတ် ချစ်လွန်းလို့လား … မသိပါဘူးဗျာ … အောက်ကနေ … ပင့်ပင့်ပေးတယ် … ညှစ်တယ် … အရမ်းညှစ်တယ် … သူညှစ်ရင် … ကျွန်တော် ဆောင့်တယ် … သူမညှစ်ရင် … ကျွန်တော်မွှေတယ် … ချစ်ရတာ … အားမရဘူးဗျာ … မောလာတယ် … ခဏလေး ရပ်လိုက်တာ … မြတ် မကျေနပ် … သူ့ကို ကျေနပ်အောင် … နဖူးလေးကို နမ်းတယ် … ပါးလေးကို … နမ်းတယ် … နှုတ်ခမ်းလေးကို ငုံစုပ်ပြီး … ဆက်တိုက် ဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် … ကျွန်တော့်အချစ်ကြမ်းကြမ်းကို … သူ မခံနိုင်ဘူး … တအားအော်တယ် … မတတ်နိုင်ဘူး … ချစ်ချင်တယ် … မြတ် … ငိုတယ် … ကျွန်တော်ကို အတင်းဖက်ထားတယ် … အတင်းညှစ်ထားတယ် … အတင်းညှစ်လေ … အတင်းထည့်လေပဲ … ခပ်တင်းတင်း … ပန်းနှစ်လွှာကြားထဲမှာ … အဝင်အထွက် ခပ်သွက်သွက်နဲ့ … ချစ်တမ်းကစားတော့ … ပန်းလေးက … ငိုတာပေါ့ … မျက်ရည်တော့ ထွက်မလာဘူး … ချစ်ဝတ်ရည်တွေ ထွက်ကျလာတယ် … ဒလဟော …
နွေးတယ် … ပူကနဲ … နွေးသွားတယ် … ကျွန်တော်သိပါတယ် … မြတ် ချစ်ဝတ်ရည်တွေ သွန်ချပစ်လိုက်ပြီ … ကျွန်တော်ကတော့ … ရပ်လို့မရသေး … ပန်းတိုင်ကို … မောင်ရောက်အောင် … သွားရအုံးမည် …
ရမက်လှေလေးကို … ခပ်ပြင်းပြင်းလေး … လှော်ပစ်လိုက်တယ် … မောတော့ မောပါတယ် … ဒါပေမယ့် … ကြိုးစားပြီးလှော်တယ် … မြတ်လည်း … လိုက်ရှာပါတယ် … အသွေးအသားတွေက … ထကြွလွန်းတော့ … ရင်ခုန်သံတွေက … မြန်လွန်းနေတယ် … မြန်ပလေ့စေ … ချစ်တာကိုး … အဝင်အထွက်က ခပ်သွက်သွက် … မြတ် မနေနိုင် … ပန်းလေးက … အလည်လာတဲ့ … လူဆိုးကို … အတင်းဖမ်းထားသည် … မရ … ချစ်ဝတ်ရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေတော့ … ဖမ်းရခက်သည် … မြတ် အားမရ … ရအောင်ဖမ်းကြည့်ချင်သည် … အတင်းကော့ထားပြီး … ဖမ်းသည် … မိတော့မိသည် … တစကဿကန့် … ဖမ်းမိတော့လည်း … ခဏတာ … ပြန်လွှတ်လိုက်သည် … ကျွန်တော် မွှေလိုက်တာကိုး …
“အို … ဟင့် … မောင် … တော်ပါတော့ … မြတ် မခံနိုင်တော့ဘူး … အို … ဟင့် …”
“ပြောလို့လည်း နားမထောင်ဘူး … အရမ်း မမြန်နဲ့ကွယ် … အသဲတွေ ပြောင်းဆန်ကုန်ပြီ … ဟာာာ … ဟာာာ … ဟာာာ … အီး ….”
ကျွန်တော် ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ သိပ်မလိုတော့ … မြတ်ကို … အတင်းချစ်တော့သည် … မြတ် … ငိုတောင်ငိုသည် … ကျွန်တော် မတရား … မြတ်နာမှန်းသိရက်နဲ့ … ဖြေးဖြေးမလုပ် … ကျွန်တော်လူဆိုးလေလား … ဖြစ်နိုင်ပါတယ် … ကျွန်တော် ရပ်လို့မရတော့ဘူး … စိတ်က ဒီထက်မြန်ချင်တယ် … ခနဿဓာကိုယ်က … မလိုက်နိုင် … မြတ် ပန်းလေးက … ပွင့်အာနေသည် … အောက်မှာ ကော့ပျံနေသည် … မြတ်သိပ်ချစ်တာ … ကျွန်တော်သိသည် … ကျွန်တော့်အဝင်အထွက် ခပ်ကြမ်းကြမ်းကြောင့် … ပန်းလေးထဲက … အသံဗလံတွေ … လျှံကျလာတယ် … ကျွန်တော် ပြီးတော့မယ် … ဆောင့်တယ် … တချက် … နှစ်ချက် … သုံးလေးချက် …
ကောင်းလွန်းလို့ … စိတ်မထိန်းနိုင် … အပျိုလေး မြတ်ကို … အားရအောင် ချစ်ပစ်လိုက်တယ် … မြတ် ပန်းလေးက … အတင်းအတင်း ညှစ်ထားတယ် … သူနာရှာတယ်ထင်ပါရဲ့ … နောက်ဆုံးမငြီးတော့ဘူး … သူ နှုတ်ခမ်းလေးကို … ကိုက်ထားတယ် … ကျွန်တော်သိပါတယ် … အံကြိတ်ပြီး … ချစ်သမျှကို … အလိုလိုက်ရှာတယ် … ခဏလေးပါ … မြတ်ရယ် … ခဏလေးပါ … မောင်ပြီးတော့မယ် … အဝင်အထွက်က … အမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့ … မြတ် ပန်းလေးကို … ဆော့ကစားနေသည် … ကျွန်တော့် နားထင်တွေ ပူလာတယ် … ရင်တွေ ပူလာတယ် … တဇက်ဇက် ဆောင့်ရင်း … မြတ်ကို မညှာတော့ … အားကုန် ချစ်ပစ်လိုက်တယ် … ပြီးပြီ … ကျွန်တော် ပြီးပြီ … မြတ်ကို … ခပ်တင်းတင်းဖက်ထားရင်း …
“ကောင်းလိုက်တာ … သီရိရယ် … ကောင်းလိုက်တာ …”
“ဘာ … ဘာပြောတယ် …”
မှားသွားတယ် … ကျွန်တော် မှားသွားတယ် … ဘာလို့ သီရိကို တမ်းတရတာလဲ … မြတ် … အရမ်းငိုတယ် … ကျွန်တော့်ကို တွန်းထုတ်တယ် … ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းဘူး … အတင်းလိုက်ဖက်တယ် … အတင်းတွန်းထုတ်တယ် … ဘယ်လို ချော့ရမလဲဗျာ … ကျွန်တော် မှားသွားတယ် … ဘာဖြစ်လို့ … သီရိကို တမ်းတရတာလဲ … ကိုယ့်ကိုချစ်လို့ တကိုယ်လုံး ပုံပေးတဲ့ ချစ်သူရှေ့မှာ … တခြားတယောက်ကို တမ်းတတော့ … မြတ် စိတ်ဆိုးတာပေါ့ … စိတ်နာမှာပေါ့ …
“မောင် ပြောတော့ … မြတ်ကို ချစ်တယ်ဆို … အီး …”
“မဟုတ်ပါဘူးမြတ်ရယ် … စကားမှားသွားတာပါ …”
“ဘာမှားတာလဲ … ဒီကတော့ ချစ်လိုက်ရတာ … အီး … ဟင့် …”
ကျွန်တော့်မှာ … ပြောစရာ စကားမရှိ … သေချင်တယ် … ကျွန်တော် သေချင်တယ် … ဘာဖြစ်လို့ သီရိကို တမ်းတရတာလဲဗျာ …
“သွား … နင်က … ငါ့ကို ချစ်တာမှ မဟုတ်ပဲ … ငါကတော့ နင့်ကို ချစ်လိုက်ရတာ … နင်ကတော့ … ငါ့ကို … ငါ့ကို …”
မြတ် ငိုတယ် … အရမ်းငိုတယ် … သူ ရင်နာမှာပေါ့ … ကျွန်တော့်လို မျက်စိမမြင်ရတော့မယ့် သူတယောက်ကို … ချစ်လွန်းလို့ … ပုံအပ်လိုက်တယ် … သူ ကျွန်တော့်ကို အရမ်းချစ်တာ … ကျွန်တော် သိပါတယ် … ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို ချစ်တယ် … ဘာဖြစ်လို့ သီရိကို တမ်းတရတာလဲ … ဟာဗျာ … အရမ်းစိတ်ညစ်တာပဲ … ကျွန်တော် သေချင်တယ်ဗျာ …
မြတ် … အဝတ်အစားတွေ လဲတယ် … ထွက်သွားတယ် … ကျွန်တော် ငိုနေတယ် … နောက်ကနေ လိုက်ဆွဲတယ် … အတင်းတွန်းထုတ်ပစ်တယ် … မြတ် … ကျွန်တော့်ကို သိပ်စိတ်နာသွားတယ် … ကျွန်တော် မှားပါတယ် … အရမ်းမှားတယ် … အစကတည်းက … မြတ်ကို … ချစ်ခွင့် မပန်ခဲ့ရင် … မြတ်ရင်နာမှာ မဟုတ်ဘူး … ကျွန်တော် ငိုတယ် …
ကျွန်တော် ဘဝကို ရှေ့မဆက်ချင်တော့ဘူး … အဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ် … မျက်စိဆုံးရှုံးတယ် … အချစ်ကို ဆုံးရှုံးတယ် … ကျွန်တော့် သေချင်တယ် … မနေချင်တော့ဘူး …
ယုံကြည်တာတွေ အားလုံးစွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ် …
တို့အချစ်က ဆုံနိုင်ဖို့သိပ်မလွယ် …
ရေမှာအရုပ်ရေးမိသလိုပဲ အချစ်ဟာအရာမထင်တယ် …
ပျော်မယ်ဆိုနေခဲ့ပေါ့ ချစ်ရတဲ့သူရယ် …
အရှုံးပေးခဲ့ပြီ ကျေနပ်တော့ကွယ် …
ရေလိုဘဝအေးမြပါစေအချစ်ရယ် တို့ဆုတောင်းပါတယ် …
ပန်းခင်းလမ်းပဲ လျှောက်ပါ အချစ်ကလေးရယ် …
ခရောင်းတောထဲက တို့ကိုထားခဲ့ကွယ် …
ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ အဖြစ်ဟာအိမ်မက်ပဲ …
မင်းဘဝနေ့သစ်ရောက်ပြီ မေ့လိုက်ကွယ် …
အို — မေ့လိုက်တော့ အချစ်ကလေးရယ် …
ကြင်နာတာတွေအားလုံး မေ့ပစ်လိုက်ပါကွယ် …
နိုးတဝက် တို့အိပ်မက်လေးပျက်ပြယ် …
နာကျင်နေတဲ့ နှလုံးသားငိုနေလည်း … မင်းပျော်ပါစေကွယ် …
ရင်မှာ မျှော်လင့်ထားသမျှ ဆုံးရူံးခဲ့ပေမယ့် မင်းဘဝအတွက် ကိုယ်ကျေနပ်မိတယ် …
ဒါတွေ တစ်နေ့မင်းနားလည်မယ် အချစ်ရယ် နှုတ်ဆက်သွားပါကွယ် …
ထူးအိမ်သင် သီချင်းလေးကို ငြီးပြီး … ကျွန်တော် တအားငိုတယ် … ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ် … ကျွန်တော့်လက်ကောက်ဝတ်က … အကြောတွေကို ဓါးနဲ့ လှီးပစ်လိုက်တယ် … သွေးတွေ ထွက်လာတယ် … အများကြီး … ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာတယ် … သွေးတွေ ထွက်တာ များလာတော့ … တဖြေးဖြေး ကျွန်တော် အားနည်းလာတယ် … အသက်ရှုမဝတော့ဘူး … နတ်သမီးပေးတဲ့ … ချစ်လက်ဆောင်ကို … အတွေးထဲမှာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ထည့်ပြီး … သိပ်ချစ်ရတဲ့ မြတ်ရေ အမြဲပျော်ပါစေ … သွားပြီ … မြတ်ရေ … သွားပြီ …ကျွန်တော် လောကကြီးကို နှုတ်ဆက်လိုက်တယ် …
နွေရာသီရဲ့ … နေ့လည်ခင်းမှာ … ကျွန်တော် … ရင်ခုန်သံတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားတယ် …
ဆုံခဲ့ဖူးတဲ့ … တစ်ညတာ